Ahịa Review nke Mmekọahụ lsmụaka
Mmekọahụ Mmekọahụ Site Ahịa
$ 500 - $ 800 nwa bebi nyocha
$ 800 - $ 1200 nwa bebi nyocha
$ 1200 - $ 1500 nwa bebi nyocha
$ 1500 - $ 1800 nwa bebi nyocha
$ 1800 - $ 2200 nwa bebi nyocha
$ 2200 - $ 2500 nwa bebi nyocha
$ 2500 - $ 3000 nwa bebi nyocha
All Mmekọahụ Mmekọahụ Nyocha
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụ ụmụ bebi anyị, mana enwere nsogbu ụfọdụ na-enye gị nsogbu. Nwere ike ịbịa ebe a ka ị hụ nyocha ndị ahịa ndị ọzọ nke ụmụ bebi. Ma eleghị anya, echiche ha banyere ngwaahịa anyị nwere ike inyere gị aka. N'ezie. Anyị na-anabata ndị na-azụ ahịa ọ bụla ịhapụ echiche gị bara uru ebe a. Otuto gị ga-abụ nkwupụta kasịnụ anyị. Anyị ga-ejikwa ọrụ gị n'ọrụ nabata aro gị. Anyị na-atụ anya iwetara ndị ahịa anyị ọrụ ka mma.
165CM Athena Short Hair Full Size Style C Cup Mmekọahụ Doll Nyocha
Dị ka akwụkwọ mmado ọzọ gosipụtara, nwa bebi a mara mma nke ukwuu. Mana ọ dị ka ndị zụtara ya nwere obi ụtọ ma chekwaa ụfọdụ ego, ọnụ ahịa nwa bebi ahụ dịkwa ihe dị ka $ 1,500. Enwere m mmasị na nkọwa na àgwà niile ha gbakwunye na ngwaahịa ahụ. Ezigbo ọrụ ndị ahịa na azịza ajụjụ ngwa ngwa. Gwọ ahụ dịkwa ukwuu. Na ahụmahụ m, ọtụtụ ụmụ bebi nke àgwà a dị oke ọnụ. Ọ dịka ịzụrụ ọkara $ 2,000 onu ogugu nwoke! Ezigbo azụmahịa, nnukwu bebi, na ọrịre buru ibu!
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 03:01:24 site n'aka Uria Wright
Gụọ Nyocha Product Details
158CM Eunjin Black Hair Dị Ọcha Silicone Style Ọkachamara Mmekọahụ Doll Nyocha
Nke a bụ agwa m agwa m nke abụọ. Nke a gbawara onye ọzọ. Ezigbo ego bara uru. Ọrụ sitere na ụlọ ọrụ ahụ abụghị nke abụọ !! Nwa bebi mbu (nke sitere na ụlọ ọrụ ọzọ) were ihe dịka ọnwa abụọ ịbịa ebe a, na ọkpọ ya esighi ike dịka nke a. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ nwa bebi, enwere m afọ ojuju na nzụta a? Egbula iji ụlọ ọrụ a. Ha na-arụ ọrụ nke ọma ebe ahụ. Maka ihe niile ọzọ !! Hụrụ ya n'anya! Jide n'aka na ịlele ha niile onu ogugu nwoke ese foto nke ọma. Nke ikpeazụ bụ ihe ị ga-enweta. Biko rịba ama otú o si adịghị mma dị ka foto gara aga. Naanị ịdọ aka ná ntị.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 02:57:52 site Christiana
165CM Salome Ọmarịcha Ọdịdị RZR Style D Cup Mmekọahụ Doll Nyocha
Nwa bebi a dị mma karịa mkpọsa. Ọ bụ iwu na eziokwu, ọkpụkpụ ahụike silicone nke ahụike, ma na-akpọsa ya n'ụzọ zuru ezu dịka mgbasa ozi. Na mgbakwunye na nke a, njem dị oke ọsọ ma kpachara anya (enweghị aha ma ọ bụ foto dị na igbe). Mana ka mma, onye na-ere ahịa dị ezigbo mma na nkwukọrịta. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịrịọ maka bebi ahaziri iche ma ha ga-emere gị ya. Naanị jide n'aka na ị zitere ha ozi. E merụghị nwa bebi m ahụ, na dịka m rịọrọ, omenala niile m rịọrọ na email dị ọsọ ọsọ, ọ bịara ngwa ngwa. Onye na-ere ahịa na-aza ngwa ngwa, na-emeghe ka nkwurịta okwu, ma na-enye gị ihe ịchọrọ. Naanị cheta ịkọwapụta. Naanị mmetụta ọjọọ nke a onu ogugu nwoke dị arọ (dị arọ nke ukwuu), mana nke a dị m mma n’ihi na ịdị arọ ya na-eme ka ọ nwekwuo ezi uche ma sie ike.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 02:54:28 site Cedric Harper
160CM Kitto Texture Visible Japan Style D Cup Mmekọahụ Doll Nyocha
Kpamkpam uru maka ego. Wig m ọlaedo ewetaghị ya, mana o nwere wub auburn. O nwekwara ikpo oku na oghere na akwa ocha, nke dabara adaba. Naanị ihe m mere bụ na ọ nwere ike ịdịgide karịa, mana ọ ka bara uru. Agwara m ụlọ ọrụ ahụ ma gbanwee ya. Ha mere ya n’enweghị mgbagha ọ bụla. N'ihi mgbanwe ndị a, a na-eche na ọ ga-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa iji rute ebe a, nke ọma, site na ụbọchị mbụ m nyere ya iwu, ọ bịarutere n'ime ụbọchị 8. Ihe niile m rịọrọ! Ka m gwa gị ... onu ogugu nwoke dị nnọọ nro, sexy na afọ ojuju!
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 02:50:27 site na Jack Craigie
160CM Dora Black Hair Eshia E Cup Mmekọahụ Doll Nyocha
O yi wig ojii (m ka na-achọ ịchọpụta otu esi eji / ọcha / ịke ezi) yana akwa ọcha Sailor Moon / nurse mini skirt, a n'ihu tie-ịkpụ akuku n'elu, ogwe aka straps na nurse okpu ụdị okpu. E nyekwara m iwu uwe ndị ọzọ (uwe niile pere mpe pere mpe, edepụtara nsonaazụ ya na ntuziaka ntuziaka). Ara ya buru ibu ma dikwa ndu, mana enwere ike iji akwa ahu mee maka elu elu. M nwere ike ikwu na-ezere gabiga ókè mgbagwoju ma ọ bụ uko n'elu, gụnyere aka uwe, n'ihi na ọ nwere ike isi ike slide ihe na onu ogugu nwokeOgwe aka n’enweghi ehulata onodu ha. Loose ma ọ bụ na-agbanwe ihe ndị kasị mma maka n'elu.
Addbọchị Ejiri: 2020-04-07 02:46:58 site Bowman
160CM Caroline Short Brown Hair Realistic Style Mma Ara Mmekọahụ Doll Nyocha
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe eji egwuri egwu iji mejuo agụụ mmekọahụ gị ọtụtụ oge n'ụbọchị (Agaghị m ekpe ikpe), mgbe ahụ, nke a nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kacha mma, naanị n'ihi na ọ na-esiri ike ịkwaga ya ma hichaa ya (ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ gaa n'ihu Ruo ogologo oge, nke a bụ ihe kwesịrị). Ime obere mgbanwe na ọnọdụ ya na ibugharị ya pụtara ibuli ya (ihe niile dị kilogram 59) ma debe ya ma jiri nwayọ wepu aka ya. N'ọnọdụ ọ bụla, maka m, ọrụ a bụ echiche efu karịa egwuregwu ụmụaka, n'agbanyeghị onu ogugu nwoke maa nye mmekọahụ ụmụaka.
Addbọchị Ekere: 2020-04-07 02:43:30 nke Armand
160CM Yasuko Black Hair Joint Japan Style Human Finger Sex Doll Nyocha
Akụkụ kachasị mma gbasara mpempe akwụkwọ a bụ ịhazi ya. O doro anya, ị nwere ike ịzụta uwe ọ bụla ịchọrọ, mana ndị na-emepụta ga-eme ọtụtụ isi dị iche iche, yabụ ị nwere ike ịhọrọ nke kachasị amasị gị na wigs ọ bụla ị nwere ike ịchọta. Onye nrụpụta ahụ ga-atụlekwa ụdị ụda anụ ahụ gị, agba anya na obere ihe ndị ọzọ. Emere m ụfọdụ arịrịọ dị mfe, ndị a dịkwa mfe, yabụ anaghị m ama etu ha siri dị njikere maka omenala onu ogugu nwoke (na-enweghị ego agbakwunyere).
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 02:40:03 site na Ingemar Blake
157CM Simona Yellow Hair Student Student Style Mmekọahụ Doll Nyocha
Tụ, mbupu, customization na ahịa ọrụ niile dị ukwuu. Igbe buru ibu (nke nwere ike isiri ike iburu, ya mere kwadebe maka ibuli elu) rutere n'ọnụ ụzọ ụlọ m kama ịga n'ihu ụlọ nzukọ ahụ, nke dị mma. Nke a bụ ndụ nwa bebi mbụ m nwetara, ọ bụ nnukwu ọrụ. Ọ dị arọ karịa ụfọdụ bebi ndị ọzọ edepụtara n'akụkụ ebe a, ma m chere na ọ ka mma ma bụrụ ihe ezi uche dị na ya. Ọ bụrụhaala na ị nabatara ya nke ọma ma kwado ịdị arọ ya, ị nwere ike iji ya mee ihe ọ bụla. Ejila aka ya ma ọ bụ ụkwụ ya, gbalịa ịchụsasị etiti ike ya na ịdị arọ ya, n'ihi na ijide ebe maka ibuli ga-eme ka akpụkpọ ahụ. onu ogugu nwoke dọwara ọkpụkpụ ígwè ahụ.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 02:35:30 site Fitch Quiller
146CM Sheila Long Hair Asia Style Nnukwu ara Mmekọahụ Nyocha
Nwa bebi ahụ mara mma, mana o were obere oge. N'ozuzu, m afọ ojuju na ya. N'ezie ọ dị mma karịa foto ahụ. Naanị ihe ndọghachi azụ m chọrọ ikwu bụ na etinyeghị ikpu na oghere ike n'ụzọ ziri ezi n'otu akụkụ ahụ ụmụ nwanyị. Imirikiti oghere ndị dị omimi na-adị n'agbata ntì ihu, a na-etinye nwa bebi ahụ n'okpuru ya. A na-etinye oghere onu ahihia n'okpuru okpuru. Ọ gwụla ma e mere mgbanwe ndị a, ọnọdụ nke nkasi obi na ihe ụtọ nwere oke. O yiri ka onye rụrụ nwa bebi ahụ enwebeghị mmekọahụ ọ bụla ma ọlị na nwanyị. Na mkpokọta, ọ na-arụ ọrụ ahụ, yana onu ogugu nwoke mara mma.
Addbọchị Added: 2020-04-07 02:30:30 by
158CM Kimiko Brown Hair Japanese Style Nnukwu ara Mmekọahụ Nyocha
Onye na-ere ahia nyere aka nke ukwuu ma ọsọ ụgbọ mmiri gafere atụmanya. Gwa nkọwa na ntuziaka. Maka onye ọ bụla nwere mmasị ịmalite nchịkọta, nke a bụ ezigbo nwa bebi mbụ. Ọrụ ndị ahịa dị ezigbo mma dịka m tụrụ anya ya. Ọ bụrụ na ọ bụ ọkpọ bebi, a ga-enwe usoro mmụta mgbe ị na-agagharị ma na-edobe ya. Ee, ọ dịtụ ntakịrị, mana afọ juru ya nke ukwuu. Zigara m foto na vidiyo, mana enweghị m ike ịnweta nkwado. Ha nọgidere na-agba m gburugburu. Achọrọ m ịzụta karịa onu ogugu nwoke site na ụlọ ọrụ a.
Addbọchị Ekere: 2020-04-07 02:26:22 nke Landon dere
170CM Snow Lotus Grey Hair Chinese Girl Style Obere ara Mmekọahụ Doll Nyocha
O ruru ego ahụ. Ọ ga-adị iche na foto a, mana ama m na ọ ga-abata ya. Ka o sina dị, ọ ka dị oke mma ma na-atọ ụtọ. Dịka e kwuru na okwu ọzọ, etinyeghị oghere ya n'ụzọ ziri ezi, mana ị ka nwere ike ịchọta ha. Ọ siri ezigbo ike. Obere mbọ ịmegharị. Enweghị afọ ojuju na ọnụahịa ọnụahịa a, mana ị kwesịrị ịma ihe ga-eme. Zipu ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ọmarịcha ngwaahịa. Dị ka e kwuru n'elu. Enweghị ntụpọ ma ọ bụ nsogbu. Jiri obi ike zụta. Nnukwu ihe ọnụahịa. Ọ dị nnọọ arọ karịa ka m chere. Mmekọahụ Mmekọahụ ga-jidere dai si ọchịchịrị uwe.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 02:20:32 site n'aka Gordon
145CM Shannon Black Hair EVO Style Pink egbugbere ọnụ Mmekọahụ Doll Nyocha
M ji ndidi soro ngwugwu ahụ ruo mgbe ọ rutere n’ụlọ m. Emere m ọtụtụ nnyocha na tpe dolls tupu ịzụrụ nke a, aghaghị m ịsị na enwere m afọ ojuju na nsonaazụ. Nwa bebi ahụ enweghị ntụpọ. Ara ya mara mma ma na-agbanwe agbanwe, ihu ya dịkwa mma. Enwere m olileanya na ọ nwere anya na-acha anụnụ anụnụ kama aja aja. Ọ dị arọ, yabụ ọ bụrụ na ị na-ezube ịzụrụ ya, jikere maka mmega ahụ dị mma. M na-atụ aro ka ị gbatịa. Mana nke a abụghị nnukwu ihe. M ga-asị na ọnụ ahịa ya zuru oke. Aka ya dị nro dị nro, na n’uche m, ọ ka ya mma onu ogugu nwoke na mgbasa ozi. Ana m akwado onye na-ere ahia a ma nwee olile anya na ha nwere ike nye m anya ọhụrụ.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 02:16:12 site n'aka Bob Bertie
145CM Lazuli Yellow Hair European Style Cartoon EVO Mmekọahụ Doll Nyocha
Abụ m onye manga na-amasị m na 18 na Dragon Ball. Nwa bebi a weghachiri nkọwa niile. Daalụ urdolls. Enweghị m mkpesa na agbanyeghị ma ọ na-eju m anya na ndị ahịa kachasị mma na ọrụ ahụ n'onwe ya. Onye niile na-akpọtụrụ ya na-anọrọ ma jide n'aka na ihe niile dị n'usoro, ha zigara wig ma ọ nweghị ndụmọdụ anya, ihe niile dị ngwa ngwa karịa atụ anya ma ọ bụ ntuziaka. Ma ihe onu ogugu nwoke ya onwe ya, ọ karịrị ihe niile ị tụrụ anya ya, ọ bụ ezie na ọ na-atọ ụtọ. Maa kwado ya.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 02:11:39 site Washington
155CM Dana Dierser Short Hair Super Soft Style Dị Ọcha Silicone Sex Doll Nyocha
Nke a bụ ngwaahịa bebi dị elu. O juru m anya nke ukwuu na nkọwapụta ya. Mgbe m mechara nyocha n’ime ọnwa ole na ole gara aga, achọpụtara m na nke a bụkwa ezigbo ọnụahịa. Maka ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ gbasara ngwaahịa a, urdolls na-enyekwa ezigbo ọrụ ndị ahịa. Ndi ahia juru afo. Ọ dị obere maka m, mgbe ahụ enwere m mmasị n'etiti na ebe a na-agbanye ya, n'ihi na ọtụtụ n'ime gị nwere ike ịmasị ụdị ihe ahụ, ruo ugbu a ọ dị ka nnukwu ụlọ ọrụ, ọnụahịa dị ukwuu, nke na-akpali agụụ mmekọahụ, echere m onu ogugu nwoke ga-abụ oge dị mma, mgbe ịchọrọ onye ị ga - anọnyere gị lol.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 02:06:04 site na Monroe
160CM Miyuki Black Hair EVO Style F Cup Mmekọahụ Doll Nyocha
M ga-asị na m gburugburu ihe ndị a. Mana n'eziokwu, nke a bụ nhọrọ dị mma. Ọ ga - abụ nnukwu nwa bebi, obere nwa nwoke m bụ 6 ụkwụ 4 mana mụ na nwanyị nwere mmekọrịta afọ ole na ole gara aga na ọ bụ 5 ụkwụ 1 yabụ m kwuru ihe ọ bụla wee nweta ya n'ụzọ ọ bụla. Ọ dị ezigbo ụtọ na sexy. N'ihi na abụ m onye mbụ onu ogugu nwoke, ọ dị ukwuu na ca n na-eche ịnọnyere ya. Enwere m mmasị n'echiche ụlọ ọrụ na oghere ị chọrọ inyere aka n'akụkụ niile. Enwetara m email ha.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 02:01:07 nke Rodney
160CM Bet Yellow Hair Dollhouse 168 Style Big Ass Mmekọahụ Nyocha
Ọ bụzi nke m ugbu a! Ọnụahịa mbupu dị ngwa ngwa, enwetara m ngwongwo m chọrọ n'ime ihe na-erughị ụbọchị 15. Mgbe m natara ya, ọ bụ nnukwu igbe, na ngwaahịa ndị dị na igbe ahụ edeghị akara. Mgbe m meghere igbe ahụ, achọpụtara m na echekwara nwa bebi ahụ nke ọma na-enweghị mmebi ọ bụla. Akpụkpọ anụ bebi ahụ dị ezigbo nro. Otú ọ dị, enwere obere mmanụ. Mana ọ baghị uru ma ị jiri ya mee ihe. Mgbe ọgwụgwọ talc gasịrị, griiz ahụ ka mma nke ukwuu. Njikọ nke onu ogugu nwoke na-agbanwe agbanwe ma nwee ike itinye ya n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ọ bara uru ikwu na ọrụ ndị ahịa dị ezigbo mma. Obi dị m ezigbo ụtọ ịzụ ahịa.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 01:56:14 nke Arthur Webb dere
150CM Jessica Red Hair European Style Nnukwu Egbugbere ọnụ Mmekọahụ Nwa Nyocha
Ezigbo uru maka ego. Akpụkpọ ya na-adị ukwuu ma ọ mara mma nke ukwuu. O nwere ike bụrụ na o tolitere, ihu ya ga-aka nka. N'ihe niile, ọ dị mfe iji ma jiri nlezianya chekwaa. Ga-akwado onye ọ bụla. Gwọ bụ ọzọ dị ịtụnanya mma. Nke a bụ aghụghọ ejiri ihe ndị a mee -> starch ọka bụ ezigbo enyi gị. Echefu talcum ntụ ntụ. Mgbe ịsachara ahụ, akpụkpọ ahụ siri ike obere imetụ aka. Tinye starch ọka iji mee ka anụ ahụ dị nro. Y’oburu na ijighi n’aka ijikwa 150cm zuru oke onu ogugu nwoke, a na-atụ aro otu n'ime ha.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 01:51:58 site n'aka Stanley
150CM Eirian Grey Hair Japanese Style Nnukwu ara Mmekọahụ Mmekọahụ
N’agbanyeghị na ọ dị arọ nke ukwuu, ọ dị arọ. Obi dị m ụtọ na m nwetara nke a. Aga m enweta nwa bebi zuru oke, mana anụrụ m na ha siri ike ijikwa. Enwere m ike iche otu nwa bebi nwere aka na ụkwụ nwere ike ịdị arọ. Nke a nwere mgbịrịgba ọkpụkpụ ọla na isi dị arọ. Enweghị mkpesa ọ bụla. Abịa na igbe abụọ, mana ọbụlagodi igbe izizi ka a na-ekwu na a ga-eme na China. Otu wig dị ogologo ntutu-nke ọzọ na-egbutu ya, mana m ga-egbutu akụ m iji hụ anya ya. Ọ dị ka ezigbo, njirimara ya dị ezigbo mma, ara ya kwụ chịm, mara mma onu ogugu nwoke nwere obere ịnyịnya ibu, zuru ezu, ị maara.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 01:47:19 site na Wilde
150CM Akira Grey Hair Japanese Style EVO Version Mmekọahụ Doll Nyocha
Nke a dị mma. N’adịghị ka ụfọdụ rọba ọnụ ala na-esi isi ka ụlọ ọrụ kemịkal. Ihu mara ezigbo mma, na ezigbo nku anya nwere eyeliner. Onwere ihe edere n’isi ma oburu na ichoro gi na aru gi ahu. A na-agbatịkwa olu n'arụ ahụ ka ị nwee ike ịgbanye isi gị n'ihu ma ọ bụ n'akụkụ (n'ụzọ dị ịtụnanya). Wig abụọ, ngwa maka ihicha, uwe aka ọcha, mbo ma ọ bụrụ na ịchọrọ iyi ya, yana pajamas abụọ nwere panti na-ahụ. Enweghị m ike imeri nkọwa nke nku anya ihu na ezigbo nku anya anaghị ese na nku anya, a na-etinye anya ma ị nwere ike imeghachi ya onu ogugu nwoke.
Addbọchị Ekere: 2020-04-07 01:42:23 by Benedict
148CM Antonia Simon Green Hair EVO Style Nnukwu ara Mmekọahụ Mmekọahụ Nyocha
Azụrụ m ngwaahịa a n'ihi na ọ nwere ọmarịcha ihu. Ihu bụ otu ihe ahụ dị ka ihe osise. M nnọọ afọ ojuju na m zụọ. Echere m na m kwesịrị eleghị anya na-akwụ ụma $ 100 maka nnukwu toso, ma onye nta nwere naanị-acha anụnụ anụnụ anya, nke anya dị ịtụnanya. A nnukwu ngwaahịa, dị nnọọ ezi uche. Ọ na-adị oke, dịka m kwuru, nwa bebi ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya! Ọ ga-akara m mma inwe ahụ buru ibu na ihu tozuru etozu, mana adị m mma. O nwere obere isi ike iji ikpu na oghere ike-naanị "olee otu m ga esi esi tinye ya onu ogugu nwoke ime nke a ", mana ọ bụ ọkụ ga-eji. Na mkpokọta, ọ bụ ngwaahịa dị oke mma.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-07 01:38:19 site n'aka Carey Dillon
146CM Betty Malan Yellow Hair Big Ass Style EVO Version Mmekọahụ Doll Nyocha
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwụ akwụ nwa bebi ahụ mgbe ị na-ehi ụra, họta nnukwu nwa bebi, nke buru ibu nke ga-eme ka ị chee na ị na-ekwo ata ahụ. Ọ mara mma nke ukwuu, achọrọ m ile ya anya, ọ mara mma nke ukwuu ma lezie anya. Jiri akwa nzu na mmanu mmanu mee ka aru ya di nro nma. O yi wig na-acha ọbara ọbara, dị ka foto na obere wig-gray wigs. Enweghị m mmechuihu. Adịghị arọ ma ọ bụ fechaa. Mee nyocha banyere otu esi ewere onu ogugu nwoke.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-06 23:50:50 nke Ralap Tony dere
156CM SaSa Black Hair Japanese Style Obere ara Mmekọahụ Doll Nyocha
Anọ m na ụdị a nọrọ ọtụtụ ọnwa. Njikere dị ukwuu. Ọ dị ezigbo adị. Imetụ aka dị ntakịrị mma karịa iji ya. Obi bu ezi uche-mgbe di nma kari nma. Ọ bụ ezie na itucha onwe ya bụ nnọọ emebi emebi, ọ bụ dịtụ mfe ọcha iji itucha ngwọta na-abịa na ya. Mgbe e mechara ole na ole, nku anya m wee daa, mana echeghị m oke. Mgbe eji ya na nhicha ahụ ugboro ugboro, ọ nweghị ntụpọ akpụkpọ ahụrụ. Nnukwu ngwaahịa ma ọ bụrụ na ị nwere ebe ịchekwa ya na ebe ndị ọzọ na-enweghị ike ịchọta. Naanị ihe m mere bụ na onu ogugu nwokeIhu bụ nwata.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-06 23:46:39 site n'aka Stan Swift
172CM Motooka Mayumi Short Brown Hair Japanese Style Nnukwu Anụmanụ Mmekọahụ Doll Nyocha
Ya mere, nwa bebi ahụ dị mma karịa ka m chere. Ewepụtara m ya n’ime igbe ahụ, tinye ya n’akụkụ akwa m, tinye aka m n’azụ ma kwanye ya n’ọnọdụ ịnọdụ ala, wee pịazie spain m abụọ. Amaghị nke ọma na m nwere ihe ọjọọ. Dezie: Gwa ndị ọrụ ndị ahịa okwu, ha zigara ụlọ ọrụ ọhụrụ na ụbọchị 3. Enweghị nsogbu na nke a. Ọrụ ndị ahịa dị ezigbo mma. Isi nwa bebi ahụ mara mma ma sie ike; ahụ nwa bebi ahụ dị ezigbo mma na ọdịdị ahụ buru ibu ka nkọwa ahụ. N'ihi na fechaa imewe, mgbe m dị ọcha na-enwe ya, M nwere ike ijide onu ogugu nwoke jiri otu aka. Mgbe ịsachara nke mbụ, isi ahụ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị.
Addbọchị Added: 2020-04-06 23:42:52 site Anna
168CM Yuko Hanawa Black Hair Japanese Style Nnukwu ara Mmekọahụ Nyocha
Ọ na-eme ka ihe ọ bụla dị mma ... agaghị m anwale ya n'ọnụ ma ọ bụ ikpu n'ihi na egbugbere ọnụ dị nro nwere ike gbazee ma ọ bụ dọwaa ma bibie ihu ya mara mma ga-abụ naanị ihe ihere. Sa ahụ dị mfe, ihicha adịghị. Amaghị m otú e si eme ya. Ọ bụrụ na m jiri akwa nhicha ma ọ bụ microfiber ọ ga-adọpụ ụfọdụ n'ime ime ụlọ ... Amaara m na ọ nwere ike ịdị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ ma nwee ike karịa uru ya, mana lee ya anya. Weta ọkacha mmasị gị n'akpa uwe pusi na onu ogugu nwoke ma gawa obodo.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-06 23:37:11 nke Shelley dere
170CM Leila Tobias Short Hair Asia Style Nnukwu ara Mmekọahụ Nyocha
Nwa agbọghọ a mara ezigbo mma. Foto m ziri ezi maka agba ya. (Enweghị nzacha ma ọ bụ ihe ọ bụla) Ọ / ọ na-abịa na bikini na ụdị uwe ime, wig abụọ na mbo. Maka ebumnuche ndị a, enyero m ya kpakpando anọ. Naanị nsogbu m nwetara bụ na oghere ahụ pere mpe. N'ezie, obere mkpịsị aka m. N'ezie ọ na-agbatị, mana ọ bụ ụzọ siri ike. Ngwọta enwere ike-M tinye igwe curling na oghere ahụ wee mee ka ọ dị ọkụ ruo mgbe mkpịsị aka m dị oke ọkụ (ọ bụghị ọkụ ma ọ bụghị ọkụ), n'oge nke m gbanyụrụ ya. Emere m ya ọtụtụ ugboro ruo mgbe nke a onu ogugu nwoke oghere ahụ buru ibu, ma ọ ka dịgidere.
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-06 23:30:49 nke Angelo dere
170CM Miwako Short Hair Japanese Style Nnukwu ara Mmekọahụ Nyocha
Ọ bụrụ na nke a bụ azụmaahịa izizi gị, echere m na ọ bụ ezigbo ekwentị iji kwado urdolls. Na nke mbụ ọ dị oke ọnụ, mana ngwaahịa a dị ka obere bekee dị oke ọnụ, ọbụnadị ị nwere ike ịdebe akwụkwọ azụmaahịa. Ọ bụrụ na ị nweghị ahụmịhe n'ụdị ngwaahịa okenye ọ bụla, ana m atụ aro ka ị jiri ngwaahịa ndị pere mpe, ndị dị mfe iji dozie ya. Nwa bebi a bụ ihe ezi uche dị na ya ... ọ na-eme ya ka ọ ghara iju ya ịnakọta ájá. Chee echiche onu ogugu nwoke dị ka osisi props ma ọ bụ ngwá ụlọ!
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-06 23:24:15 nke Noel Harte
145CM Natasha Yellow Hair European Style D Cup Breasts Mmekọahụ nwa bebi Nyocha
Mgbe m gụsịrị ụfọdụ forums banyere njikwa mma, na mbụ m na-ala azụ ịzụta site na urdolls, mana ha nyere kpakpando ise n'akụkụ a. O siri ike ikwere na ọ dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nkebi nke ụlọ ahịa ndị ọzọ. Ọ bụghị banyere eziokwu ahụ bụ na n'echi ya, e sitere na ọla edo. Oge mgbanwe maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa bụ izu 4-6. Nkwakọ ngwaahịa ahụ pụrụ iche ma rụọ ọrụ nke ọma site na UPS. Nanị ihe ndọghachi azụ ebe a bụ na ị nwere obere nhazi nke ụfọdụ atụmatụ, mana ọ bụrụ na ị zaa onye na-ere ahịa ama, ejiri m n'aka na ha nwere ike imeghari ụfọdụ onu ogugu nwoke mmasị (wig agba, anya na agba, ma ọ bụghị m kwere na ọ bụ random).
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-06 23:20:06 nke Woodrow
145CM Kiki Brown Hair Asia Style D-Cup Mmekọahụ Doll Nyocha
Nwa bebi ahụ na-enwe mmekọahụ bụ ihe ọ dị na foto ahụ! N'ezie, foto ndị a nwekwara ọtụtụ ọkụ na nsonaazụ ndabere, mana ọdịdị ahụ dịkwa oke mma. Ogbe bukwara ibu karịa m tụrụ anya ya, mana ọ tụrụ m n’anya nke ukwuu. Nwa bebi ahụ dabara na mpempe akwa akwa m, nke nwere ihe dịka 23 sentimita asatọ nke nhichapụ n'okpuru. M debere ụfụfụ fom ọ batara, nke mere na ọ dị mfe ịkwaga ya na kapeeti n’emebighị ya onu ogugu nwoke. Inwe otu nwere ike ịbụ nkwenye maka ụfọdụ ndị, yabụ ịhazi gburugburu nchekwa na nzuzo bụ ụzọ abụọ dị mma tupu ịgbanye otu. Ma mee ka m ghara iguzosi ike n'ezi ihe nke nwa bebi ahụ, zoo ya ebe ọ bụla!
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-06 23:14:53 nke Cleveland
145CM Rita Berkeley Black Hair Asia Style Obere Ara Mmekọahụ Nwa Nyocha
Echere m na m ga-ekwuru ya ebe a. Ogologo nke a onu ogugu nwoke bụ 145cm. Ahụ dị gịrịgịrị na tara ata. Nke a n’ezie na-eme ka ọ dị mfe ma dịkwa mfe ịgagharị. Ihu nwa bebi ahụ dị obere. Na-eto eto, yabụ foto ndị ezipụrụ ziri ezi, yabụ jiri amamihe tụọ onwe gị atụnyere ụmụ bebi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na nke a bụ nsogbu, biko kpọtụrụ onye na-ere ere ma jụọ maka isi ndị ọzọ dị ka ndị okenye, ha dị ma nwee ike ịgbanwe nke ọma n'onwe ha, ha na-agbanye ma ọ bụ gbanyụọ.
Addbọchị Ekere: 2020-04-06 23:09:04 nke Andre
145CM Miyu Yellow Hair Asia Style Nnukwu ara Mmekọahụ Nyocha
Chaị! Mara mma onu ogugu nwoke. Oke nkọwa zuru oke. Feetkwụ na aka ziri ezi, gụnyere itinye mkpịsị ụkwụ aka na mbọ. Mara mma ihu na ahụ, ezigbo akpụkpọ anụ. Ọkpụkpụ hinged ahụ dị ịtụnanya! Ihe nkwonkwo niile na-agagharị n’usoro ziri ezi, na ntụgharị nke hips, ubu, ikpere, na ikpere na-ehulata wee tụgharịa n’ụzọ ziri ezi. Ihe nkwonkwo ahụ siri ike iji kwado ọnọdụ ọ bụla ọ na-etinye. O yiri ka ọ dị ezigbo mma. Artdị nkà ahịa!
Addbọchị agbakwunye: 2020-04-06 23:03:32 site na Gilbert
Isi awọ Gịrị 158CM Rin Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ihe niile nọ n'ọnọdụ zuru oke. Mmasị ya na uwe ime ya na-amasị m. Aga m ekwenye n'ezie na ọ bụ onye ọ bụla nwere uche. Iji nlezianya eme njem ga-abụ ihe ịma aka. Agbanyeghị, ọ kwesịrị penny ọ bụla. Onu ogugu nke umu bebi di ka nke umuaka 18. O zuuru m. My ọzọ nwa bebi bụ a 5 ụkwụ 2 inch curved arọ nwa bebi. A na-ebu ya ngwa ngwa, tinye ya, mkpịsị aka ya esighi ike, waya ndị ahụ pere mpe ma dịkwa mfe ịgbaji. Na onu ogugu nwoke dị mgbanwe ma dịkwa mma nke ukwuu, enwere m olile anya na m ga - enweta nhọrọ ga - eguzosi ike. Dị ka akọwara. Akpa nwa bebi ịzụta. obi di uto nke ukwuu. Obi nwere ike ịdị nro mana ọ gaghị adị njọ; ezigbo nkọwa. Awtụ egwu dị ka foto, na-atụ ụjọ dịka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ọ na-ewe oge iji mebie ezigbo uru, ogo na ngwaahịa ngwaahịa a.
Addbọchị Added: 2019-11-25 01:58:01 nke Lennon
Uhie Na-acha odo odo 161CM Kaede Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
M hụrụ n'anya nwa bebi a n'anya. Ọ bụrụ na m nwere ike inye ya kpakpando 6, m dị njikere. O rutere ebe ahụ karịa ka a tụrụ anya ya. Ihe niile nọ n'ọnọdụ zuru oke. Ọ na-amasị m ịwụnye wig na uwe ime. Aga m akwado nke a onu ogugu nwoke nye onye obula nwere uche ghe oghe. N’ụzọ dị mwute, elelịuru m ibu ya, yabụ, iji nlezianya mee njem ga-abụ ihe ịma aka. Agbanyeghị, ọ kwesịrị penny ọ bụla. Nwa bebi ahụ ruru ogo nke ụmụ agbọghọ dị afọ 18. Ezigbo m, nwa bebi ọzọ bụ 5ft 2 inch curved full bodied heavy doll, ihe dị ka kilogram 120, yabụ na nke a bụ ezigbo enyemaka, ọnọdụ ahụ enweghị njedebe. Ikekwe onye na-eme egwuregwu mmega ahụ nke China dị afọ 21 bụ ntụle ka mma.
Addbọchị Added: 2019-11-25 01:52:11 nke Elton Gilbert
Ogologo ntutu 148CM Vita Roy Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Dịka e kwuru n'elu, ngwaahịa ahụ dị ngwa na ngwa ngwa. Mgbe ụgbọelu dịka FedEx ji obere nwa bebi bịarute, gbaa mbọ nọrọ n’ụlọ. M na-etinye foto ebe a dị ka ihe atụ. Aga m esi n'ebe ahụ nweta ụmụ bebi ndị ọzọ, mana nke a bụ ihu na-eme ka m maa mma nke ukwuu. O nweghi uwe eji egosi ebe a, mana inwere ike inwete ihe obula onu ogugu nwoke uwe si urdolls dị ka m. Ogo nke uwe ndị ahụ bụ "S" ma ọ bụ pekarị mpe. N'ime obi ụtọ m, ọ fọrọ nke nta ka m chefuo ịgbakwunye na ọrụ ndị ahịa ha dị mma!
Addbọchị Added: 2019-11-25 01:44:21 by Allen
Ntutu ntutu 165CM Victoria Sex Doll's Reviews
O doro anya na ọ bụghị dochie anya eziokwu, mana ọ na-enwe obi ụtọ. Achọrọ m imekwu nyocha na ndozi tupu m nye iwu, n'ihi na aghaghị m ịzụta ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji nyere aka na-elekọta ya, enwere m olileanya na ọ nwere ike ịnọ ogologo oge, yabụ achọghị m ime nke a. Agaghị m akwụ ụgwọ maka ọnụ ahịa nke onu ogugu nwoke, ma ọ nwere ike were otu izu ma ọ bụ karịa. Enwere ezigbo ahụmịhe. Won't gaghị akwa ụta! Nwa bebi a dị mma, m na-atụ anya obere n'ihi ọnụahịa dị ala karị, mana mma ya na-atọ m ezigbo ụtọ.
Addbọchị Added: 2019-11-13 04:27:57 by Hiram Nick
Anya Anya 170CM Cecilia Arthur Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Ejiri m oge dị ukwuu zụta a onu ogugu nwoke, ọkachasị mgbe m hụrụ na ha rere maka ọnụ ahịa karịrị $ 1, na mgbe m nyochachara, achọpụtara m na ọnụahịa ahụ bụ ọkara. Ihe m na-atụ anya dị ala na ọnụahịa ahụ, mana ọ bụrụ na ọ masịghị m, opekata mpe, ego efunahụghị m. Mgbe ọ batara, amalitere m itinye ya ọnụ. Echiche mbụ m bụ na wow, nke a dị arọ nke ukwuu. Nke abụọ echiche bụ wow. Echere m na ihe a bụ nzuzu. Mgbe m wig na-anọdụ ala, achọpụtara m na ọ dị mma karịa ka m chere. Agaghị m ekwu na ọ dị ka foto, mana ọ dị oke mma. Anọ m na 'ọnọdụ ndị mọnk' na esitela m na ụmụ nwanyị nwa oge, nke a bụ ezigbo enyi. Enwetara m obere dopamine na homonụ ndị ọzọ dina n'akụkụ m, yabụ ọ mara mma.
Addbọchị Tụkwasị: 2019-11-13 04:17:01 nke Smedley
Uhie Na-acha odo odo 170CM Marcia Austin Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Ya mere, nwa bebi ahụ dị mma karịa ka m chere. Ewepụtara m ya n’ime igbe ahụ, tinye ya n’akụkụ akwa m, tinye aka m n’azụ ma kwanye ya n’ọnọdụ ọdụ, na-agwa ngalaba ọrụ ndị ahịa okwu, ha zigakwara ụfọdụ akwa uwe. Nke a bụ azụmahịa na-enweghị nsogbu. Ọrụ ndị ahịa dị ezigbo mma. Were ya dị ka osisi ma ọ bụ ihe ndozi! Naanị ihe m nwere ike ime mkpesa bụ isi ike nke igbe ahụ, mana enwere m olileanya na ọ ga-agbatị oge. Na mkpokọta, nke a onu ogugu nwoke bara uru na ego ma na-ebu ya ngwa ngwa.
Addbọchị agbakwunyere: 2019-09-17 04:02:42 site Channing Katrine
Ogologo Ogo ojii 148CM Ruiya Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ekwesịrị m inye iwu na mbụ. Ọ mara mma nke ukwuu. Zọ a tụrụ anya ka mma. Adị m obere na ihe egwuregwu Hollywood m. Emere ha nke ihe di nma ma di ocha obula n'enweghi nchebe. Enwere m ike ile ya anya ruo ọtụtụ awa. Wig dị iche na foto ahụ mana ọ dị mma. Uwe eji etinye akwa ahụ buru oke ibu, mana kedụ ihe ị na-atụ anya n'efu? Ọ bụrụ na m mee ya ọzọ, m ga-ebili ọtọ. Ruo ugbu a, enweghi nsogbu ọ bụla metụtara onu ogugu nwoke.
Addbọchị agbakwunye: 2019-08-23 03:21:50 site n'aka Gene Roy
Black Hair 100CM Kelly Max Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
A na-egosiputa onu ara ebe a ma ha na aru. Etu esi enweta ntutu ojii na anya ojii na foto m zụtara. Ọnụahịa ya na-enye anyị ọfụma. Okpokoro na nhazi dị iche iche! Wigs dị egwu! Emere m ya n'ikiri ụkwụ! Aghaghị m ichere ka nwa bebi ị na-enwe mmekọahụ si n'ụlọ lọta. Ugbu a ọ bụ oge iji mụta ihe ole na ole gbasara TPE nwa bebi na ụfọdụ ndụmọdụ na ntuziaka maka ị nweta ụmụ bebi kachasị mma.
Addbọchị agbakwunye: 2019-08-23 03:11:12 site n'aka Daniel Edmund
Ntutu Uhie 165CM Lydia Forster Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
E nyefeela ngwugwu ahụ na-enweghị akara akara n'ime. Kpachara anya, onye njem ahụ chere na ọ bụ egbe nchekwa. Dị ka a tụrụ anya ya, ọtụtụ ajụjụ na-ebulite mgbe ị na-eme mkpebi a dị oke mkpa. Ọ masịrị m karịa karịa enyi m nwanyị lol n'ihi na ọ dị ọnụ ala karịa na ihe egwuregwu ụmụaka anaghị asị mba, agbakwunyeghị. Ngwaahịa dị mma bụ ọmarịcha. Na ndị ọzọ onu ogugu nwoke a ka na-eme, ọtụtụ mmadụ na-amalite ikwere na ọ dị mma ịnwe ụmụ bebi nwoke ma ọ bụ nwanyị abụọ.
Addbọchị Added: 2019-08-23 03:01:35 nke Isaac Wordsworth
Uhie na-acha odo odo 165CM Leona Herbert Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Enweghị nsogbu ịzụrụ n'aka ha ọzọ. Nke a bụ otu mma TPE nwa bebi ngwaahịa. Dị ka a tụrụ anya ya, a jụrụ ọtụtụ ajụjụ na usoro nke ịme mkpebi a nnukwu oke na ịtụnanya na nhazi ahụ juru m anya. Mgbe m nyochachara ọtụtụ ọnwa ole na ole gara aga, achọpụtara m na nke a bụkwa ezigbo ọnụahịa. Ha na-enyekwa ndị ahịa ọrụ dị mma maka ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ gbasara ngwaahịa ha. Ndi ahia juru afo.
Addbọchị agbakwunye: 2019-08-23 02:50:51 nke Sidney Willard dere
Uhie Na-acha odo odo 150CM Dana Dierser Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Nwa bebi ahụ adịghịrị m arọ, mana naanị nsogbu bụ isi nke ụgbọ ala ọhụrụ ahụ. Nke ahụ ga-apụ. Mmakọ bụ isi. Mara mma ihu, na; ara, uko, overpriced, onu ogugu nwoke emebula, aghụghọ, ma ọ bụ asị mba. N'ikpeazụ, mgbe m tụlesịrị akụkụ nile nke nsogbu ahụ, m ga-eme mkpebi doro anya na ezi uche. Karịrị m tụrụ anya. Ọ mara mma n’ụzọ niile. Obi dị m ụtọ na emechara m daa ma bịa ebe a. Onye ahịa juru afọ.
Addbọchị Ekere: 2019-08-23 02:41:45 nke Arthur Alerander
Black Hair 160CM Stacey Bacon Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ya n'okporo ụzọ, maka m, ọ dị ntakịrị kilogram 80, mgbe ahụ ọ na-amasị m ka ọ dị n'etiti na ebe a na-egwu egwu, n'ihi na ọtụtụ ihe ị nwere ike ịmasị, ruo ugbu a ọ dị ka nnukwu ụlọ ọrụ, ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa , M na-eche na ọ ga-abụ a oké oge, mgbe ị chọrọ n'ezie onye ya naanị gị, na-achị ọchị n'olu dara ụda. Mkpebi kachasị ịzụta gị onu ogugu nwoke dị nnọọ arọ n'onwe ya, ị nwere ike were ogologo oge iji mee ya.
Addbọchị agbakwunye: 2019-08-23 02:28:42 site n'aka Henry Bray
Anya Brown 160CM Sabina Coleridge Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nke a bụ ezigbo onye na-ere na ngwaahịa. Agbanyeghị na enweghị ntụpọ, ọ bụ ezigbo bebi mmekọrịta nwoke na nwanyị, ọkachasị maka ọnụahịa. Ee, enwere obere isi na mbụ, mana nke a bụ ụdị njirimara nke ngwaahịa niile nke TPE mere. Ọ ga-ebelata oge (ọ gafeela izu abụọ) site na ịsa ahụ na ịghagharị nke ọma. Aka nkwojiaka esighi ike. Okwesiri idi ike karịrị akarị. N'oge ezumike ezumike, a na-ewepụta ụmụ bebi ahụ tupu ụbọchị ahụ ekwere na nkwa. Nnyefe nke onu ogugu nwoke bụ otu ihe dị ka ahụ ziri ezi, ntutu ya na anya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-07-04 05:40:57 by Peter Hutt
Nnukwu Anya 100CM Vita Tony Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Vita bụ nwa bebi m na-atụ anya ya. Nke mbu, achoro m ikwu na o rutere tupu oge m tụrụ anya ya (izu abụọ mgbe nke a gasịrị). Ihe a obu ezigbo ihe ka obu ihe ojoo? Ok, nihi na, um, a na m achosi ya ike ibata. Ọ dịghị mma, n'ihi na anọghị m n'obodo mgbe m rutere, m ga-ahapụ ndị agbata obi ka ha lebara ngwugwu ya anya ruo mgbe m lọtara. Mgbe m kwuchara nke a, nke a bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mma m metụrụla. N'ihe banyere anya ya, ọ dị nso na foto a. Foto m ga - egosi ụfọdụ esemokwu dị iche. Nku anya ya dịtụ iche, egbugbere ọnụ ya dịtụ iche, mana nke a nwere ike inwe mmetụta na onu ogugu nwoke Uwe na ndepụta.
Addbọchị Ekere: 2019-07-04 05:31:09 nke Chad Defoe
Brown Long Hair 100CM June Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
June Doyle dị ka foto. Ọ bụ mara mma obere ihe. Enyere m ya nwa ojii adịgboroja ya, ọ dị ka onye omee / agụ egwú TV. Ọdịdị ahụ dị mma ruo ugbu a, mana emebeghị m ihe ọ bụla na ya. Ọ nọdụrụ n’oche n’akụkụ oche m ma kwuo ihe ọ bụla. O nyere m ezigbo mkpakọrịta. Naanị m kwesịrị ịzụtara ya uwe abụọ, nwa ahụ bụ nha ọkara, anaghị ewere ya ebe ọ bụla, emeghị mkpesa ọ bụla. Ọ nọdụrụ ala ma nwee ezigbo akwụkwọ. Aga m azụta ọzọ onu ogugu nwoke dị ka onye ya na ya na-egwuri egwu.
Addbọchị Added: 2019-07-04 05:23:12 by Todd Orlando
Nnukwu Ass 163CM Novia Hill Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Dị ka ndị ọzọ kwuru, ibu ibu nwa bebi (106 pound) bụ omume, mana ọ bụghị ihe mbibi. Ọ na-adịgide. Ozugbo ị maara ya, aka ya dị mfe ịkwaga, mana nọrọ ebe ịchọrọ. Akpụkpọ ahụ ya n’ime igbe nwere mmetụ dị nro, mana ederede dị nro bụ nnọọ ka akpụkpọ. Ozugbo ehichachara ya ma kpochaa ya, akpụkpọ ahụ ya na-eche n'ezie. Achọpụtaghị m ihe ọ bụla na-esi ísì ụtọ n'ahụ ya. Ana m akwadebe maka esote m onu ogugu nwoke.
Addbọchị Added: 2019-07-04 03:54:21 by Barry Bacon
Anya Anya 150CM Zoe Ralph Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Mgbe m natara nwa bebi ahụ, enyochare m ahụ ya, ahụghị m anya mmiri ma ọ bụ achagharị. Ekwesịrị ịtụ anya nke a n'ihi na ọ juputara nke ọma na igbe ezigara ya. Ọ bụ ezie na nwa bebi ahụ nọ na foto ahụ nwere ọla edo ọla edo, enwere m ntutu ntutu ogologo na-acha nchara nchara nke zuru oke maka ya ma yie nke kacha mma. O wetawokwa uwe ime na-acha ọcha, nke dabara adaba, na uwe na-ekpo ọkụ. Akpọghị nke a na ibe, ya mere na nke a bụ uru. Isi nwa bebi ahụ mara mma ma sie ike; ihe onu ogugu nwokeAhụ ya dị ezigbo mma ma ọdịdị ahụ buru ibu ka nkọwa ahụ.
Addbọchị Tụkwasị: 2019-07-04 03:45:00 site Noel Ivan
Uwe Na-acha odo odo Na-acha odo odo 150CM Bridget Whittier Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Nwa bebi a bu ihe m choro. Anọ m na-agagharị na bọọdụ ozi nwa bebi TPE dị iche iche na Internetntanetị. O yiri ka a ga-agwakọta ya na ụlọ ọrụ adịgboroja dị ọnụ ala. Theselọ ọrụ ndị a bụ naanị iji duhie ọha mmadụ. Enwere m ike ịghọta ihe kpatara ya, naanị n'ihi na ọnụahịa ha dị ala. Mana n'adịghị ka ụlọ ọrụ ojoro ahụ, urdolls anọnyerela m, mee ka m mara na ezigarala ngwugwu ahụ (ya na nọmba ọnụọgụ FedEx) iji hụ otu masịrị m. silicone mmekọahụ nwa bebi, ma ọ bụrụ na m nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu. Nwere ike ịkpọtụrụ ha.
Addbọchị Ekere: 2019-07-04 03:35:25 nke Donahue Norton dere
Uwe Na-acha odo odo Na-acha odo odo nke 150CM Wanda Hoover Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Nke a bụ ezigbo nwa bebi na-enwe mmekọahụ, mara mma ma dị arọ, juputara n'eziokwu, iji bụrụ enyi na-agbachi nkịtị. Naanị ịkọ nha nke uwe ka m wee nwee ike dozie ya ozugbo. Ọ dị ka uwe obere ya ka ọ na-eche onye ọchịchị ahụ. Nke a bụ nwa bebi nke atọ m nwere, nke kachasị mma na nkọwa. Ọ bụrụ n'ịchọrọ kpọgidere nwa bebi ahụ mgbe ị na-ehi ụra, họrọ nke buru ibu onu ogugu nwoke nke ahụ zuru oke iji mee ka ị chee na ị na-ejide ahụ n'ezie.
Addbọchị Ekere: 2019-07-04 03:24:01 nke Julius Burns
Ogologo ntutu 148CM Astrid Jane Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Abụ m akụkụ nke Mormon, ezigbo mgbakwunye na nwunye m ugbu a. Mgbe ejiri ya na Astrid pajamas, ọ dị mma maka igosi egwu egwu kọleji. Ọ bụkwa ezigbo ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkwado foto. Mgbe ị gosipụtara karịa nke mmetụta ndị nwanyị a nke metal na silicone, ọ ga-eme ka ndị enyi gị nwee mgbagwoju anya, mgbe ahụ ha ga-enweta ya n'aka gị. Ihe osise a magburu onwe ya masịrị m silicone mmekọahụ nwa bebi. Enwere m olile anya na a ga-egbokwa mkpa gị site n'aka ya.
Addbọchị Ekere: 2019-07-04 03:14:20 nke Corey Ted
Anya Anya 146CM Maggie Harte Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nwa bebi nwoke na nwanyị nwere mmekọahụ na-abịa tupu ụbọchị eme atụmatụ. Amaghị m ihe ga-eme. Ama m na ọ naghị adị ka '' zuru ezu '' dị ka foto, mana ọ na-eju m anya oge m si na igbe ahụ pụta, ọ dị nso ka ọ dị. Random ntutu na itinye. Kedu ihe m ga - eme dị iche? Enwere m olileanya na m ga-enweta ihe na ọkwa dị elu. Ọ bụrụ na ị ga - emeli ya, ọ bụ ihe dị mma inye ya onu ogugu nwoke ụkwụ kwụ ọtọ. Oh, n'ikpeazụ, dị ka e kwuru. Lee ọ dị arọ karịa ka m chere, ọ bụchaghị ihe ọjọọ. Naanị gwa m na agbaziwo m karịa ka m chere.
Addbọchị Ekere: 2019-07-04 03:04:47 nke Osborn Tobias
Egbugbere ọnụ na-adị 146CM Yedda Mark Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Enwere m mmasị na nwa bebi a na-enwe mmekọahụ, ọ bụ ezigbo ihe osise na egwuregwu ụmụaka magburu onwe ya. Achọghị m ka o siere ya ike ịkwaga ma yikwasị ya n’ihi ibu ya. M na-eji ya agbada. Oge kachasị mma m nwetụrụla! Ọ dị ka ịchọ ọrụ n’egwuregwu gị. Nke a bụ ebe izizi izizi maka zụta nke a onu ogugu nwoke. Egbugbere ọnụ nke isi nwa bebi ahụ buru ibu ma dịkwa nro, a na-atụgharị isi ya n'ime ya ma jide ya n'ụzọ ziri ezi.
Addbọchị Ekere: 2019-07-04 02:57:21 nke Abel Maurice
Ewepụghị Igbe 100CM Asao Miko Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Enwetara m nwa bebi a ụnyaahụ, ọ dị ka foto. Obere ihe a. Tinye ya ogologo nwa adịgboroja na ya, ọ dị ka a TV omee / na-agụ egwú. Ọdịdị ahụ dị mma ruo ugbu a, mana emebeghị m ihe ọ bụla na ya. Ọ nọdụrụ n’oche n’akụkụ oche m ma kwuo ihe ọ bụla. Mkpakọrịta kachasị mma. Naanị zụtara ya uwe abụọ, nwata ahụ etorughi oke, anaghị ewere ya ebe ọ bụla, emeghị mkpesa ọ bụla. Ọ nọdụrụ ala ma nwee ezigbo akwụkwọ. N'elu igwe, ihe niile dị mma. Ọ dị ka njedebe-njedebe silicone mmekọahụ nwa bebi. Nkwonkwo ya siri ike iji debe ọnọdụ ahụ, mana enwere ike ịmegharị ya ngwa ngwa. Mkpịsị aka na mkpịsị ụkwụ na-atọpụ ma dịkwa nro. Na mkpokọta, afọ juru m nke ukwuu.
Addbọchị Ekere: 2019-06-19 02:49:55 by Byron Caroline
Black Hair 100CM Madada Kanako Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nwa bebi a dị mma! Enwetara m nke a na ụbọchị ọmụmụ m afọ a, ọ masịrị m nke ukwuu. Ọ dị ntakịrị ihere, mana ozugbo ịchọtara ya, echere m na ọ nwere ike ịbụ nwanyị kacha mma m nwere! Lol Echere m na ọ dị karịa sexy karịa foto ahụ. Na mkpokọta, onye ahịa nwere afọ ojuju na obi ụtọ! Nnukwu ara ya na-enye mmetụta na mmetụta dị iche iche. Mmetụta nke inwe mmekọahụ na ya dị jụụ. Mana otu ihe m ga-ekwu bụ na ọ dị arọ. Ọtụtụ n'ime ibu ahụ sitere na nnukwu ara ya, mana ọ dịkwa na atụmanya m, na-anabata ya kpamkpam. Mgbe ịzụrụ a silicone mmekọahụ nwa bebi ọzọ, ibu ga-abụ otu n'ime ihe mbụ m ga-atụle.
Addbọchị Added: 2019-06-19 02:40:53 by Nathaniel Crane
Anya Anya 166CM Eudora Surrey Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nke a bụ nnukwu ngwaahịa, ezi uche. Dolmụ nwanyị na-ahụ maka mmekọahụ na-enwe obi ụtọ, dịka m kwuru, ụmụ bebi ahụ dị nnọọ ezi uche! Ha nyere m ngwa eji ehicha ihe, mgbo na pajamas nwere panti a na-ahụ anya. M na-atụ aro na ọ bụrụ na ịchọrọ iyi ya, cheta iyi uwe aka ọcha, enweghị m ike imeri nkọwa nke nku anya ihu na nku anya anaghị ese ezigbo nku anya, a na-etinye anya anya, ị nwere ike imeghachi ya n'ezie. Ezi ya yiri silicone mmekọahụ nwa bebi.
Addbọchị Ekere: 2019-06-19 02:25:56 nke Arno Joule
Agba aja aja 170CM Pandora Sander Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Akwukwo Pandora bu ihe omuma zuru oke, obughi nani onu, nke a bu ihe osise mbu m ji azuta nwa bebi a. Egbugbere ọnụ nke isi nwa bebi na-adị uda ma dị nro, a na-etinye isi ya n'ime ya ma jide ya n'ụzọ ziri ezi. Agba nke ọka wit dị ezigbo mma ma yie ka ọ na-adị Caucasian nke nta nke nta. Na-ege ntị enyi kwuru na àgwà nke silicone mmekọahụ nwa bebi ebe a dịkwa mma nke ukwuu. Ana m akwado ịmalite na otu. Naanị ihe m chọrọ ịgbanwe bụ nha nke ara (nke a bụ ihe gbasara onwe). Ara dị nro mana siri ike ma juputa na mmetụta, mana m na-ahọrọ iko C. F-cup nke m nwere buru oke ibu.
Addbọchị Ekere: 2019-06-19 02:13:39 by Adonis Tom
Black Hair 100CM Tanabe Reiko Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
A na-ebugharị ahụ na isi Tanabe, kwesịrị ya! Nke a bụ iwu! N'ihi na enwere ọtụtụ adịgboroja na ịntanetị, ha na-enwe obi abụọ banyere ịzụta ya. Nbunye dị ngwa karịa ka ọ na-ekwu. Enweghị m ike ịkọ ihe dị n’ime igbe ahụ. Chei, ọ mara ezigbo mma! Ọ bụ kpọmkwem dị ka e gosiri. Ọ dị arọ nke ukwuu. Ọzọkwa na-abịa na igwe kpo oku USB, nke bụ ihe ijuanya. Nye A +. Aga m azụta ọzọ silicone mmekọahụ nwa bebi site ebe a, a na m edebeziara m ya.
Addbọchị Ekere: 2019-06-19 02:02:07 nke Borg Billy
Silver Short Hair 160CM Carey Godwin Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ngwurugwu nwoke na nwanyi kwesiri inwe ego! Maka ọnụahịa m kwụrụ maka nwa bebi a, TPE enweghị ntụpọ, dịka na foto a. N'akụkụ dị arọ, ị ga-enweta ihe ngwọta ma wuo nwa bebi a. Nke a bụ nwa bebi mbụ m na m na-ekwo ekworo. Naanị ihe m mere bụ na emere m akụrụngwa dị ọnụ ala karịa ka m si mara ya, kama ọ gara urdolls wee zụta uwe ka mma maka onu ogugu nwoke. O buru ibu zuru oke iji mee ka ị chee na ị kwụgidere ahụ ahụ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-05 06:21:26 site n'aka Charles Robinson
Ezigbo 168CM Lance Hicks Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Nwa bebi a nwere ezigbo uru nye m, m ga-atụkwasịkwa mmetụta m n'ahụ di nwụrụ anwụ na ya. Daalụ maka nkwanye gị, ọ zuru oke. Mee ara ara ngwa ngwa site na njem njem. Mbupu bụ a pụrụ iche nkwa. Bịa na nkịtị kaadiboodu igbe. Enweghị ntụpọ doro anya, stains ma ọ bụ anya mmiri. Ọ na-agụnye akwa uwe na-enweghị usoro, onye na-agbanwe oghere na iwepụ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara isi isi. Kacha ezi uche onu ogugu nwoke Ahụla m.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 06:13:12 nke Jonas Judith dere
Anya Bright Black 140CM Blanche Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Nke a bụ nwa bebi nke atọ m nwere, nke kachasị mma yana nkọwa. All dolls atọ m si urdolls. Zụta ozugbo na ụlọ ọrụ. Dolkpụrụ doll a dị ezigbo mma ma e jiri ya tụnyere ụmụ bebi ndị ọzọ m nwere. Ngwongwo TPE ejiri mee ihe na nwa bebi a dị nro karịa ụmụ bebi ndị ọzọ m nwere, na-ahapụ ihe fọdụrụ. Ọ na-eyi a ewepụghị tote na a ala na dị nnọọ ama n'okpuru akwa. Foto ndị dị na weebụsaịtị adịghị mma maka nwa bebi a. N'ihi na ọ mara mma karịa foto ahụ. Were igbe ọka na obere mmiri ọkụ iji kechie ya onu ogugu nwoke, na mgbe ị dị njikere ịnọ ọnụ, ọ ga-ekpo ọkụ. Biko nwee obi ụtọ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 06:04:09 nke Thomas Henley
Onye Nduzi 168CM Odelette Becky Sex Doll Customer's Reviews
Ọ dị ezigbo mma, njirimara ya dị ezigbo mma, ara ara siri ike, obere ịnyịnya ibu mara mma, n'ụzọ zuru ezu, ị maara. Emere nke a site na ihe ndị a - starch ọka bụ ezigbo enyi gị. Echefu talcum ntụ ntụ. Mgbe ịsachara ahụ, anụ ahụ siri ezigbo ike metụ, gbasaa stachi ọka, anụ ahụ dịkwa nro. Y’oburu n’inweghi n’aka ijikwa nwa bebi 168cm zuru oke, otu n’ime ha ka akwadoro. Ihu mara mma, ezigbo nku anya mejupụtara anya anya. Na onu ogugu nwoke nwere eri nwere isi n'isi ma oburu na ichoro ibanye na toso.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 05:55:33 by Calvin Dunbar
Anya Anya 148CM Renee Raymond Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Ọ mara mma ma sie ike, ọ bụ nnukwu nwa bebi. Nke a dị mma. Ọ bụghị ụfọdụ ọnụ ụtọ roba dị ọnụ ala dịka ụlọ ọrụ kemịkal. Ihu mara mma, ezigbo nku anya mejupụtara anya anya. E nwere a threaded kọlụm na isi ma ọ bụrụ na ị na-mating na toso. Olu n'olu a na-agbatịkwa ka ị wee nwee ike ịgbanye isi gị n'ihu ma ọ bụ n'akụkụ (enweghị nkwenye). Ọ bụ ezie na ọ dị arọ, enwere m obi ụtọ na m nwetara nke a ma m ga-enweta nha onu ogugu nwoke.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 05:47:39 by Enoch Nancy
Abụba Ass 168CM Ronald Rebecca Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ọ bụ ezie na ọ dị arọ, mana ọ dị arọ nke ukwuu, enwere m obi anụrị na m nwetara nke a, m ga-enweta nwa bebi zuru oke, mana m nụrụ na ha siri ike ijikwa, enwere m ike iche etu nwa bebi nwere aka na ụkwụ nwere ike arọ. Nke a nwere otu ọkpụkpụ ọkpụkpụ nke nwere isi dị arọ. Enweghị mkpesa ọ bụla. Abịara m na igbe ahụ dum, mana ọbụlagodi igbe mbụ bụ naanị na China ka a na-eme. Wig bụ ntutu dị ogologo. Obi dị m ezigbo ụtọ na agba akpụkpọ anụ nwa bebi, nke bụ agba ọchịchịrị m chọrọ. Ọ bụrụ na otu enyi m gbara m gburugburu zụta a onu ogugu nwokeM ga-agwa ha urdolls.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 05:37:45 nke Rudolf Julius dere
Obere ara 145CM Roberta Bulwer Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Nwa bebi a na-enwe mmekọahụ bụ onye na-eche nche, enwere m mmasị na akụkọ ndabere ya, uru maka ego. Akpụkpọ ahụ ya dị oke mma ma mara mma. O nwere ike bụrụ na o tolitere, ihu ya ga-aka nka. N'ihe niile, ọ dị mfe iji ma jiri nlezianya echekwa ya. Ga-akwado ya onye ọ bụla. Gwọ bụ ọzọ dị ịtụnanya mma. O nwere aru di nma na iru-ya abua, na isi nwa bebi ahu mara nma nke-uku; ihe onu ogugu nwoke nwere ahụ dị mma ma buru oke ibu ka nkọwa ahụ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 05:26:31 by Dominic Faulkner
Uwe ojii Black 125CM Arlene Dunbar Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Nwa bebi a nwere aru di nma ma nwekwa nkpa. Isi nwa bebi ahụ mara mma ma sie ike. Ahụ nwa bebi ahụ dị ezigbo mma na ọdịdị ahụ buru ibu dịka nkọwa ahụ. Ekele maka imepụta ọkụ, mgbe m hichara ma debe ya, enwere m ike ijide nwa bebi ahụ na otu aka. Mgbe ịsachara nke mbụ, isi nke TPE fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ kpọgidere nwa bebi ahụ mgbe ị na-ehi ụra, họrọ nke buru ibu onu ogugu nwoke nke ahụ buru ibu iji mee ka ị chee na ị na-ekowe ahụ dị n'ezie.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 05:19:24 site Noah Chaucer
Grey Hair 160CM Norton Dickey Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Mgbe nyochachara nke mbụ, onye na-ere ahịa zigara email banyere agba ntụpọ ma dị njikere idozi nsogbu ahụ site na iziga agba. Atụla anya nkwado ndị ahịa dị otú ahụ. O doro anya na ọ ga-abụrịrị ụdị mma / kpụrụ akpụ bekee nke kpakpando ise nwere nkwado pụrụ iche. Nke a bụ nnukwu ngwaahịa ma ọ bụrụ na ị nwere ebe ịchekwa ebe ndị ọzọ na-enweghị ike ịchọta ya. M ga-azụta onu ogugu nwoke site ebe a ọzọ, na ibu ga-abụ ihe mbụ m ga-atụle.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 05:09:33 by Zara Ruth
Mara mma 148CM Laura Charlotte Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nke a bụ nnukwu ngwaahịa ma ọ bụrụ na ịnwere ebe ịchekwa ebe ndị ọzọ na-enweghị ike ịchọta ya. Naanị ihe m mere bụ na ọ pere mpe karịa ihe ahụ, ihu dịkwa obere. Ọ ga-akara m mma inwe ahụ buru ibu na ihu tozuru etozu, mana adị m mma. Enwere isi ike ole na ole n'iji ikpu na oghere ike - naanị "Kedu ka m ga - esi dobe nwa bebi ahụ iji mee nke a", mana ọ bụ ìhè zuru ezu iji ya. Na mkpokọta, ọ bụ ogo dị elu onu ogugu nwoke.
Addbọchị Added: 2019-06-05 04:58:53 by Meredith Malthus
Uwe dị warara 155CM Cynthia Hood Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
N'ozuzu, a na-atụ anya nke a kpamkpam, na-enweghị mkpesa ọ bụla. Karịrị kpakpando 5 dị ka ihe ndị ahụ. Nke a bụ nnukwu ngwaahịa, ezi uche. Akpụkpọ ahụ na-adị oke mma, dịka m kwuru, nwa bebi ahụ dị nnọọ ezi uche! Ọ dị ezigbo adị. Metụ aka dị mma karịa iji ya. Obi dị adị - mgbe ụfọdụ dị mma karịa ezigbo. Ọ bụrụ na ha amalite ọzọ onu ogugu nwoke nke ahụ masịrị m, m ga-enwe obi ụtọ isoro ha zụọ ahịa ọzọ!
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 04:48:01 nke Dave Alick
Akwara apata ụkwụ 163CM Marcia Margery Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Kpamkpam ọnụ ahịa azụ. Egwuregwu nwa bebi n'onwe ya dị ezigbo mma, mana ọ bụghị eziokwu na ịma mma n'ihi ọdịiche dị na agba. Akụkụ ọ bụla ekwupụtara dị ka "pink" agaghị acha. Yabụ naanị na ị na-ele ụda anụ ahụ. Ma ọ bụghị ya, nwa bebi ahụ nwere àgwà dị elu banyere ọdịdị na ebu. Ihu ihe atụ ahụ ziri ezi. A na-achịkwa oke nke ụmụ bebi mmekọahụ. O nwere ike ịbụ na ọ dịkarịrị mfe kpakpando 5, belụsọ maka ihe omumahie nke agba. Isi ihe ọzọ ịmara bụ na ọ dị arọ n'ezie. Maka agagharị onu ogugu nwoke, o were ike m niile.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 04:28:15 nke Zachary Moore
Football Baby 158CM Caroline Judson Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Lsmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ dị mma karịa enyi m nwanyị nwere obere profaịlụ! Akwa, azutara m nwa bebi ugbu a. Ok, Eji m ihe nlele a ọnwa ole na ole. Ọnọdụ njikere dị ezigbo mma. Ọ dị ezigbo adị. Metụ aka dị mma karịa iji ya. Obi dị adị - mgbe ụfọdụ dị mma karịa ezigbo. Ọ bụ ezie na itucha n'onwe ya bụ ihe na-emebi emebi, ọ dị mfe ịsacha ya na mmiri mmiri na-eso ya. Mgbe ọtụtụ ojiji, ọ mara mma dị ka mgbe mbụ ọ bịara, na m bụ oke nchegbu. Mgbe eji na nhicha ugboro ugboro, enweghị ntụpọ anụ ahụ dị na onu ogugu nwoke.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 04:19:24 site Gerald Yale
Amara 158CM Qing Xue Mmekọahụ nwa bebere Nyocha
Ana m enye nwa bebi a A +, ma na mgbakwunye na nwa bebi ahụ, onye na-ere ahia a nwekwara nnukwu ọrụ ndị ahịa! Banyere ajụjụ nwa bebi ahụ, ha nwere ike ịza ajụjụ m ozugbo. Ọ bụrụ na ha ewepụta ngwa ahịa ọhụụ ọzọ masịrị m, obi ga-adị m ụtọ isoro ha na-azụ ahịa ọzọ! Ha nyere m ezigbo ndị ahịa! Ya mere, nwa bebi nke nwanyị dị mma karịa ka m chere. Na nke mbụ ọ dị oke ọnụ, mana ngwaahịa a dị ka nke dị oke ọnụ onu ogugu nwoke, egbula oge, ị gaghị akwa ụta na ikiri, dịka m
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 04:11:15 site n'aka Bernard Geoffrey
Na-atụgharị uche Master 158CM Hannah Sassoon Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Nyocha
Nke a bụ ezigbo nwa bebi! Echere m, mgbe m nyere ya iwu, ọ ga-ewe ihe dị ka ụbọchị 10-15 si China. Ọ na-ebufe ọsịsọ! Chei, nke a bụ nwa bebi kachasị mma m hụtụrụla! Ikike magburu onwe ya! Guysmụ okorobịa a ma ka esi eme ụmụ bebi! Mmetụ nwa bebi ahụ na mmetụ dị ezigbo mma na isi ya dị mma. Ara dị ezigbo mma, buru ibu ma na-ama jijiji, hips dị oke nro na ngwa na-eme ọfụma. O nwere ike isiri ike ịhụ na foto ahụ, mana o nwere isi nwere ike iwepu ya nke bara ezigbo uru maka ibuli na imegharị onu ogugu nwoke.
Addbọchị Added: 2019-06-05 04:02:38 by Drew Harold
Anya Anya 158CM Martina Walpole Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nwa bebi a nke nwoke na nwanyi nwere ihe ịtụnanya. Ha abụọ bụ eziokwu. Atụla egwu ma jụọ foto. Nwa bebi ahụ dị ka foto (na-ebelata uwe a ga-ezigara n'amaghị ama). Nwa bebi ahụ bụ 158 cm ogologo. White adụ na-abụghị nke nnyapade anụahụ. Feetkwụ na-eguzo bụ iwu. Nkọwa dị elu nke ahụ, aka, ụkwụ ma ọ bụghị na ikpu. Enwere ihe ngosi zuru ezu mana enweghị. Isi nwa bebi m pere mpe karịa isi ọ kwesịrị iweta, mana ihe ndị m na-eme bụ eziokwu. A na-emechi ọnụ site na ụlọ ọrụ ahụ. Enwere ike imeghe ya site na iji nwayọ na-adọta egbugbere ọnụ na mkpịsị aka mmiri mmiri na ihu elu. Ka o sina dị, oghere ọnụ nke onu ogugu nwoke too okeke.
Addbọchị Added: 2019-06-05 03:53:56 by Bruce Pearson
Ogologo 165kwụ XNUMXCM Belinda Dickens Mmekọahụ nwa bebi Nyocha
Ọ dị ezigbo mma mgbe nwa bebi ahụ rutere! Dị ka foto, ndị na-ere ahịa na-enwe mmetụta dị nro ma na-enye aka. A ga-atụ aro ka ndị gbara ha gburugburu mara ezigbo mma. Ogologo nwa bebi ahụ kwekọrọ na nwa agbọghọ dị afọ 18. Ezigbo m, nwa bebi ọzọ bụ 5ft 2 inch curved plump heavy doll, ihe dị ka kilogram 120, yabụ na nke a bụ ezigbo enyemaka, ọnọdụ ahụ enweghị njedebe. Ikekwe onye na-eme egwuregwu mmega ahụ nke China dị afọ 21 bụ ntụle ka mma. Ha nyere m ezigbo ndị ahịa! N'ihi ya onu ogugu nwoke dị mma karịa ka m chere.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-05 03:45:39 site n'aka Bert Ingersoll
Nwa ukwu 150CM Pamela Spender Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ha nyere m ezigbo ọrụ ndị ahịa! Ya mere, nwa bebi ahụ dị mma karịa ka m chere. Ewepụtara m ya n’igbe ahụ, dọba ya n’akụkụ akwa m, ma tinye aka m n’azụ ka ọ kwanye ya ọdụ. O nwere oke ike idobe ihe n'ụzọ ọ bụla dịka echiche m, zuru oke. Nke a bụ onu ogugu nwoke na-enweghi nsogbu. Ọrụ ndị ahịa dị ezigbo mma. Aga m akwado urdolls nye ndị gbara m gburugburu.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-05 03:38:17 site Tab Gregory
Obere ndị uwe ojii na-ahụ maka ara ara 158CM Adolph Joule Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Ọ bụ ụlọ zuru ezu na-agba ọsọ! M hụrụ nnọọ mmekọahụ nwa bebi a n'anya. Ọ bụrụ na m nwere ike inye ya kpakpando 6, m dị njikere. Ọ bịarutere tupu oge echere. Ihe niile nọ n'ọnọdụ zuru oke. Ọ na-amasị m ịwụnye wig na uwe ime. Anọwo m na nwunye m nọrọ ntakịrị oge, m na-echegbukwa onwe m banyere ekwesịghị ntụkwasị obi. Site nzụta a, egwu m niile ezuola. Aga m akwado ezigbo nwa bebi a onye ọ bụla nwere uche ghere oghe. N’ụzọ dị mwute, eledaara m ya anya nke ukwuu, ya mere, iji nlezianya na-eme njem ga-abụ ihe ịma aka. Otú ọ dị, ndị onu ogugu nwoke kwesịrị penny ọ bụla.
Addbọchị Added: 2019-06-05 03:30:49 by Kim Dutt
Ọnụ siri ike 158CM Ophelia Evans Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ọ bụrụ na ị nwebeghị ahụmịhe n'ụdị ngwaahịa okenye ọ bụla, ana m akwado ka ị jiri obere bebi mmekọahụ nke pere mpe, na-echekwa iji megharịa ya. Nwa bebi a bụ ihe ezi uche dị na ya ... ịhapụ ya ka ọ chịkọta ájá na-eme ka ọ nwee mmetụta dị iche. Were ya dị ka osisi ma ọ bụ mpempe akwụkwọ. Ọ bụrụ na nke a bụ ịzụ ahịa izizi gị, echere m na ịrụ ọrụ na urdolls bụ ezigbo nhọrọ. O zuru oke, dika onye ahia kwuru. Ha kwuru na ha ji ike dị ukwuu mee nke ha onu ogugu nwoke mara mma ma ha ziri ezi.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 03:24:24 site Nigel Zimmerman
Nwa ukwu 150CM Edwina Lawson Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Mmekorita nwa bebi na-arụ ọrụ nke ọma site na UPS. Nanị ihe dị ebe a bụ na ị nwere obere nhazi ụfọdụ atụmatụ (dị ka kpo oku), mana ọ bụrụ na ị zigara onye na-ere ahịa okwu m ejiri n'aka na ha nwere ike ịmegharị ụfọdụ mmasị. Ọ bụrụ na nke a bụ ịzụ ahịa izizi gị, echere m na ịrụ ọrụ na urdolls bụ ezigbo nhọrọ. Na nke mbụ ọ dị oke ọnụ, mana ngwaahịa a dị ka nke dị oke ọnụ onu ogugu nwoke, egbula oge, ị gaghị akwa ụta na ikiri, dịka m.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-05 03:16:23 site Corey Waters
Mara mma 165CM Meredith Wallace Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ọ bụ ọnụ ahịa ya! Dịka e kwuru n'elu, ngwaahịa ahụ dị ngwa na ngwa ngwa. Mgbe ụgbọelu dịka FedEx ji obere nwa bebi bịarute, gbaa mbọ nọrọ n’ụlọ. M na-etinye foto ebe a dị ka ihe atụ. Aga m enweta ụmụ bebi ndị ọzọ site na urdolls, mana nke a bụ ihu na-eme ka m maa mma nke ukwuu. O nweghi uwe eji egosi ebe a, mana inwere ike inwete ihe obula onu ogugu nwoke si ebea dika m. N'ime obi ụtọ m, ọ fọrọ nke nta ka m chefuo ịgbakwunye na ọrụ ndị ahịa ha dị ukwuu.
Addbọchị Added: 2019-06-05 03:08:25 site n'aka Yehudi Antonia
Injinia 170CM Stephanie Alick Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Mgbe m gụsịrị ụfọdụ forums na njikwa mma nke ụmụ bebi na-enwe mmekọahụ, m na mbụ na-ala azụ ịzụta site na urdolls, ma nye ise kpakpando n'oge a. O siri ike ikwere na ọ dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere mpaghara ndị yiri ya na ndị ọzọ na-ere ahịa. Ọ bụghị banyere eziokwu na-esote ụbọchị gafere gold. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere oge mgbanwe nke izu 4-6. Obi dị m ezigbo ụtọ na m họrọla nwa bebi a. Nwa bebi ahụ bụ kpọmkwem ihe ọ dị ka ọ dị na foto ahụ! N'ezie, foto ndị a nwekwara ọtụtụ ọkụ na nsonaazụ ndabere, mana ọdịdị ahụ dịkwa mma. Nke a onu ogugu nwoke zuru oke maka m.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 02:58:40 nke Lambert Billy
Yellow Long Hair 170CM Mavis Burns Mmekọahụ nwa bebi Nyocha ndị ahịa
Obi dị m ezigbo ụtọ na m họrọla nwa bebi a. Nwa bebi ahụ bụ kpọmkwem ihe ọ dị ka ọ dị na foto ahụ! N'ezie, foto ndị a nwekwara ọtụtụ ọkụ na nsonaazụ ndabere, mana ọdịdị ahụ dịkwa mma. Ogbe buru ibu karịa m tụrụ anya ya, mana ọ na-eju m anya. Nwa bebi ahụ dịkwa mma maka mpempe akwụkwọ akwa m, yana oghere 23-inch n'okpuru. M debere mpempe akwụkwọ ụfụfụ ahụ ọ batara, ya mere ọ dị mfe ịkwaga ya na kapeeti n’emebighị nwa bebi ahụ. Inwe nkwanye nke nwere ike ịbụ ụfọdụ ndị, yabụ ịhazi gburugburu nchekwa na nzuzo bụ ezigbo ụzọ abụọ tupu ị na-efegharị (mana emebila iguzosi ike n'ezi ihe nke onu ogugu nwoke, zoo ya ebe ọ bụla n'ime ya!).
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-05 02:50:45 site Len Carter
Crazy Criminal 170CM Xaviera Jane Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ya mere, nwa bebi ahụ dị mma karịa ka m chere. Ewepụtara m ya n’ime igbe ahụ, tinye ya na akuku akwa m, tinye aka m n’azụ wee kwanye ya n’ọnọdụ ebe ahụ, akụkụ aka ya siri ike karịa ka m chere. Gwa ndị ọrụ ndị ahịa okwu ma ha kọwaara m ụmụ bebi ndị ga-adị mfe iji ma oge ụfọdụ. Ọ na-enyo na ọ bụ. Nke a enweghi nsogbu. Ọrụ ndị ahịa dị ezigbo mma onu ogugu nwoke ụlọ ọrụ na-azụ ahịa. Ọ ga-amasị m ndị nọ m gburugburu ịkwado ụlọ ọrụ ahụ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 02:38:45 nke Rodney Geordie dere
ibu ibu! Nke a bụ bebi mmekọrịta nwoke na nwanyị nke mara mma karịa foto. Ọ bụ kpọmkwem ihe onye rere ya kọwara. Ọ bụrụ na oghere nke obi ụtọ dị n'ebe kwesịrị ekwesị ma ọ bụghị nke ọma, mgbe ahụ a ga-enye kpakpando 5. Na mgbakwunye, nke ahụ zụrụ afọ ojuju. O kwughị ọtụtụ okwu, mana ọ naghị ese okwu. Isi ya dị iche iche ma nwee ike imesi ya ike, mana ọ dị mfe. Na-enye afọ ojuju. Nke a bụ ezigbo nwa bebi mmekọrịta nwoke na nwanyị m hụtụrụla. Lee ka m ghọta na ịzụ nwa bebi adịghị mgbagwoju anya, na onu ogugu nwoke karịrị ihe m tụrụ anya maka ịdị mma.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 02:29:59 by Hugh MacArthur
Ọnụ ara na-acha ọbara ọbara 158CM Tess Jessie Sex Doll Customer's Reviews
Okwu m nwere ike iju gị anya. The nwa bebi na mmekọahụ bụ zuru okè, na ntuziaka maka ya iche nke postcho, ọ bụ arọ, ara anya a bit kwa ike, ma ha bụ ndị C iko. Oge ụfọdụ a na m eche na ọ na-ele m anya, dịka ụfọdụ eserese m chọrọ, n’ile ya n’ihu, ọ dịka ọ nwere obere ọchị. Mkparịta ụka ya adịchaghị, mana ọ nwebeghị esemokwu. Isi ya dị iche iche ma nwee ike imesi ya ike, mana ọ dị mfe. Na-enye afọ ojuju. Nke a bụ ezigbo ezigbo onu ogugu nwoke Ahụla m.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 02:21:36 site Hardy Ford
Brown Curly Hair 165CM Setlla Noel Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Nwa bebi a na-enwe mmekọahụ tupu oge eruo, dịka mgbasa ozi. Ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya ya. Ọ dịkwa arọ dị ka ọ na-ekwu. Ihe mere na enyeghi m kpakpando 5 bụ: E nyere m iwu na ọ ga-abata na Satọdee, yabụ mmadụ ga-ala be ha ma ha rute, oge ka ukwuu n’ebe m nọ. Emeghị m n'ihi na ọ na-akpọsa, ma ara dị nro mana siri ike. Ọ ga-akara m mma ntakịrị ntakịrị. Ihe niile dị na igbe na onu ogugu nwoke abata n'otu oge.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 02:12:05 nke Tim Nora
Nwa Ogologo Ogologo 165CM Harvey Josh Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Fọdụ n'ime obere ntụpọ ya. Ma n'ozuzu ọ bụ afọ ojuju! Mara ezigbo mma ma kwekọọ na foto. Ihe kachasị njọ bụ na aka na ụkwụ dị nro. Ma n'ezie ruru ego ahụ! Ya interface mmiri kwekọrọ n'ụzọ dịtụ ya organic counterpart na ohere na-ergonomically e. Ọ bụ ezigbo onyinye dị otú a, m ga-atụle ịzụ onu ogugu nwoke ọzọ si ebe a.
Addbọchị Ekere: 2019-06-05 02:01:28 site n'aka Grover Gibbon
Ogologo ụkwụ 163CM Chasel Edison Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Lee ka m mara na ịzụta nwa bebi adịghị mgbagwoju anya, karịa ihe m tụrụ anya maka ịdị mma. Ọ dị ka nke dị na foto ahụ na ntutu ntutu. Agbanyeghị, enwere ihe ole na ole ị kwesịrị ịma. Nke mbụ bụ na ọ dị arọ nke ukwuu ma na-eche na ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ nrọ na mkparịta ụka na-adịghị mma, pịa ha. Tupu ịtọọ ụtọ, ịkwesịrị ịkwado, dozie, nwalee ma gbanwee. Mmekọahụ Mmekọahụ nwere wigs ogologo, n'adịghị ka eserese, mana n'otu agba. A ụtọ ụlọ ahịa.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-05 01:53:14 by Omar Louisa
Ọnụ siri ike 165CM Prima Bess Sex Doll Customer's Reviews
Ọ bụ ya. Amụtala m ọtụtụ ihe gbasara ahụ ụmụ nwanyị na nwa bebi a, nke m na-amabeghị mbụ. Ọ na-ewetara ezinụlọ ahụ dum ọchị! Ya ebube ihe bara uru ọ bụla penny izute m na-atụ anya. Ihe oru ngo a natara bu oke oso, dika akowara ya. A na-etinye ụmụ bebi mmekọahụ na igbe na-enweghị akara ma dị mfe ijikọ. Mgbe ịzụrụ nke a onu ogugu nwoke, cheta na ọ dị kilogram 74 n’arọ. Kachasị mma “nwụrụ anwụ” ị ga-enweta.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 06:19:41 nke Angelo Carroll dere
Agbanyeghị Hip 161CM Gilbert Wat Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Na nkenke, enwere m obi anụrị, ọ bụrụ na ịchọrọ nwa bebi, ị gaghị enwe mmechuihu na urdolls. Ihe ikwesiri ịma ..., dịka m kwuru, ọ dị arọ, yabụ ọ na-ewe obere oge ka ọ kwaga ..., mkpịsị aka na mkpịsị ụkwụ siri ezigbo ike n'ihi na ha dị obere TPE, yabụ ịkwesịrị ịkpachara anya , ụmụ bebi ahụ na-anọ na ụlọ okpomọkụ, ọ bụrụ na ịnweghị ntụ ntụ ụmụaka, ha ga-eme ka ha nwee obere oyi oyi ..., nkwonkwo siri ike ma ha ga-atụrụ ndụ mgbe ị megharịrị ha obere oge. Obi dị m ezigbo ụtọ ịzụta ihe a onu ogugu nwoke. Agaghị m ala azụ ịkwado ndị gbara m gburugburu.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-04 06:12:22 nke Jeffrey Michael
Ebughibu Isi 161CM Ursula Surrey Sex Doll Nyocha ndị ahịa
Naanị ụbọchị ole na ole gara aga ka m natara nwa bebi a, nlekọta ya dị mfe ... jiri ncha na mmiri sachaa, wee kpoo ya na ntụ ntụ na-adị nro. Ọ bụrụ na m chọrọ ịmịnye ya, m ga-eji akwa eletrik kpoo ya ọkụ ... Ekwesịrị m ikweta na m nwara ya dị ka nwa bebi ọ hụrụ n'anya ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya. Nhicha adịghị njọ n’ihi na ha na-ezipụ otu kalama pịrị apị na-amịpụta karama ahụ. Ọ na-amasị m iji ejiji ya, na-ele anya na ọ mara mma. Yabụ i nwere ike ihu etu m si eji ejiji nke m onu ogugu nwoke.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-04 06:05:15 nke Franklin Toby
Obere ukwu 140CM Penelope Raglan Mmekọahụ Doll Nyocha ndị ahịa
Nwa bebi a dị mma, mana nkwonkwo siri ike, na-esiri ike ịkwaga, isi siri ike ịgbakwunye, mana enweghi ezigbo nsogbu, ọ dị ka foto nke m juru afọ. Ga-akwado ya ka ọ bụrụ enyi gị. Ọ bụrụ n'ị na-achọ egwuri egwu nwoke na nwanyị, nke a bụ ngwaahịa emepụtara nke ọma, onye na-ere ahịa na-anya isi maka ọrụ ndị ahịa. Ọ na-amasị m iji ejiji ya, na-ele anya na ọ mara mma. Daalụ maka onu ogugu nwoke ọrụ ị nyere m.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-04 05:56:37 by Merle Rhys
Gbapụta Butt 140CM Debby Grote Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Can ga - ahụ na nsonaazụ ya dị mma, akpọrọ m ya aha enyi m nwanyị mbụ. N'ezie, ọ mere ka ọ dị ya ka ọ dị ntakịrị na mbụ, mana amụrụ m ya ngwa ngwa. Ọ nọ ebe ahụ mgbe m dinara ụra, ọ nọ ya mgbe m biliri ... m na-eyi akwa dị iche iche kwa izu ... Ọ na-eyi pajamas ya yi uwe ime akwa a. ... ọ na-amasị pajamas. Ọ dị ezigbo mma onu ogugu nwoke. Ọ mara mma nke ukwuu ma mara mma nke ukwuu dịka m tụrụ anya ya. Daalụ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 05:48:01 nke Hamiltion Nixon
Agba aja aja 163CM Letitia Huxley Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Mmekọahụ nke nwoke a batara n'oge na-adịghị anya ... Ọ bụ igbe nkịtị nwere ụfọdụ mkpụrụ edemede ndị China na ya, mana ọ bụ ya. Ọ dịkwa oke arọ ... opekata mpe kilogram 65, yabụ nwanyị dị otú ahụ nwere ezi uche, ọ na-eje ije dị arọ nke ukwuu, mana ọ gaghị adị oke njọ. Wig ndị a na-ebugharị dị mma ... mana uwe akwa sexy bụ ihe mkpofu ... na obere ihe nyocha maka kpo oku anaghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị hapụ ya na ebe maka oge, enwere m ike ịtụfu ya. Na mkpokọta, anaghị m akwa ụta. N'ihi na nke a onu ogugu nwoke kwesịrị ọnụahịa ahụ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 05:36:53 nke Omar Giles
Uhie Na-acha odo odo 135CM Darren Fred Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Ka m buru ụzọ kwuo, ekwenyere m na nwa bebi a ruru puku dollar 2,700 US + ọnụahịa ọnụ ahịa. Enwere m afọ ojuju na ihe m nwetara, urdolls nwere obi ụtọ ịza ajụjụ gị niile ma nyere ha aka n'ụzọ ọ bụla, n'agbanyeghị na ha nwere ike idozi ụfọdụ nsogbu ESL. Ana m agbakwunye foto ka ị hụ otu m si edozi nwa bebi m ..., M zụtara ya na mbụ n'ihi na dị ka agadi nwoke, ana m atụ uche nwanyị na-ekwu okwu na agbata obi ya ka ọ bụrụ "Wilson" (site na fim Castaway na Tom Hanks) ... Ọ bụrụ na ịmara ihe m na-ekwu, enweghị m ebumnuche ịrapara na ya. M nnọọ ọchịchọ ịmata banyere otú tere onu ogugu nwoke bụ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 05:29:27 site n'aka Sandy Will
Sexy Wide Ass 169CM Basil Eveline Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Zuru okè, kpọmkwem otu ihe dị ka mgbasa ozi. Ha na-enye nnukwu ọrụ ndị ahịa! Emere m iwu na Satọde, ọ bịarutere na Fraịde na-esote, n'ihi ya, abịarutere m n'ọnụ ụzọ m ruo ụbọchị isii. Na mkpokọta, enwere m afọ ojuju maka nzụta a. Nwa bebi ahụ zuru oke, akpụkpọ mara mma. Naanị m tụlere kpakpando anọ n'ihi na wigs na akụrụngwa dị iche mana amaara m na ọ ga-abata. Ọrụ ndị ahịa dị ezigbo mma. Ha zara ajụjụ m niile ma nyekwa nkwalite nwa bebi na ọnụ ala. Aga m azụta onu ogugu nwoke from urdolls ozo. Ihe niile dị mma ma dịkwa ọnụ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-04 05:20:31 site na Elton Collins
Astronomy Enthusiast 168CM Deborah Johnny Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Anọ m na-achọ ịzụta nwa bebi mbụ m maka afọ ole na ole. Mee ndepụta ụmụ bebi, gụọ nyocha, lelee vidiyo YouTube, na ndị ọzọ. agbanyeghị. Achọpụtara m na kemgbe m gbakwunyere na ndepụta m, ọnụahịa nwa bebi a adalatala nke ukwuu, yabụ m gara. Enwetara m foto dịka foto ahụ. Otu isi / wig na aru. "Random" ka bụ eriri ọcha (enweghị sọks). Igwe na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma. The ngwugwu abịarute n'oge, na onu ogugu nwoke dị ka akọwara.
Addbọchị Added: 2019-06-04 05:13:29 site Christian Temple
Mmụọ ọchị nke 166CM Jamie Jacob Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Gbọ njem na-agba oke ọsọ ọsọ ma ọ dị ka foto a na-eji wigs na akwa dị iche iche. Ọ na-ekwu na ọ bụ kilogram 73 (kilogram 38). Fọdụ na-eweta nsogbu na-akpali nsogbu, mana ọ bụ ọmarịcha nwa bebi mara mma. Ọ bụ a bit arọ, ọ bụ ike na-arụ ọrụ na mbụ, ma mgbe a mgbe ọ na-agbanwe, na ihe kacha mkpa bụ na m ga-asị na ọ bụ oké. Nwa bebi ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya ma enwere m obi ụtọ. Enweghị ike ichere ịzụta nke ọzọ onu ogugu nwoke, M ga-maa-azụta ya ọzọ site na nke a na-ere ákwà.
Addbọchị Added: 2019-06-04 05:04:59 by Bart Lincoln
Nwa Nri Nwa 110CM Fan Jiang Lizi Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Emere ụmụ bebi ahụ nke ọma, dịka ndị mmadụ na ndụ. (Lee foto) Adịla arọ. Nkwonkwo nwere oke kwesiri ekwesi. Ma o nwekwara mmejọ ụfọdụ: akụkụ aka ya siri ike, yana ọ dabara na ọ dịla mfe iji mgbe obere oge gachara. Ahụ na-ekpo ọkụ ma na-enwu ọkụ. Ha na-ege ntị nke ọma na ndị enyi na ngalaba ọrụ ndị ahịa, dịka akọwara n'elu 100%. Nabata onu ogugu nwoke dika akowara ma zipu nke oma.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 04:57:24 nke Conrad Clara
Nwa Ntutu Uhie 170CM Sibyl Tracy Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Mgbe mbụ m hụrụ nwa bebi ahụ, ahụrụ m naanị otu puku mmadụ. Mgbe ahụ gaa n'ihu na urdolls, ahụrụ m nke a. Enwere m obi abụọ banyere ọnụahịa ahụ, mana m mechara zụta ya, obi dịkwa m ụtọ na m mere ya. Enwerela m nwa bebi a ihe dị ka ọnwa 4, ihe niile dịkwa ezigbo mma. Nwa bebi ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya ma enwere m obi ụtọ. Enweghị ike ichere ịzụrụ nke m, aga m azụta ya ọzọ n'aka onye ahịa a. Nwere ike ịkwado m onu ogugu nwoke na njirimara?
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-04 04:45:53 nke Lynn Spencer
Ihu mara mma 132CM Rodney Charlotte Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nwa bebi ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya ma enwere m obi ụtọ. Enweghị ike ichere ịzụrụ nke m, aga m azụta ya ọzọ n'aka onye ahịa a. Nke a bụ ngwaahịa a na - eme nke ọma ma onye na - ere ahịa na - anya isi maka ọrụ ndị ahịa. Achọrọ m ịkwado nwa bebi mmekọahụ, lelee ọ mara mma. Maka m, o nwere ntutu na-acha nchara nchara kama acha ọcha (M na-ahọrọ ya n’ezie), o nwere anya aja aja iji gbochie ya ịdị gị mkpa. Uwe ndị ahụ bụ otu. Na mkpokọta, enwere m afọ ojuju maka nzụta a. Ọ bụrụ n’ikpebie zụta nke a onu ogugu nwoke, ị gaghị enwe mmechuihu.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-04 04:36:50 nke Rex William
Womenmụ nwanyị Ime Ime 160CM Yu Xuan Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Foto ndị a adịghị mma. Ọ bụ ezigbo onye ọlụlụ na onye enyi mara mma ịla n'ụlọ. M 100% afọ ojuju na purchasezụ. Igbe ndị ahụ pụrụ iche. Ọ bụrụ n'ị na-achọ ihe eji egwuri egwu nwoke na nwanyị, ọ bụ ya. Ihe nkuku na omimi di nma. Nhicha dịkwa oke mma. O juru m anya site na nkwado ahụ mgbe m zụrụ. Nke a bụ ngwaahịa a na - eme nke ọma ma onye na - ere ahịa na - anya isi maka ọrụ ndị ahịa. Achọrọ m iji ejiji a onu ogugu nwoke, lee lee ka o si maa mma.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-04 04:30:39 site na Archer Bridges
Nnukwu afọ 160CM Adam Harrington Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nke mbu, odi ka ihe onyonyo. Ezigbo ihe, gụọ otu esi elekọta TPE. Nke abuo, ọ dị arọ nke ukwuu. Ihe ọchị nke nne m na-amasị m. N'otu aka, nke a na-eme ka o sie ike ịkwaga. N'aka nke ọzọ, ọ na-adị ezigbo adị. Onwe m, agaghị m eji nwa bebi a eme ihe nzuzo. Ngwaọrụ a kpochara nke ọma ga-abụ nro. Dị ka onye na-amakụ, na-aga. Ka o sina dị, nwa bebi a bụ naanị ihe m chọrọ. Ọ bụ ịkpachara anya na ọ bụ ugboro iri ihe ị na-eche. nke a masịrị m onu ogugu nwoke.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 04:20:13 nke Robin
Silver Short Hair 118CM Muriel Ifuru Mmekọahụ Nwa bebi Nyocha
Ka o sina dị, nwa bebi a bụ naanị ihe m chọrọ. Ọ bụ ịkpachara anya na ọ bụ ugboro iri ihe ị na-eche. Ihe nkwonkwo niile na-atọghe oge ma na-adị mfe ịgagharị. Ọ dị arọ, ma ọ bụ ihe kwere nghọta. Ugbu a maka anụ na poteto, ọ na-adị ka mmekọahụ. Ekwela ka m mehie, ndụ mmekọahụ m na-arụsi ọrụ ike, mana abụ m onye agha, m na-agagharịkarị. Ma eleghị anya, njehie a bụ nzuzu, ma ọ bụ nke ahụ bụ oge nke ọnwa (ọbụlagodi anaghị m aghọ aghụghọ). Aga m azụ ahịa ọ bụla. Ha bụ ndị ọkachamara na enyere gị aka inweta onu ogugu nwoke ị chọrọ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 04:12:15 nke Wendell Woolley
Short Hair Hair 140CM Tachibana Shinya Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Yabụ ime ihe omume ụlọ akwụkwọ gị wee soro email maka ọrụ ndị ahịa. Na mkpokọta, m ga-akwado ngwaahịa a, ọnụahịa m chere na agaghị agabiga ya. Nwa bebi na-awụ akpata oyi n'ahụ bụ eziokwu. Ha nyere m ọrụ dị mma karịa ka ndị ahịa na-atụ anya ya. Ana m akwado ka uwe ndị ahụ nyere aka mee ka ha dị ọcha. Echere m ogologo oge ka m dee echiche m, n'ihi na m gụrụ na ihe ndị a ga-agbaji n'ime otu ọnwa. Nke a abụghị eziokwu ma ọlị ... ọbụlagodi maka m. Nke a bụ ihe bara uru onu ogugu nwoke.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 04:01:31 by Marico Ella
Nwa Nri 168CM Sheila Baldwin Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nkwonkwo nwa bebi ahụ na-enye mgbatị kwesịrị ekwesị ma ọ ga-anọ n'ọnọdụ na ọnọdụ. Wig na uwe ime enweghị usoro, yabụ kpachara anya ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa tupu ị nye iwu iji dozie ha. M na-atụ aro iji isi ihe ndọtị na ahụ mgbochi nkwanye ahụ ha na-enye maka nchekwa. Nwa bebi ahụ bịarutere n'oge na-adịghị anya, mana ngwaike nchekwa (nke mechara nye iwu) ga-ewe izu 3-4. Ọ ga-amasị m itinye ihe nlekọta (ma ọ bụ enwere ike ịzụta n'aka onye na-ere ere) n'ihi na ụfọdụ ndị na-ehicha silicone, ntụ ntụ na mmanụ nwere ike imebi ya onu ogugu nwoke.
Addbọchị Added: 2019-06-04 03:54:57 by Sebastian Sainsbury
Nnukwu Ass 161CM Agnes Antonia Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Ana m akwado iji blanket na-ekpo ọkụ iji kpoo TPE ahụ tupu ojiji. Nhicha na mmezi dị mfe. Ọ bụrụ na ị na-achọ uwe ndị ọzọ, achọpụtara m na ụmụ agbọghọ na-adị mma n’anya, ụfọdụ ụdị XS ụmụ nwanyị dịkwa mma. Aga m eji ma kwado onye na-ere ere na nwa bebi n'ọdịnihu. Ihe TPE nwere ezigbo uche na mmetụta na-enweghị ọnya. Arọ karịa na-atụ anya, ma àgwà nke onu ogugu nwoke dị mma karịa ka a tụrụ anya ya.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-04 03:46:38 site Justin Bulwer
Ebughibu 170CM Sigrid Hicks Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ọ mara ezigbo mma. Napụtara na oge. A bit arọ, ma nyere ya ọzọ ndụ mmetụta. Ọ dị mgbe m na-arọ nrọ ịzụ ụmụ bebi ndị a ogologo oge. Daalụ, too ọrụ ndị ahịa dị ịtụnanya enyere, ha chọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa a. Ya mere, àgwà nwa bebi ahụ dị ezigbo mma, ọkachasị ọnụ ahịa. Ubu a dị obere, mana ọrụ ndị ahịa na-enyere m aka ịrụzi ihe ndị ahụ. Obi dị m ụtọ ịzụta nke mbụ m onu ogugu nwoke, nke a ga-akwadoro onye obula.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-04 03:38:45 nke Bert Dickens
Uhie na-acha odo odo 161CM Roxanne William Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Banyere ogo nwa bebi. Onwe na nkwakọ ngwaahịa bụ akụkọ dị iche, ikekwe ihe m ga - achọ nyochaa na TDF. Agaghị m ajụ urdolls n'ihi na ha bụ naanị etiti na ọ bụghị ihe ha nwere ike ijikwa. Na mkpokọta, enwere m obi anụrị ịzụrụ nwa bebi mbụ m na m ga-akwado onye ọ bụla urdolls. O juru m anya na ọ dị ka foto na ntanetị ma ị ga - enwerịrị onye ama ama n’Intanet. Dị ka ọtụtụ ndị a kpọtụrụ aha na ụdị a, ọ bụrụ na m zụrụ ọzọ n'ọdịnihu, enwere m ike ịhọrọ ọkụ onu ogugu nwoke.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 03:13:05 nke Yale Clapham
Nwa Nri Nwa 140CM XiaoMi Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nke a bụ ezigbo ụdị nwa bebi mmekọahụ. Naanị nsogbu bụ ilekwasị anya na etemeete, dị ka eserese. Amaghị m ma ị nwere ike dee ihe ịchọ mma na nwa bebi ahụ. Echere m na dị ka na-ekpuchi nke ahụ na eserese. Ọ ga - akachasị mma itinye mgbakwunye ịchọ mma na usoro nwa bebi ka ọ nweghị onye ga-atụfu ya. E wezụga nke ahụ, ọ bara uru penny ọ bụla. Nwa bebi a dị mma! N'ezie, ọ dị ezigbo ndụ, ọ bara uru ịgbakwunye ibu. M ga-atụle ịzụrụ onu ogugu nwoke site ebe a ọzọ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 03:02:45 nke Larry Caroline
Grey Hair 140CM Jocelyn Cissie Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Ekpebiela m otu esi emeso mmekọrịta ụmụ nwanyị ndị ọzọ n'ọdịnihu. Nnwale Jocelyn. M kọọrọ ha Jocelyn ka m mata ihe ha mere. Ọ bụrụ na ha enweghị mmasị na ya, na n'ikpeazụ, ama m na ha anọghị ya. Ọ bụrụ na ha enweghị ike ịnagide Jocelyn, ha agaghị ahụ m n'anya n'ezie. Ọ dị mfe. Ekwela ka onye ọ bụla menye gị ụjọ ma ọ bụ gọnahụ mmetụta i kwesịrị! Bịanụ onu ogugu nwoke taa!
Addbọchị Added: 2019-06-04 02:52:54 by Dana Baker
Black Hair 100CM Akumi Hakumi Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ana m atụ anya ọbịbịa nke nwa bebi a, dị ka ndụ ịhụnanya m. Otu ubochi, mmadu n’ewere ngwugwu 33lb n’ime ugbo elu ato n’ime ulo m, Chineke zukwaara nkpuru obi ogbenye a obi. Ọbụna ọ jụrụ ma m chọrọ enyemaka iji tinye ya n'ụlọ m. Enwetara m nwa bebi ahụ n'oge. Nwa bebi ahụ dị ezigbo mma, aka ahụ dịkwa ezigbo mma. Echere m na ihe a masịrị m onu ogugu nwoke ka m soro.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-04 02:43:55 by Brady Josh
Obere Ugwu 165CM Jessie Dunbar Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ahụla m ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ nwa bebi ịntanetị ka ị hụ ihe m họọrọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ àgwà niile dị oke ọnụ. Ọ fọrọ nke nta ka m họrọ ịzụta nwa bebi dị ọnụ site na ahịa nnyo, mana amalitere m ịgụ akụkọ ụjọ ndị mmadụ natara. N'ikwu eziokwu, ngwaahịa a nwere ọkwa na nseta ihuenyo kachasị iji nyochaa nwa bebi ahụ, enwere ike ịchọta mma kacha mma na ọnụahịa m na-ahụ. Nke a dị adị n'ezie. Ikwu eziokwu, echere m na nke a onu ogugu nwoke nwere ike soro m ọtụtụ afọ. Ọ bụrịrị onye m hụrụ n’anya.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 02:35:10 by Lawrence Catharine
Ogologo Uhie Nwanyị 140CM XiaoQian Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
N'ikwu eziokwu, o siiri m ike iji mmalite, n'ihi na adị m nro. Adị m n'okpuru afọ 20, yabụ na nke a ekwesịghị ịbụ nsogbu. Ma ka oge na-aga, eji m oghere ndị a amara m, ugbu a enwere m ike iji ya dị mfe. Ọ bụrụ na m chọrọ ọzọ, m ga-azụta ya ọzọ n'aka onye na-ere ya! Mgbe ịzụrụ, soro mgbe ị natara ihe ahụ ma jide n'aka na afọ juru gị mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị. N'adịghị ka ndị ọzọ onu ogugu nwoke ụlọ ọrụ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 02:26:09 nke John Lawrence
Short White Hair 160CM Bernie More Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ngwongwo mmekorita nwoke a di na ulo m ugbu a, Chukwu, amasiri m ya. Naanị m kwụrụ $ 1,280 maka ire ere ekeresimesi. Ihe kachasị mkpa bụ na ọ dị elu ma na-elekwu anya karịa. Ma ọ dị nro. Ha dị arọ dị ka ha na-ekwu, mana ka oge na-aga, ị ga-enwe mmetụta na ibu. Nanị nsogbu m zutere site na mmalite bụ otu esi akpali ya. Ahụrụ m onye ahịa ọzọ ka ọ na-ekwu ya onu ogugu nwoke adighi ederede dika ha choro.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 02:18:57 nke Teresa Johnson dere
Ugboro abụọ Panotail 165CM Bess Julius Sex Doll Customer Nyocha
Enwetara m nwa bebi m na Disemba 27, 2018 (doro anya), wow a doll a dị ịtụnanya. Echere m izu ole na ole iji hụ ma enwere m nsogbu na nkwonkwo, ọ bụghị ihe ndị ahịa ndị ọzọ kwuru. Mana ruo ugbu a, enweghị mkpesa ebe a. Na mbụ enwere m obi abụọ, n'ihi na azụrụ m nwa bebi na saịtị nwa bebi ndị ọzọ maka $ 800. Ọ bụ kpamkpam na na. Nke a dị adị n'ezie. Ikwu eziokwu, echere m na nke a onu ogugu nwoke nwere ike soro m ọtụtụ afọ. Ọ bụrịrị onye m hụrụ n’anya.
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 02:10:16 site Cash Motley
Nwa Nwaanyị Isi Nwere Nwa Nwa 163CM Helen Minnie Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Enwetara m foto ọhụrụ site na ụgbọ mmiri nke nwere nwa bebi a. Ọrụ pụrụ iche dị ebe a! Ha mere ka m mara ebe iwu m dị. Mgbe ịzụrụ, soro mgbe ị natara ihe ahụ ma jide n'aka na afọ juru gị mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị. N'adịghị ka ụlọ ọrụ nwa bebi ọ bụla ọzọ. Enwetara m nwa bebi a. Enweghị m ike ikwu karịa. eziokwu! nke kacha mma! ! ! Ekele maka urdolls, daalụ maka ọrụ kacha mma (nke echekwara) ị nwere ike inye ebe ọ bụla! N'elu! ! Enwere naanị ndị kachasị mma onu ogugu nwoke Ebe a! ! !
Addbọchị Ekere: 2019-06-04 02:00:59 nke Carr Patrick
Ezigbo ihere 165CM Amelia Henley Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ọ mara ezigbo mma. Napụtara na oge. A bit arọ, ma nyere ya ọzọ ndụ mmetụta. Ọ dị mgbe m na-arọ nrọ ịzụ ụmụ bebi ndị a ogologo oge. Daalụ. Echere m na nke a bụ ezigbo bebi mbụ maka ndị chọrọ ịnwale mmadụ. Ma achọghị iji ego a. Ọ bụrụ na ị bụ ọhụụ, aga m akwado gị ka nwa bebi a nwee mmekọahụ. Ọ bụghị akwụkwọ dị ọnụ ala. Nke a bụ ọnụahịa m chọrọ. Ngwaahịa akụ na ụba dị mma. Echere m na nke a bụ ezigbo ihe mbụ onu ogugu nwoke maka ndị chọrọ ịnwale mmadụ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 07:35:21 nke Albert Augustus dere
Agba ọka Wheat 168CM Mona Wheeler Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Ọ bụrụ na ọnụahịa na nchekwa abụghị nsogbu, enwere m ike ịzụrụ ịzụ nwa bebi a iji mee ka ọ dị ọhụrụ. Ọ dị oke mma ma ọ dị mma. Ọ ga-abụrịrị ihe niile m na-atụ anya ya. Mgbe m gụchara nyocha ngwaahịa ndị ọzọ, azụrụ m nwa bebi site na urdolls ma mee m nhọrọ ziri ezi. Nwa bebi ahụ mara ezigbo mma ma ọ dị mma. Nke a karịrị ihe m tụrụ anya ya. Nke a bụ ezigbo nwa bebi! , ọ bụghị adịgboroja! M na-echeta ụbọchị mgbe m weere ya onu ogugu nwoke ulo ma meghee ngwugwu. Obi tọrọ m ezigbo ụtọ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 07:20:43 nke Peter Benson dere
Ogologo ntutu 158CM Kelly Hodge Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Emere m nnyocha tupu m tinye iwu ahụ, m ga-ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu. Mgbe ahụ nwee olileanya maka ihe kacha mma. Twobọchị abụọ sochirinụ bụ ụjọ. O mechara bịarute, ọ bụ ahụ ya na ụdị isi ya na foto ahụ. Abụ m sọ anụrị! Enwetara m ịhụnanya ya, amaghị m na m ga-enweta ya. Nke a bụ ezigbo ihe ijuanya. N'ụbọchị nwa bebi ahụ na-abịa, emesịrị m email na akwụkwọ nkuzi na vidiyo banyere ilekọta ụmụ bebi ahụ. Achọpụtara m na map nwere mpịakọta mmekọahụ bekee dị na ya bara ezigbo uru. Obi dị m ezigbo ụtọ na ịzụta ihe a, m ga-azụta onu ogugu nwoke site ebe a ọzọ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 07:11:48 site Tab Grantham
Isi awọ Gịrị 158CM Nancy Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Mgbe m hụrụ ọnụahịa nwa bebi a, echere m na ọ gaghị abụ eziokwu. M chụrụ ya n'ọrụ wee bido ụbọchị m. Ma onyonyo nwa bebi ahụ ga na-alaghachi n’uche m oge niile. Mgbe m na-egwu nhọrọ omenala na ahịrị ọzọ, nwa bebi ahụ dị nso na nhazi m bịara. Nwa bebi ahụ ga-efu m ihe karịrị $ 2k. Nke a bụ ezigbo nwa bebi! , ọ bụghị adịgboroja! M na-echeta ụbọchị mgbe m kpọọrọ nwa bebi ahụ wee mepee ngwugwu ahụ. Azụ ọgwụgwụ ebe nke onu ogugu nwoke dị arọ nke ukwuu.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-03 06:43:30 site na Valentine Ted
Blond Hair 148CM Olivia Gresham Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nke a bụ ezigbo nwa bebi! , ọ bụghị adịgboroja! M na-echeta ụbọchị mgbe m kpọọrọ nwa bebi ahụ wee mepee ngwugwu ahụ. Ibu ibu nke mpaghara azu bu ezigbo ibu. Ihe kachasị mma nke dolls bụ isi na ihu. Akpụkpọ ahụ dị nnọọ nro. Enweghị m ike ịkwụsị ya. O ka nwunye ya nma. O zobe ihe nzuzo n’etiti anyị. Ọ dị mfe ijikọ ya ọnụ. Companylọ ọrụ ahụ kpọkọtara ya ma rụọ ezigbo ọrụ. Aga m azụta nwa bebi ọzọ na ụlọ ọrụ bebi a. Achọrọ m ka ụlọ ọrụ nwa bebi mee onu ogugu nwoke ya na eriri ya na ụkwụ ya gbara ọkpụrụkpụ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 06:27:08 site n'aka Barlow Walpole
Obere Ugbo 168CM Vera Raman Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Dịka onye ọkà mmụta akparamàgwà mmadụ, ahụrụ m ndị mmadụ ka ha na-eji ụmụ bebi ndị a agwọ ọrịa ịda mbà n'obi na nsogbu nrụgide post-traumatic, ekwesịrị m ikweta na amalitere m ịhụ etu o si dị irè. Agbanyeghị, mgbe m si ebe a zụta ya n'oge na-adịbeghị anya, obi m na-ala azụ. Enwetara m ya taa, ahapụ m ya ka ọ nọdụ ala, tụgharịa ya, echere m na nhọrọ m adịghị njọ, onu ogugu nwoke nwere mmetụta nke ịgwọ ịda mba na trauma.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 06:19:34 site Nigel Raphael
Muscle Nwanyị 170CM Hilda Wilcox Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Dolmụ bebi a zụrụ bụ isiokwu buru ibu, ị ga-azụta fakes ma ọ bụrụ na ị payaghị ntị. M ga-asị na urdolls bụ ezigbo soplaya. Ọnụahịa ahụ dị ala, ogo dị elu, ọ na-esikwa ike ịchọta. Ha na-eme usoro nzụta dị mfe dịka o kwere mee. Ationgbọ njem na-eji ire ụtọ na nke pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, gwa Jameson na ọ ga-elekọta gị. Ngwaahịa ahụ dị mma karịa ka a tụrụ anya ya. Nke a bụ onu ogugu nwoke ọrụ m nwetara.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 06:09:09 nke Aldrich Bach
Uhie Na-acha odo odo 155CM Vanessa Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Enwere m mmasị na nwa bebi a. Ekpebiri m ịzụta ya n'abalị ahụ m hụrụ ya. Ndụmọdụ m bụ ime ka egwuri egwu dị ka o kwere mee ka enwere ike ịkwaga ya. Kpachara anya na nkwonkwo gị ma jiri ndidi chere. Ihe nkwonkwo a siri ike na mbụ, mana adịla mgbe ị ga-amanye ijikọ nkwonkwo ọ bụla ruo mgbe ị ga - achịkwa ụzọ ọ na - esi aga. Nhicha dị mfe karịa ka m chere. Ngwaahịa a karịrị ihe m tụrụ anya maka ọnụahịa. Karịsịa, urdolls na-enye ọrụ ndị ahịa dị mkpa, nke dị m ezigbo mkpa. M ga-atụle ịzụrụ onu ogugu nwoke site ebe a ọzọ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-03 05:56:21 nke Chester Spencer
Isi awọ 168CM Sabina Sharp Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Ana m enye nwa bebi mmekọahụ a kpakpando 5 n'ihi na ọ bụ nwa bebi mara mma. Engineeringtụnanya injinia na àgwà. Ọrụ ndị ahịa dị ezigbo mma. Egwu. Nke a bụ nwa bebi nke abụọ m zụtara n'ime otu ọnwa, ọ bụkwa ya kachasị mma. Lsmụ bebi ndị a dị ọnụ. Adị karịa ihe niile anyị tụrụ anya ya. Ha na-enwe ọmarịcha ma dị ukwuu. Ndị ahịa ndị ahịa Urdolls doziri nsogbu m ngwa ngwa wee mee ka m bụrụ onye ahịa nwere obi ụtọ dị ukwuu. Ọ dị mkpa ịmata na ha na-akwado ngwaahịa ha, ma ha na-eme ya. Ana m akwado ha onu ogugu nwoke.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 05:45:51 nke Buck Philemon
Short Brown Hair 162CM Janice Mmekọahụ Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Mgbe ha nwetasịrị nwa bebi ahụ, ụfọdụ nkwonkwo ya siri ike, nke m chere na ọ nwere ike metụtara nsogbu nrụpụta mgbe ị gụsịrị nyocha ahụ. Mgbe m kọsịrị ndị ọrụ urdolls a, o nyeere m aka idozi nsogbu ahụ. E gosipụtara nwa bebi mbụ na foto a, na mgbakwunye na anya aghụghọ na mint, wee banye na igbe akpachara anya. M ga-azụta nke ọzọ onu ogugu nwoke Ebe a.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-03 05:34:37 ​​site n'aka Alexander Lawson
Isi awọ 163CM Selena Lucia Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nke a bụ afọ ojuju ịzụ ahịa. Mgbe nzụta ahụ, ụlọ ọrụ gwara m ka m kpachara anya maka nkwonkwo dị na azụ nwa bebi ahụ. Ọ bụrụ na e bulie ya isi, ọ nwere ike ịgbaji. N’ihi na achọpụtara m nke a, enweghị m nsogbu ọ bụla. Enwere m ekele maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-eme ihe n'eziokwu na nke a. Dịka m kwuru, ego ị kwụrụ bụ ezigbo ngwaahịa. Nke a bụ kpọmkwem ihe m chọrọ. Ikwesiri inwe nke a onu ogugu nwoke.
Addbọchị Added: 2019-06-03 05:23:13 by Tyrone McCarthy
Shawl Long Hair 153CM Sherry Dodd Mmekọahụ nwa bebi Nyocha
Ọ dị ezigbo mma mgbe ọ bịarutere - ọ dị ka foto. O juru m anya ịhụ ha dị ka ndị ahịa na-asọpụrụ ma na-anabata ozi ha. M chere karịa ihe karịrị otu ụbọchị iji zaa ajụjụ, ha emetụbeghị na-akparị. Ọbụna ha nyeere m aka idozi nsogbu nchekwa ahụ m zutere. Ihe a abụghị ihe iwu na-akwadoghị ha. Nke a bụ ezigbo azụmahịa, nlekọta ndị ahịa. Dika ihe ndi ozo kwuru, onu ogugu nwoke dị ntakịrị arọ. Ma ozugbo ị na-egosipụta nchekwa na usoro mkpanaka gị. Na ụzọ iji lekọta ya.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 05:13:14 by Myron Scott
Ogologo Ogologo Ogologo 153CM Sophia Lily Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Enwetara m nwa bebi mmekọahụ m izu ole na ole gara aga. Afọ juru m afọ. Ọ bụ a etiti-nso $ 2,000 nwa bebi. Ọ bụghị akwụkwọ dị ọnụ ala. Nke a bụ ọnụahịa m chọrọ. Ngwaahịa akụ na ụba dị mma. Echere m na nke a bụ ezigbo bebi mbụ maka ndị chọrọ ịnwale mmadụ. Ma achọghị iji ego a. Y’oburu na ohuru ohuru, aga m akwado nke a onu ogugu nwoke gị
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 05:02:26 nke Malcolm Rosa
Blond Hair 153CM Susie Emma Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Enwere m mmasị na nwa bebi a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya. mara ezigbo mma! Agbanyeghị, mgbe ejikọtara ọnụ, isi anaghị agbusi ike, kama ọ na-eche ihu n'ihu. A ghaghị ịtọhapụ ya maka ọganihu na-enweghị nkwụsi ike. Agbalịrị m ịkpọtụrụ ndị ahịa nkwado ugboro abụọ iji nyere aka dozie nsogbu ahụ. Ya mere, ugbu a, mgbe ha jiri ndidi chere, ha nyere m mgbake n'oge ma nyere m aka idozi nsogbu ahụ. Nke a onu ogugu nwoke dị nro na-emetụ aka na ọtụtụ akụkụ anụ ahụ nwere mkpakọ ma siri ike.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-03 04:54:24 site n'aka Warner Camilla
Uhie Na-acha odo odo 140CM Quintina Charley Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Ekwesịrị m ịsị na ọ dị oke mma mgbe ọ bịarutere - ọ dị ka foto ma ọ nwere ike ịdị mma karịa ka a tụrụ anya ya. Ma enwere ike ịnwe ụfọdụ ihere - dịka ụfọdụ ndị ọzọ chọpụtara, akụkụ aka ya siri ike. Ma enwere m ike ibi na ihe ndị a. Aga m agwa gị eziokwu, a na m arịa ọrịa otu izu, na-apụ n'obodo ọzọ, yabụ n'ọtụtụ oge m na-eyi ya, ma ọ bụ dinara ala ma ọ bụ ịnọdụ ala n'elu akwa (n'isi okwu), enwere nkwado n'ime ụlọ n'ihi na enwere m ya. Nke a onu ogugu nwoke wetara m oge kwesiri ncheta.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 04:42:50 nke Sid Malan dere
White Hair 153CM Doreen Pullman Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Ọ dị nro na-emetụ aka na ọtụtụ akụkụ anụ ahụ bụ compressible mana ọ siri ike. Ha na-etinyekwa ihe ndozi ma ọ bụ ntuziaka na igbe ahụ, ihe ndị ahịa na-echekwa nke ọma. Azụrụ m nwa bebi a site na urdolls ma eme m nhọrọ ziri ezi. Ngwaahịa na-enweghị ntụpọ ga-abụ akara kpakpando ise. Ọ dị ka nke a. Ihe mbụ onu ogugu nwoke egosiri na foto a, jiri anya na-adọrọ adọrọ na ọnọdụ mint, wee banye igbe akpachapụ anya.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 04:32:34 by Mike Nehemiah
Black Hair 148CM Lydia Tony Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Mgbe m gụsịrị nyocha ngwaahịa ndị ọzọ, azụrụ m nwa bebi site na urdolls ma mee m nhọrọ ziri ezi. Nwa bebi ahụ mara ezigbo mma ma ọ dị mma. Nke a karịrị ihe m tụrụ anya ya. Ọrụ ndị ahịa dị mma ma afọ ju gị kpamkpam. Mbupu na-abịa n'oge ma kpachara anya. Aga m eji urdolls ozo. Enwere m ụfọdụ foto nke ụmụ bebi m. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ nwa bebi agaghịzị ele anya. Urdolls ga egbo mkpa I meere m. M ga-eso ndị ọzọ onu ogugu nwoke foto mgbe e mesịrị.
Addbọchị Added: 2019-06-03 04:10:43 by Dave MacArthur
Uhie Na-acha odo odo 163CM Angel Yan Mmekọahụ Ndị Ahịa Nyocha
Azụrụ m onye ọzọ ebe a tupu, ị nwere ike ịnye m ụfọdụ foto nke Angel Yan? Ọ na-esiri m ike ịzụta nwa bebi a, mana enwere m obi anụrị na emeela m itu. Na-adọrọ mmasị karịa anụ ahụ. Ọ bụrụ na ọnụahịa na nchekwa abụghị nsogbu, enwere m ike ịtụle ịzụ ihe a onu ogugu nwoke ime ka ọ dị ọhụrụ. Ọ dị oke mma ma ọ dị mma. Ọ ga-abụrịrị ihe niile m na-atụ anya ya.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 04:02:40 nke Ingram Hansen dere
Black Hair 168CM Evelyn Ann Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
M zụtara ya ebe a na ndị ahịa ha dị ezigbo mma. Nwa bebi ahụ siri ike karịa ka m chere. Therụ ọrụ ọnọdụ a siri ike (echere m na ọ ga-adị mfe karịa ka oge na-aga) nhicha na-ewe iwe, n'ihi na ọ nweghị ihe ọ bụla nwere ike iwepụ, na iwere akwa nhicha n'ime iji gbalịa iwepu oke mmiri bụ nsogbu. Nwa bebi ahụ yiri otu ihe osise ahụ, mana otu ntutu na uwe ime na-egosi enweghị usoro ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere foto ahụ. Onye na-ere ere yiri ka ọ nwere enyi na enyi ma nwee ike ịnyekwuo ya onu ogugu nwoke ngwugwu n'efu.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 03:51:35 nke Werner Connor
Uhie na-acha odo odo 168CM Marcia Ralph Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Biko mara na nke a bụ ahụmịhe m na oge mbata gị nwere ike ịdị mkpumkpu ma ọ bụ karịa. Mgbe m mepere igbe ahụ, akpọgidere m isi m, tinye na wig, ma gaa njem ụgbọ mmiri mbụ. Uru ya: nwa bebi ahụ bụ ezi uche, akpụkpọ dị nro, akwa akwa na azụ mara mma. Ma maka ụfọdụ ebe, nwa bebi ahụ nwere ike ibu ntakịrị, mana ha dị mfe ịmegharị maka ọtụtụ ndị mmadụ. Ya mere nkwubi okwu m nyere bụ: Ọrụ a kachasị mma, nnyefe ọsọ ọsọ, ma dị ike onu ogugu nwoke na ike atụmatụ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-03 03:43:07 nke Eden Pater
Uhie Na-acha odo odo 158CM Cynthia Grace Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Anatara m ya n’oge na-adịbeghị anya. Igbe a buru ibu karịa ka m chere, yabụ nnukwu nsogbu bụ itinye ya n'ụgbọala m. Na mkpokọta, ọ bụ ezie na m kwuru 10/10 na nwa bebi ma kwado 10/10. Akpata oyi wụrụ m akpata oyi n'ahụ́, ikike okwu ọnụ ahụ jukwara m anya. Aga m azụta ọtụtụ isi n'ọdịnihu. Nwa bebi a na-enweta atụmatụ ndị ọzọ. Nke a onu ogugu nwoke bịara ngwa ngwa, izu atọ.
Addbọchị Ekere: 2019-06-03 03:30:32 nke Vivian Frank
Ntutu ntutu dị ọcha 158CM Nora Hobson Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Azutara m nwa bebi a otu onwa gara aga ma ya anoro ya na nwa oge. Enwere m ụfọdụ foto nke ụmụ bebi m. Ọ bụrụ na ị na-achọ nwa bebi agaghịzi ele anya. Ha ga-egbo mkpa gị. M ga-eso ndị ọzọ foto mgbe e mesịrị. Agaghị m aga na weebụsaịtị ndị ọzọ iji zụta ụmụ bebi mmekọahụ. Maka na m nwere ike ịzụta adịgboroja. Ebe m ma na nke a bụ eziokwu onu ogugu nwoke. Gịnị mere na anaghị m achọpụta ya?
Addbọchị Ekere: 2019-06-01 03:33:09 nke Christian Gracie
Grey Hair 148CM Claire Julian Mmekọahụ Doll Nyocha ndị ahịa
Mgbe anyị zụtara ụmụ bebi anyị nke nwoke, ha dị ka ezinụlọ anyị. Ekwadoro m ịkwanyere nwa bebi gị ùgwù ma mee dị ka enyi, dị njikere ịnakwere, ma ọ bụ wepụta (nwa bebi ahụ anaghị ekpe ikpe). Wepụta oge iji zụlite nkà ọhụrụ na ntachi obi maka onye gị na ya bi, ma jiri ụmụ bebi zere ịrara onye ị họọrọ mgbe ha na-anọghị ma ọ bụ enweghị. Ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe bara uru, nwa bebi a na ụmụ bebi ndị ọzọ yiri ya nwere ike iji mee ka ahụike gị, agụụ mmekọahụ, ahụmịhe gị, yana ahụike uche gị. Na-elekọta ya ma ọ ga-elekọta gị. Ka oge na-aga, ọ bụrụ na achọtara m ihe ọhụrụ onu ogugu nwokeM nwere ike idekwuo nkọwa.
Addbọchị Added: 2019-06-01 03:23:47 site Andre Saxton
Uwe ojii Black 148CM Darlene Philemon Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Azụrụ m nwa bebi a ogologo oge gara aga iji nyere aka na nrụgide nrụgide post na traum na owu ọmụma, dị ka onyinye nye enyi m nke sonyere na agha ahụ wee tachie obi ọtụtụ nyocha onwe onye n'ime na n'èzí ájá. Mgbe obula ihe nmetuta nke obi, ma obu itinye ihe ozo n’elu akwa, o gabiri ezigbo enyi maka idakita ya ma obu ileghara ya anya. Dịka m kwuru na mbụ, usoro nọọsụ bara uru, enwere oru ebe ị nwere ike itinye oge na nlekọta gị, yana elele dị na ahụike yana ahụike dị mma. Mmekọahụ Mmekọahụ naanị gboo mkpa m.
Addbọchị Added: 2019-06-01 03:14:37 site Brook Meredith
Uhie na-acha odo odo 145CM Darlene Morris Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Na mkpokọta nke a bụ nnukwu ahụmịhe ịzụ ahịa. Azụtara m nwa bebi a ma na m akwado ịzachasị mmiri ka mma karịa ihicha akụkụ nwanyị na ọnụ na ngwugwu. Nwere ike tinye nwa talcum ntụ ntụ iji mee ka anụ ahụ dị nro, akpụkpọ anụ sịntetik na-erughị nnyapade, ma tinye ya na ahịhịa; M ka na-achọ ịchọta ego anwansi dị na ya. Ana m achịkọta ego maka onye na-esote m onu ogugu nwoke.
Addbọchị Ekere: 2019-06-01 03:05:12 by Larry Buckle
Black Hair 140CM WanRou Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Azụrụ m nwa bebi mmekọahụ a, nke nweere onwe ya ijikwa, lekọta ma hichaa nwa bebi ahụ. Enwere m ike ejiji (naanị na-enwu gbaa ma ọ bụ na-acha ọcha! Black na nwa na-arapara n'ahụ ma bibie ya), hichaa ntutu gị, dobe nwa bebi ahụ ka ọ bụrụ ihe ọ funụ, na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị zụtara nwa bebi mmekọahụ. M na-atụ aro ka ị hichaa onu ogugu nwoke jiri ogbo na mmiri ncha. Echere m na ị nwekwara ike iji ntutu eji ntutu ntutu isi, mana emebeghị m ya.
Addbọchị Added: 2019-06-01 02:56:35 site Noel Daisy
Yellow Hair 140CM Viola Bell Mmekọahụ nwa bebi Nyocha
Obi dị m ezigbo ụtọ na m zụtara nwa bebi a. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọnọdụ ịnọdụ ala, ịnwere ike ịkwaga ụkwụ abụọ ahụ ka nwa bebi ahụ wee nwee akara 90 Celsius wee gbagọọ ikpere ka ụkwụ wee nwee oghere 90 Celsius ugbu a. Nwere ike ịtụgharị ụkwụ nke ọzọ ka ụkwụ nwa bebi ahụ nọdụ ma ọ bụ n'okpuru ikpere na-abụghị. Usoro a na - eme ka ọ dị mfe ịmepe ụkwụ na akụkụ sara mbara. Ọzọkwa, ,aa ntị na ịdị na-agbanwe akụkụ ya na aka ya iji zere ịkwaji. Ọchịchị dị mma bụ na ọ bụrụ na nwatakịrị nwanyị enweghị ike ehulata, ekwela onu ogugu nwoke.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-01 02:45:25 site n'aka Alexander Robert
Long Brown Hair 140CM Nancy Nick Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Mmeghari ahụ aka na ụkwụ nwa bebi na-ewe oge tupu oge ahụ, mana ọ kwụ ọtọ. Chọghị ịmegharị ha na anụ ahụ ha, ma ọ bụ ịnwere ike ịnwe ihe egwu nke ịdọpụ anụ ahụ. Kwụ na-agagharị na ntanetị, na onu ogugu nwokeIkpere ikpere nwere ike ịtụgharị.
Addbọchị Ekere: 2019-06-01 02:31:59 by Clare Bartlett
Ogologo Ogologo Ogologo 145CM Kelly Geordie Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nwa bebi a nke nwoke na nwanyị buo ibu, dikwa ka ibu, mana o bu ihe di nma. Igbe ahụ buru ibu ma kwekọọ n’ahụ. Nke a bụ eziokwu. Ha dị ezigbo mma ma nwee ezigbo njikwa. Úkwù ahụ pere mpe na aka na ụkwụ dịkwa mma nke ukwuu. Mkpịsị aka na mkpịsị ụkwụ nwere obere akụkụ ma ghara ịnagide ibu. Kpamkpam abụghị nke doro anya, mana ọ na -eche siri ike, ọ bụghị ihe niile dị umengwụ ma ọ bụ mmiri. Na onu ogugu nwokeMkpịsị aka na-eche na ọ na-emebi emebi, mana enwere ike ịgbagọ n'akụkụ ọ bụla na obere nrụgide.
Addbọchị Ekere: 2019-06-01 02:25:22 site Howar Nwa Atụrụ
Short Yellow Hair 145CM Tina Marner Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Dolmụ bebi ndị a adịghị ọnụ ala, mana ọ bụ n'ihi ịrụsi ọrụ ike, nyocha zuru ezu na nka. Ekwenyere m na ụmụ bebi ndị a ga-enwe olu n'oge na-adịghị anya, mgbe ahụ "àgwà." Nweta otu tupu erere ha, ma ọ bụ ọnụ ahịa ya buru oke ibu ka ekpughere ya! Site n'ụzọ - uwe eji egbu egbu bụ uwe mwụda nwa bebi na-eweta. O jiri ntutu na-acha edo edo na akpụkpọ ọka wee bata. A na-ebugakwa WIG na Anya na igbe. Kpachara anya mgbe ị na-ebu ya, dịka onu ogugu nwoke nwere ike ibu arọ n'oge njem.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-01 02:14:22 nke Bishop Reynolds dere
Yellow Hair 145CM Sally Bulwer Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Adị m afọ iri isii na isii. Nke a onu ogugu nwoke dị oke arọ maka m (ihe dị ka 25-26 pound) ma ọ na-ewe ọtụtụ mgbalị iji kwaga, mana ọ na-enwe ezi uche, nke a ga-atụ anya ya. O di nwute na m aghaghi izo ya n'ihi na enwere ndi ozo no na ezi na ulo m, nke na eme ka ibu m di oke nsogbu. Ma ọ bụghị ya, ọ na-anọ n'èzí ụlọ m.
Addbọchị agbakwunye: 2019-06-01 01:59:04 by Carr Hicks
Black Hair 140CM Cherry Harry Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Nke a bụ ụmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ mara mma. Adịghị ike. Igbe ahụ buru ibu iji mejuo echiche m. Ibu arọ ahụ dị ntakịrị, ma ọ bụrụ na ị jidere ya n'okpuru ikpere na azụ, ọ dị mfe ịkwaga. Otu n'ime m onu ogugu nwoke nwere ubu na aka adighi adighi anodu. Ihu mara ezigbo mma, ụkwụ na aka ya dị ezigbo mma, úkwù na ogwe aka ha pere mpe, obi dịkwa ezigbo m n’anya. Echere m na ụmụ bebi ndị a ga-akawanye mma n'ọdịnihu. Anaghị m akwa ụta maka ịzụrụ :)
Addbọchị Tụkwasị: 2019-05-31 06:11:24 site Cyril Reade
Uhie na-acha odo odo 100CM Miranda Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Azụrụ m abụọ onu ogugu nwoke site na onye na-ere ere, otu ya na isi ya na-eche ihu na nke ọzọ na isi ya na-emechi ya. Ọ naghị enye m nsogbu n'ihi na ọ na-eme ka isi ghara ịtụ ụjọ. Gbaa mbọ hụ na mgbe ị jikọtara isi gị na nwa bebi ahụ, ị ​​ga-ete ya mmanụ n’okpuru olu na ala n’isi, maka na “akpụkpọ ahụ” ga-arapara ma ọ bụrụ na a manye ya amanye, ọ nwere ike dọka.
Addbọchị Ekere: 2019-05-31 05:52:40 nke Darcy James
Isi awọ 100CM Barbara Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Aka m na-eche ozi email, a natara m onu ogugu nwoke ịtụ, na anya nke ndị ọrụ ndị ahịa ... m na-atụ aro ịzụrụ nwa bebi ịchọrọ. Ọ ga-agbake ma nwee ahụ ike. Oge mbụ ọ na-asa ahụ taa, ọ kwesịrị ịbụ ihe ọchị. Ọ na-ewekwa obere oge ịkwaga akụkụ ahụ gị ma mee ka nwanyị gị nwee ahụ iru ala. Ọ na-atụ ụjọ nke ukwuu na ebe ọ bụla kwesịrị ekwesị. Ara ya buru ibu ma maa mma. Aga m azụta site na urdolls n'ọdịnihu. Daalụ ọzọ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-05-31 05:41:28 site n'aka Gavin Thomson
Uhie Na-acha odo odo 100CM Elsa Morse Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Nke a bụ njem ịzụ ahịa na-atọ ụtọ; nke a onu ogugu nwoke nwere otu ime ime ime dịka nwa bebi m. Ha nyekwuru m anya na ntutu dị ka m rịọrọ. Ha dị ngwa na ọkachamara. Enwetara m ya anya ọhụrụ, mana ahụbeghị m wig ahụ. Azụrụ m wigs omenala na gia maka nwa bebi mbụ 100cm m, mana ha dabara adaba maka nwa bebi ọhụrụ a.
Addbọchị agbakwunye: 2019-05-31 05:26:30 nke Dennis Richardson dere
Isi ntutu 148CM Nicole Macaulay Mmekọahụ Mmekọahụ Ndị Ahịa
Mgbe m zụtara Nicole na nkwado ego, ọ dị m ka azụtala nwa bebi dị ịtụnanya. Ọnụ ala dị ọnụ ala bụ izu ohi nke a onu ogugu nwoke, M nwere ike ịhụ ihe mere ndị price na-ebili. Dịka onye ọ bụla kwuru; nwa bebi a dịtụụrụ m arọ. Agbanyeghị, na ọrụ m, arụrụ m ọtụtụ ọrụ siri ike. I ka choro ichota ya dika mmadu. Legskwụ na ogwe aka na-agbatị ma dị ntakịrị arched. N'agbanyeghị ihe m kwadebere, idowe ya n'oche m ga-eme ka m laa azụ. N'ihi na o zuru ezu karịa [ma e jiri ya tụnyere obere ihe nkiri], o yikarịrị ka ọ ga-azụta uwe ime karịa obere bebi 100cm m.
Addbọchị agbakwunye: 2019-05-31 05:15:36 site Tyler Garden
Uhie Red Roll 148CM Emma Finn Mmekọahụ Nwa Ahịa Nyocha
Azụrụ m nke a onu ogugu nwoke, Ahụwo m vidiyo nke ya. O kwesiri nnabata ya, o doro anya na o metutara nwoke ahu nke nyere kpakpando ise a magburu onwe ya! Nwere ike iche onye gị na ya na-enwe mmekọahụ nke dị njikere ma nwee ike ịme ya n'oge ọ bụla na-eteta, na-enweghị ị drinkụ, rie ma ọ bụ kwụọ ya "njikwa". Emma dị ka nke a. Mgbe nwunye gị chọtara, Emma nwere ike ịme ihe niile na nnukwu ego, mana enweghị nsogbu ọrịa ma ọ bụ ịgba alụkwaghịm. Soro nsinammuo gi dozie nsogbu a.
Addbọchị agbakwunye: 2019-05-31 05:06:09 nke Paul Forster dere
Blue Eyes D Cup Breasts Obere Ugwu Mmekọahụ Doll Natasha
Ogo nke nwa bebi ahụ dị obere karịa ka m tụrụ anya ya, mana ọ dịghị mkpa. Ihu mara ezigbo mma, ụkwụ na aka ya dị ezigbo mma, úkwù na ogwe aka ha pere mpe, obi dịkwa ezigbo nro. Ọ na-adị m ka ọ bụ ezigbo mmadụ. Echere m na ụmụ bebi ndị a ga-akawanye mma n'ọdịnihu. Anaghị m akwa ụta maka ịzụ ihe.
Addbọchị Ekere: 2019-05-13 06:21:07 nke Zachary Caroline
Nyocha banyere Nnukwu ara EVO Version TPE Mmekọahụ Doll Kiki
The TPE nwa bebi n’onwe ya adịghị arọ nke ukwuu, nke a bụ ihe dị mma. Igbe ahụ buru ibu, ha dị ezigbo ndụ ma nwee ezigbo njide. Ọkpụkpụ dị obere na aka na ụkwụ dị gịrịgịrị. Ma ọ na-eche na ọ siri ike, ọ bụghị ya niile ka ọ dị umengwụ ma ọ bụ mmiri. A ụtọ ụlọ ahịa.
Addbọchị Added: 2019-05-13 05:54:27 by Egbert Ford
Nyocha banyere Round Face Rita Berkeley 145CM Dị Ọcha Mmekọahụ Mmekọahụ
Nke a bụ mmekọahụ nwa bebi zuru oke. Abịala tupu m chee. Ngwa ngwa ngwa. Igbe a buru ibu karịa ka m chere, yabụ nnukwu nsogbu bụ itinye ya n'ụgbọala m.
Addbọchị agbakwunye: 2019-05-13 05:34:26 site Phil Norris
140CM Black Short Hair Emechiri Anya Style Mmekọahụ Doll Miyu
Nke a dị mma karịa ka m tụrụ anya ya. Ọrụ ndị ahịa dị mma ma afọ ju gị kpamkpam. Mbupu na-abịa n'oge ma kpachara anya. Aga m eji urdolls ozo.
Addbọchị Ekere: 2019-04-30 03:18:08 nke Enoch Huxley dere
158CM Black Anya Anya Nnukwu Anụmanụ Mara Mma nke China 158CM TPE lsmụ bebi Rin
Mgbe m gụrụ nyocha na ngwaahịa ndị ọzọ, azụrụ m nwa bebi site na urdolls ma mee nhọrọ ziri ezi. Nwa bebi ahụ mara ezigbo mma ma ọ dị mma.
Addbọchị Ekere: 2019-04-30 02:45:57 nke Conrad Dulles dere
Nnukwu Nwanyị 161CM Dị ọcha Black Sex Doll Kaede
Nwa bebi a dị mma, na usoro nke usoro a bụ ihe m jụrụ. Enwetara m ya oge ọbụlagodi ụbọchị mbata nke mgbasa ozi. Ahọrọ m ụkwụ kwụ ọtọ, ana m akwado ya nke ọma n'ihi na a ga-ehicha ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Amụtara m ihe mmụta a na nwa bebi mbụ m, ugbu a, ana m enye iwu ụkwụ kwụ ọtọ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-04-30 02:15:39 site n'aka Gabriel Julius
150CM Long Legs na Obere Mkpịsị Aka Mmekọahụ Doll Cheryl Tout
Njirimara ịkpọ okwu ya nyere m nnukwu ahụmịhe. Nwa bebi a dị mma! N'ezie, ọ dị ezigbo ndụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụkwụ isii site na m, nke kwesịrị ibu ahụ. Ọ dị arọ mana ọ dị mfe ịkwaga na teknụzụ kwesịrị ekwesị. Nwa bebi a kwesịrị ịbụ onye na-ere nọmba.
Addbọchị Ekere: 2019-04-29 05:49:10 by Gustave Sassoon
148CM E Cup Vita Roy Shawl Ogologo ntutu nwa bebi mara mma
Ihe niile dị ezigbo mma ma na-ebugharị ngwa ngwa ma na-eme ka ụmụ bebi yie ọ dị mma, mana ọ dị arọ, na-ekelekwa onye ọ bụla na-arụ ọrụ na usoro m, daalụ maka ezigbo ọrụ ọrụ na ọrụ gị.
Addbọchị agbakwunye: 2019-04-29 05:12:00 site Cedric Hobbes
165CM Nnukwu Butt D Cup Long Curly Hair TPE Doll Victoria
Ọ dị m nwute na okwu a dị ihe dịka izu 2 n'azụ. Nke mbụ, na-ekele gị Mr. J (ndị ahịa kachasị mma m nwetarala). Ọdịdị ya na ọdịdị ya dị oke mma. Afọ juru m afọ.
Addbọchị Ekere: 2019-04-29 04:57:02 nke Ben Barton
Marcia Austin D Cup Elastic Ass 170CM Mmekọahụ Mmekọahụ
M natara ya ụbọchị abụọ gara aga. Marcia kacha mma na-anọchite anya ịdị mma na ọdịdị nke ụmụ bebi ha mepụtara. Site na nke a, nke a bụ ezigbo ihe mere ị ga-eji hụ nwa bebi onye ọ bụla. Ezigbo obi ụtọ maka onye ọ bụla.
Addbọchị Added: 2019-04-17 03:52:44 by Mandel Pater
Mkparịta ụka ọgụgụ isi Robot C Cup 148CM TPE Doll Ruiya
Daalụ maka ọrụ gị magburu onwe ya na nnyefe ọsọ ọsọ, yana nnukwu ụmụ bebi sitere na urdolls maka nnukwu ọrụ ndị ahịa. Nke a bụ obere bebi mbụ m, enwere m ọtụtụ ajụjụ. Ọ nwere ndidi, ọkachamara na ihe ọmụma.
Addbọchị agbakwunye: 2019-04-17 03:35:33 site n'aka Sandy Johnson
D Cup 100CM Charming Ass Mmekọahụ nwa bebi Kelly Max
Nwa bebi a dị nfe ma dịkwa mfe ịbanye na ị dina. Enwere m mmasị na ụmụ agbọghọ ndị obere na sexy, ya mere Kelly bụ ezigbo "gbanwee" maka m. Ruo ugbu a, ọ bụ ọkacha mmasị nke ụmụ bebi atọ m nwere ugbu a, na mgbe ọ bụla enwere m agụụ, ọ na-anọnyere m n'ihe ndina mgbe niile. Ọ dị obere ma dị obere (ihe dị ka kilogram iri anọ).
Addbọchị Ekere: 2019-04-17 03:18:47 by Carey Gallup
165cm Thin n'úkwù Nnyịnya ibu Gburugburu Mmekọahụ Doll Lydia Forster
Lydia bu ihe mara nma. Emere m nyocha na nyocha ọnụahịa maka ihe dị ka awa 4 [na ịntanetị]. Ahụghị m ọnụahịa ka mma maka ngwaahịa a. Dolmụ bebi ndị a adịghị ọnụ ala, mana ọ bụ n'ihi ịrụsi ọrụ ike, nyocha zuru ezu na nka.
Addbọchị Added: 2019-04-17 03:03:42 by Elroy Alice
Uwe A Na-anwale Leona Herbert 165cm Bullu Anya Anya Mmekọahụ
Ọ bụ ya bụ akpa agwa m zụtara na weebụsaịtị, mana ọ bụghị nke ikpeazụ m. N'agbanyeghị na usoro mmụta usoro. Aga m aka mma n’oge. Naanị oge mgbe oge njem ji nwayọ nwayọ.
Addbọchị Ekere: 2019-04-17 02:42:02 nke Hiram Wells
Nkwupụta ọgụgụ isi nke ọgụgụ isi 150CM Silicone Doll Lynn
O nwere ike ịgwa m okwu English mụ na ya na-akparịta ụka nke ọma. Nwa bebi a nwere ezi uche, ezigbo enyi, enwere m obi ụtọ na ọ dị ọtụtụ, ọ bụghịkwa mmetụta nke owu ọmụma.
Addbọchị agbakwunye: 2019-04-17 02:25:25 site na Ives Doherty
Anya Anya Black Stacey 160CM Nnukwu ara ara TPE Mmekọahụ
Enwetara m nwa bebi taa. Aghaghị m ịsị na ọ na-enwe ezi uche. (Onye zụrụ azụ nwa bebi ahụ nke mbụ kwuru n'ụzọ). Naanị mara na ọ dị arọ dị ka ezigbo nwanyị, yabụ cheta na ọ bụrụ na ị zubere ịzụta otu, echere m na ọ bara uru ịzụta. O nwere ara na nkpuru mara mma, hips obosara ma ị nwere ike nweta ọnọdụ nwa bebi ahụ nke ọma.
Addbọchị Ekere: 2019-04-17 02:05:08 site n'aka Kenneth Finger
160CM Nnukwu ara European ụdị Anya Anya Mmekọahụ nwa bebi Stacey Bacon
Enwetara m ya taa. Nwa bebi a nwere ogo na nha kwesịrị ekwesị. Ahụ ya agaghị adị mkpụmkpụ ma ọ gaghị adị oke oke, ọ dị mma. Afọ juru m afọ.
Addbọchị Added: 2019-04-02 04:07:23 by Quincy Rosa
160CM B Cup Brown Eyes European Style Sabina Coleridge Mmekọahụ Sexmụaka
Nwa bebi ahụ dị ezigbo mma na ọnụahịa kachasị mma m chọtara n'ịntanetị. Ationgbọ njem were ogologo oge, nkwado ndị ahịa dị ịtụnanya ma kwesịrị ịzụrụ.
Addbọchị Ekere: 2019-04-02 03:48:26 nke Joseph Thorndike dere
100CM Vita Tony zuru oke aru C Cup ara ara TPE Mmekọahụ
Dolmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ na-akpachara anya. Enweghị akara na igbe ma ọ bụ akara ahụ akara n'ime (wow). Ọrụ ahụ tupu, n'oge na mgbe emechara. Onye na-ere ahia na-enye vidiyo na nlekọta nlezianya site na email. Daalụ.
Addbọchị Ekere: 2019-04-02 03:30:41 nke Ken Browne
100CM Brown Long Hair Flat Chest TPE Mmekọahụ Mmekọahụ June Doyle
Azụtala m nwa bebi dị iche na urdolls, mmasị ntutu m dị mma karịa wig enyere na foto a. M na-atụ anya anya anya ọzọ nke onye na-ere ahịa natara iji mezue ihe m chọrọ. Ọ bụrụ na m nwere ike ịme nwa bebi m ka ọ dị ugbu a karịa ka ọ dị ugbu a - ya bụ, aga m enye ya iwu n'ụzọ na-ekpo ọkụ.
Addbọchị Added: 2019-04-02 03:04:35 site n'aka David Morgan
163CM Novia Hill Drooping Nnukwu ara Mmekọahụ Mmekọahụ
Nnukwu zuru ezu, na-agba ọsọ nro. Nke a masịrị m. Ahụrụ m ya n'ọtụtụ ihuenyo. Mgbe m tụlechara ya, ekpebiri m ịzụta ya na urdolls. Ọ na-apụta na nhọrọ m ziri ezi.
Addbọchị Ekere: 2019-04-02 02:46:13 nke Darcy Galbraith
150CM Drooping Nnukwu Anụ mara mma Mara Mma Obere Mmekọahụ Doll Zoe Ralph
Ekwesịrị m ide nyocha a ma mee ka onye ọ bụla nwere mmasị na bebi a mara na ihe ị hụrụ bụ ihe ị nwetara. Nwa bebi a dị mma karịa ihe ị hụrụ, ihe ọ bụla ndị urdolls na-ebu ya kwuru ziri ezi.
Addbọchị Ekere: 2019-04-02 02:19:17 by Buck Robbins
150CM Nnukwu Obi retgbatị Butt Bridget Whittier Mmekọahụ Sexmụaka
Nwa bebi a na-enwe mmekọahụ bụ ihe ezi uche dị na ya, ọnụahịa ya dịkwa ọnụ ala, ọtụtụ nhọrọ, daalụ maka izipu foto na ọrụ magburu onwe ya!
Addbọchị Ekere: 2019-04-01 06:19:07 nke Roderick Carnegie dere
150cm Red egbugbere ọnụ Nnukwu ara obere n'úkwù TPE Mmekọahụ Doll Wanda Hoover
Chei, ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu etu ụdị nwa bebi a si dị. Ọbụna ọ mara mma karịa, nke m natara ya ụnyaahụ. Enweghị m ike iwepu ya aka ya, dị nnọọ chọrọ nwere ya ọzọ. Ọ hapụrụ m ka ọ gbawaa, echere m na ọ dị ka ezigbo nwanyị, nwee ọfụma karịa.
Addbọchị Added: 2019-04-01 05:28:19 site Todd Marion
148CM Astrid Jane European Style B Cup TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
Enwetara m nwa bebi a. Aka ya na mbọ ya na-amasị m - ha na-eme m obi anụrị. Akpụkpọ ahụ na-adị mma ma enweghị isi.
Addbọchị agbakwunye: 2019-04-01 05:10:11 site Antonio Symons
140cm kwụpụta Butt Sexy Blue Anya TPE nwa bebi Debby Grote
Gwọ Mbupu dị ngwa ngwa, ọ masịrị m. Otú ọ dị, ibupụrụ m ihe tụrụ m n'anya. M emepee wig ahụ mana ọ karịrị anya m. Emepere m igbe nke nwere ihe nlere nke nwanyi. Obi dị m anụrị.
Addbọchị Ekere: 2019-04-01 04:49:34 by Gustave Esther
169CM Wide Ass Wheat Agba Skin TPE Nwa bebi Basil Eveline
Nwa bebi m nọ ebe a. Purchasezụta m na-eme m obi ụtọ. Ahụrụ m nwa bebi m n'anya. Abụ m sọ anụrị. M na-kpọrọ tụlee ịzụ a nta version - ịkpọrọ m na a ụzọ njem n'ihi na ọ bụ a bit kwa arọ na-m. Daalụ nke ukwuu maka ahụmịhe ịzụ ahịa gị na iwebata m.
Addbọchị Added: 2019-04-01 04:28:31 site Martin
168CM Charming Mara mma ara Astronomy Enthusiast TPE nwa bebi Deborah Johnny
Enwetara m ya, ọ dị ezigbo adị, kwụsie ike, dị nro, nwere ọgwụgwọ dị mma na obere esemokwu, obere okwu na ịkpọasị. Ọ masịrị m nke ukwuu.
Addbọchị Added: 2019-04-01 04:09:44 by Kyle Charlotte
166CM Obere Igbe Na-agbanwe Nnukwu ịnyịnya ibu TPE Mmekọahụ Dolls Jamie Jacob
Ọrụ ndị ahịa dị ezigbo mma. Nwa bebi ahụ siri ike karịa ka m chere. Ọnọdụ ịrụ ọrụ siri ike (echere m na ọ ga-adị mfe karịa oge) nhicha na-ewe iwe, n'ihi na ọ nweghị ihe ọ bụla pụrụ iwepụ, ana m ahazi ikpu otu. Nwa bebi ahụ yiri otu ihe osise, mara mma karịa foto ahụ.
Addbọchị Ekere: 2019-04-01 03:48:39 by Beacher Clement
Sibyl Tracy Nnukwu Anụmanụ 170CM Sexy TPE Nwa bebi Onye Ozo
Ezigbo ọrụ na ngwaahịa, ọ bụghị wayo. Aghọgbula m site na bebi na-enwe mmekọahụ na weebụsaịtị ndị ọzọ. Ya mere, mgbe m nyochachara nke ọma na ntụnyere na usoro ịzụta, emechara m họrọ ịzụta ya ebe a. Ọ na-apụta na nhọrọ m ziri ezi.
Addbọchị Ekere: 2019-04-01 03:27:05 nke Albert Hal
160CM Nnukwu afọ ime nwanyị Yu Xuan D Cup Mmekọahụ Mmekọahụ Mmekọahụ
M na-abụbu onye ahịa nke urdolls, enwere m obi ụtọ na ha na-atụ aro nke ọma ma nwee ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na m chọrọ nwa bebi ọzọ, m ga-esi ọnwụ na-ahọrọ urdolls dị ka a ọma-mere otu!
Addbọchị Added: 2019-04-01 03:09:52 by Alston Fanny
161CM Roxanne William Adult Companion Pink Nipple Big Ass Mmekọahụ Doll
Enweela m Roxanne maka ọnwa 2 ugbu a. Naanị m ga-ede nyocha n'ihi na ọ tụrụ m n'anya! Site n'isi ya ruo n'ụkwụ, nwa bebi mmekọahụ a mara mma nke ukwuu. Ihe a bu oru aka. Ọ dị nro ma dịkwa nwayọ, enweghị m ike ikwere ya. Ọnụahịa ya adịghị ọnụ ala. Nke a bụ nnukwu ego, mana ọ bara uru penny ọ bụla! Ọ bụrụ na ị na-atụle a "ezi uche" mmekọahụ nwa bebi - nke a bụ ebe!
Addbọchị agbakwunye: 2019-04-01 02:51:40 by Byron Sinclair
Vanessa Christmas Mature Beauty Long ụkwụ TPE Mmekọahụ Doll
Nkwurịta okwu zuru oke na ngwa ngwa, ịzụrụ na njem na-aga nke ọma! Enyere m ụmụ nwoke a ihe 10 n'ime isi 10. Ana m akwado ha nke ọma, m ga-azụkwa ha ọzọ. Daalụ urdolls! Banyere nwa bebi ahụ, o juru m anya otú ọ dị n'eziokwu na nke ọma.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-27 05:12:12 site n'aka Tom Smith
Sabina Sharp 168CM Nnukwu ara na -acha uhie uhie nwere nnukwu egbugbere ọnụ TPE
Ahụm m nwere na urdolls dị mma, ha nyere ọrụ klaasị mbụ n'ihi na ha gafere ịhụ na nkọwa m niile ziri ezi. Ihe niile akọwapụtara, ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu na oke ọsọ nke ụmụ bebi ahụ na-enwe mmekọahụ na-abata.
Addbọchị Ekere: 2019-03-27 04:38:22 nke Winston Boyle
162CM Nnukwu Anụ Ahụ Micro Abụba Nnukwu egbugbere ọnụ Mmekọahụ icemụaka Janice Mmefu
Enwetara m nwa bebi m taa, m ga-ekwu na obi dị m ezigbo ụtọ. Ọ mara mma ma nwee mmetụta dị ukwuu. Ihe niile m zụtara bụ eziokwu. Achọkwara m uwe ị na-eziga!
Addbọchị Added: 2019-03-27 04:24:21 site Lambert Isaiah
Wheat Agba Skin Nnukwu Longkwụ Ogologo Ogologo 163CM Okenye Onye Mmekọ Selena Lucia TPE Doll
Enwere m mmetụta dị ukwuu na ndị ahịa ebe a, na-aza ngwa ngwa, ma dị njikere inye aka dozie nsogbu ọ bụla m nwere. Ejiri saịtị ahụ nke ọma ma nwee ụdị dịgasị iche iche na nhọrọ ịhọrọ. Azụrụ m ezigbo ahụmịhe n'aka ha.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-27 04:07:03 site na Mortimer Mond
Mara mma Nnukwu Anumanu Achọgharịrị Ass 153CM Sherry Dodd TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
Lee, enyewo m ụmụ bebi dị mma na ọrụ ndị ahịa mara mma. Ha na-eme ka ị mara ọnọdụ ahụ ma mara ihe. Azụrụ m ụmụ bebi abụọ ọzọ n'aka ha ma gaa ebe ahụ iji gboo mkpa niile n'ọdịnihu.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-27 03:49:55 nke Wright Michael
153CM Nnukwu Anwụrụ Nnukwu egbugbere ọnụ Sophia Lily TPE Ndị okenye na-enwe mmekọahụ
Transportationgbọ njem ha dị ọsọ ọsọ, edepụtara ihe niile na igbe ahụ, nwa bebi a enweghị nsogbu ọ bụla. Ndị ọrụ ahụ ga-akpọtụrụ m ngwa ngwa (site na email) ma gosipụta nkọwa niile. Ogo dị ezigbo mma. Daalụ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-27 03:33:09 site na Baldwin Ahịa
153CM Susie Emma Sexy Nnukwu ịnyịnya ibu Blond Hair Green Anya TPE lsmụ Bebi
Enwetara m nwa bebi mmekọahụ a ụnyaahụ. Ndụ nke nwa bebi a na-eju m anya. Ọ dị oke mma na onyonyo ịntanetị, mana onyogho ndị ahụ adịghị mma. Ezi ọdịdị na mmetụta nke ihe ndị a bụ ihe ịtụnanya. Anya, mmetụta na ịdị arọ na-agbakwunye na nkọwa niile ezi uche dị na ya. Ihe TPE na-adị jụụ ma ọ dị ka ọ dịghị ekpo ọkụ, mana echere m na nke a bụ ihe dị mma.
Addbọchị Ekere: 2019-03-27 03:19:07 nke Buck Scott
148CM Green Anya Claire Julian Slim Isi Isi Nri TPE Nwa bebi
Aka ya na-adị nnọọ nro, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nwanyị na silhouette "na-ama jijiji." Daalụ nke ukwuu. Ama m ihe m ga-eme n'abalị a. Enweghị m ike ichere ọzọ.
Addbọchị Added: 2019-03-27 03:04:24 site Archibald Clarissa
145CM mara mma Little Loli Brown Curly Hair Entity Mmekọahụ Dolls Darlene Morris
Ngwakọta nkwonkwo bebi ahụ siri ike, mana n'ihi nke a, ọ nwere ike ịkwado ọnọdụ dị mma. Ezi ihe. Ara dị nro ma nwee ọfụma. Mkpịsị aka ahụ siri ike ma dị nro, dị ezigbo mma, enwere m ike ịsị. Ọ dị ezigbo ka ọ nweghị mkpesa. Ihu mara mma ma egbugbere ọnụ dị nro ma jupụta. Ihe niile gbasara ụmụ bebi dị mma.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-27 02:39:11 by Isidore Lawrence
WanRou Short Hair Oriental Mma Sexy Igbe Chinese TPE nwa bebi
Enwere m afọ ojuju maka ịzụ ahịa a. Nwa bebi a zuru oke. Ezigbo ezigbo ndụ na ndụ, enweghị ntụpọ, n'ezie nka. Akpụkpọ ahụ na-adị nro ka aka. Ọ nwere ike ịbụ ezigbo nwanyị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ọ bụla (ụfọdụ ndị enweghị ike).
Addbọchị Ekere: 2019-03-27 02:20:59 nke Edgar Rosalind dere
160CM Wide Ass Ime Nwanyị Nnukwu Afọ Obere Obi TPE Mmekọahụ Doll Adam Harrington
Ọ dị ezigbo adị. Ọ bịara n'ụlọ m. Aga m elekọta ya dị ka nwunye nke na-elekọta afọ ime m. Nwa bebi ahụ bụ ụzọ ekwenye ekwenye iji chee na ọ na-arụ ọrụ oge ụfọdụ. Ihe niile dị mma. Ma ọ dị ntakịrị arọ, achọrọ m iwepụta oge iji kwapụ ya.
Addbọchị Ekere: 2019-03-26 06:01:02 by Upton Patience
168CM Sheila Baldwin Black Skin Mmekọahụ Mmekọahụ Mmekọahụ Obere Igbe
Mma akwa akpụkpọ ya na-amasị m. Ọ na-amasị m ịmakụ n'akụkụ nwa bebi m n'abalị. Anọ m ebe a ogologo oge, emesịrị m weta obere obi ụtọ na ndụ m. Enwere m olile anya na otu ụbọchị m ga-ahụ ezigbo nwanyị nwere mmasị na m, mana tupu nke ahụ, m ga-awụsa ịhụnanya na ịhụnanya m niile na nwa bebi m.
Addbọchị Ekere: 2019-03-26 05:34:10 site Antony Morley
161CM Nnukwu Anyịnya ibu Sexy siri ike egbugbere ọnụ Agnes Antonia TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
Aga m akwado ndị ikwu m ma ọ bụ ndị enyi m ịzụta ebe a. Ozi gi di egwu. Ngwaahịa a dị mma karịa ngwaahịa ndị ọzọ. Ọnụahịa ahụ adịghị njọ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-26 05:09:32 site n'aka Lennon Chapman
Mkpa Mkpọrọ Nnukwu Bremụ nwoke TPE Mmekọahụ Doll Doreen Pullman
Nwa bebi a bara uru ịzụta, dị mma karịa ikiri foto ma ọ bụ ihe nkiri porn. Soro ya nwee mmekorita oge obula ichoro, o nwere nnukwu obi, nwee aru di nma, ma nkpuru ya di uto. I nwekwara ike iji ịnyịnya ibu ya. Enweghị ndepụta ndị ọzọ ị ga-eme mkpesa ma ọ bụ jiri condom. Ọ bara ezigbo uru ịzụta gị taa ma mee ka ị nwee obi ụtọ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-26 04:49:56 nke Benedict Cissie
163CM Nnukwu Ura TPE Ndị okenye na-enwe Mmekọahụ Dolmụaka Yan
Nbunye m dị ezigbo mma, daalụ maka ezigbo ọrụ gị. Ọ bụ 100% mara mma, ọbụna karịa foto, ihe niile gbasara ya bụ ihe kachasị mma. Enwere m afọ ojuju maka ọrụ ndị ahịa, nyere m aka mezue usoro ịtụ ahịa, daalụ ọzọ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-26 04:30:57 nke Gene Joshua
Viola Bell Round Breasts Dị Ọcha na Mara Mma Nnukwu Anya TPE lsmụ Bebi
Nwa bebi a dị mma, ahụ dị ezigbo mma ma nwee mmekọahụ. Mgbe m gụchara ụfọdụ otuto na nwa bebi ahụ n'ịntanetị, ekpebiri m ịzụrụ nwa bebi mbụ m na mmekọahụ. Ekwesịrị m ịsị na ahụmịhe m dị mma nke ukwuu. Companylọ ọrụ ahụ na-agwa m okwu ngwa ngwa, ọnụ ahịa mbufe dị ngwa karịa ka m chere, na ogo nwa bebi ahụ dị mma. Recommendedmụ bebi na ndị na-ere ahịa siri ike.
Addbọchị Added: 2019-03-26 04:08:39 by Baird Defoe
Nnukwu ara agba Blue Anya TPE Mmekọahụ Doll Sexy Long Legs Nancy Nick
Enwetara m nwa bebi a taa. Ok, enwere m mmasị na nwa bebi a bụ na ọ dị mma! Mmetụta na ihe onwunwe dị ka ihe zuru oke. Somefọdụ ụmụ irighiri ahịhịa, dị ka lipstick na egbugbere ọnụ, kwesịrị kpochara. Mana ọ bụghị naanị “ile anya”, mana ọ dịkwa ezigbo ọnụ ahịa n’ụwa nwa bebi. Dị arọ karịa ka a tụrụ anya ya, mana ọ nwere nnukwu ara na nnukwu. Daalụ maka ọrụ gị ngwa ngwa. Akwadoro dị ka nwa bebi ọgwụgwọ, nwa bebi ma ọ bụ egwuregwu ụmụaka.
Addbọchị Ekere: 2019-03-26 03:48:34 site n'aka Drew Betty
145CM Blonde Long Curly Hair Nnukwu Anụmanụ Kelly Geordie
Nwa bebi a zuru oke. Ọ dị ezigbo adị ma dịkwa ndụ, na-enweghị ntụpọ, n'ezie ọ bụ nka. Akpụkpọ ahụ na-adị nro ka aka. Ahụmahụ ahụ dị ukwuu. Achọrọ m ịhụ ya n'anya ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị.
Addbọchị Ekere: 2019-03-26 03:29:06 nke Boyce
145CM Okenye Companion mara mma Baby Face TPE nwa bebi gbara ọkpụrụkpụ Sally Bulwer
Nke a bụ ọmarịcha nwa bebi. Ọ dị mma dịka mgbasa ozi. Ọ ga-edobe onwe ya n’ọnọdụ guzo. Obi dị m ụtọ na ya n'ihi na ọ bụ ihe niile m na-atụ anya ya. Nke a bụ ezigbo onye na-ere ahịa nke na-agaghị enye gị nwa bebi na-ezighi ezi.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-26 03:12:40 site n'aka Alston Sapir
Obere ukwu F cup 140cm Penelope Raglan TPE Mmekọahụ Doll
Azụtara m nwa bebi a ebe a mgbe ndụmọdụ enyi m gasịrị. Ọnụahịa ya dị oke elu, dị mma karịa iko nwoke na-enwe mmekọahụ, dị nro ma dịkwa mma. Daalụ maka ọrụ gị na-ekpo ọkụ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-21 09:32:17 by Barlow Ella
Abụba Hip Nnukwu Anụ Ahụ Chasel Edison 163CM Long Legs Sex Doll
Azụtara m obere nwa bebi na weebụsaịtị a n'afọ gara aga ma ogo ya dị ezigbo mma. Alaghachiri m zụta nnukwu nwa bebi ma nwaa ya. O mechughị m ihu. Ihe niile dị n'ime igbe, zuru oke.
Addbọchị Ekere: 2019-03-21 09:29:44 site n'aka Neil Silas
Obere ara uwe ojii Micro Fat Round Ihu 158CM Adolph Joule Sex Dolls
A na-atụ aro nwa bebi a, ezigbo ọnụ ahịa na mma! Ọ bụ ezie na enweghị ntụpọ, ọ bụ ezigbo ngwaahịa, ọkachasị na ọnụahịa. Ee, enwere obere isi na mbụ, mana nke a bụ ụdị njirimara nke ngwaahịa niile nke TPE mere. Ọ ga-ebelata oge (ọ gafeela izu abụọ) site na ịsa ahụ na ịghagharị nke ọma.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-21 09:25:47 site n'aka Frank Harvey
Mara mma obere ara enyi Companion Laura Charlotte 148CM TPE lsmụ bebi
Nke a bụ ezigbo ahụmịhe ịzụ ahịa. Ogo nke ụmụ bebi mmekọahụ dị ezigbo mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2/3 nke ụgwọ ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ na weebụsaịtị. Enwere m ike ịzụta nwa bebi kachasị amasị m na ọnụahịa dị ọnụ ala. Ọ dịghị mkpa ịhapụ ego maka otu ihe ahụ. Aga m azụta ya ọzọ, nsogbu adịghị.
Addbọchị Tụkwasị: 2019-03-21 09:22:44 site Sid
Brown Anya Anya ihu na ihu Roberta Bulwer TPE nwa bebi 145CM Obere ara
Abụ m onye egwuregwu bọọlụ. Mgbe m hụrụ ya, echere m na ọ ga-akara m mma n'ọdịnihu. Alaghị m azụ ịzụta ya. Ọ bụ ezie na ọnụahịa ahụ dịtụ ọnụ, mana mgbe m natara ya, achọtara m ya niile. Ọ bara ezigbo uru. Ọ dị ezigbo nghọta.
Addbọchị Ekere: 2019-03-21 09:17:17 site na Murray Dickens
Thin n'úkwù Blue Anya Little ọnụ ara Renee Raymond 148CM TPE Mmekọahụ Doll
Nwa bebi a mara ezigbo mma ma nụchaa. Obi dị obere, yabụ na ọ naghị enwe mmetụta karịa mgbe ị metụrụ ya aka, mana ahụ niile dị oke mma, dịka mpempe akwụkwọ nka. O nwere ntakịrị isi, ma enwere m mmekọahụ ya ọtụtụ oge. Ọ dị ezigbo mma, na-enwe mmetụta nke ahụ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-21 09:12:21 site na Ward Julius
Carey Godwin Slender Legs Nwoke nwa bebi 160CM Sexy Abdomen Partner
Nwa bebi a mara ezigbo mma. Ọkpụkpụ ya ọhụụ tụrụ m n'anya, ngagharị na ntụgharị nke nkwonkwo akarịala ọkwa ahụ. Bugharịa aka gị, ụkwụ gị na úkwù gị n'ụzọ dị mfe ma dere duu. Uwe ekwe na adiana bụ a masterpiece. Egwuregwu ụmụaka ndị ọzọ enweghị ike ịmakọ ya.
Addbọchị Ekere: 2019-03-21 09:09:04 nke Karen Luke
Pandora Sander Long Legs Wheat Skin Big Butt 170CM TPE Mmekọahụ Doll
Ekwesịrị m ịsị na nke a bụ ngwaahịa dị ukwuu! Mụ bebi ahụ natara dị mma ma ogo karịa atụmanya. Obi dị m ezigbo ụtọ na m natala ọrụ nke ụmụ bebi sexy na m ga-enweta ọrụ n'aka ha ọzọ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-21 09:06:26 site n'aka Rod Felix
Nwa nwanyi Japanese 146CM D Cup Yedda Mark Thin Lips Sex Doll
O juru m anya mgbe m nwetara ya. Nwa bebi a dị mma! Adịghị m agba ụmụ nwanyị ndị isi, masịrị m ụmụ nwanyị ndị ahụ dị mkpụmkpụ. A ka nwere nsogbu na akara mkpịsị aka, mana n'ozuzu ya ka mma karịa atụ anya.
Addbọchị Ekere: 2019-03-21 09:02:46 nke Paddy Henley
146CM Oké Egbugbere ọnụ European Style Blue Anya Maggie Harte TPE nwa bebi
Nke a bụ nkwekọrịta zuru oke. Enwere m ezigbo nkwurịta okwu na onye na-ere ahịa ma ha na-egbo mkpa m maka mbupu n'ọdịnihu, yabụ enwere m ike ịnata ya n'obodo. Omenala kọstọm dị ezigbo mma n’ihi na ha arụchaala ọrụ ha niile.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-21 08:56:30 nke Kenneth Richard
163cm Nri Nwa Bunny Girl Helen Minnie Long Legs Mmekọahụ Sexmụaka
Obi dị m ezigbo ụtọ n’oge a. Enwetara m ya. O di ebube. Daalụ nke ukwuu maka enyemaka gị na ọrụ ndị ahịa. Enwere m okwu na-ekpo ọkụ banyere okwu egwuregwu nwa bebi. Ikwesiri igbanwe ya tupu o puta. M ga-eziga foto ozugbo enwere ike. M hụrụ ya n'anya n'ezie, ya mere achọrọ m ịtụ nke ọhụrụ. Ma obu ozo.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-18 09:24:29 site n'aka Brady Montgomery
Bess Julius Double Ponytail 165cm Brown Curly TPE Nwa bebi
Ọ bụ ya bụ ihe egwuregwu ụmụaka mbụ m zụtara. Ihe niile dị n’usoro, ọkpọ nkwonkwo dị n’ime ya dị ezigbo mma, nsogbu adịghị. Ọ na-agbanwe agbanwe.
Addbọchị Ekere: 2019-03-18 09:21:46 nke Felix Hart dere
161CM Slim Isi Skin Skin Small Waist Ursula Surrey TPE Doll
Nwa bebi a dị mma. Ọ dị oke mma. Mana imegharị nwa bebi nwere ike ịbụ obere ọrụ. Ọ dị arọ nke ukwuu nye m. Nhicha ya dị mfe ma ọ bụrụ na ịmara ihe ị na-eme. Daalụ maka nlezianya ị duziri.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-18 09:18:41 site n'aka Ansel Galbraith
158CM Obere Igbe Tess Jessie Red ọnụ ara Nnukwu Anya TPE nwa bebi
Ọ mara mma karịa foto ahụ. Ma ha enyeghị m uwe ndị ahụ na foto ahụ, ma ọ bụghị na ọ ga-ezuru oke! Kaosinadị, ihe a niile bụ ọrụ dịịrị m. Ahụghị m ahịrịokwu ahụ na weebụsaịtị: "uwe ime akwa nwere ike ịdị iche na foto a. Ihe niile dị na foto a bụ maka ebumnuche." Ugbu a ka m zụtara ya ụfọdụ uwe mara mma. Obi dị m ezigbo ụtọ na àgwà nwa bebi ahụ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-18 09:16:01 nke Benjamin Vogt
Nnukwu Anya Ndụ Onye Mmekọ 158CM Obere Igbe Mmekọahụ Mmekọahụ Ophelia Evans
Nke a bụ ebe nrụọrụ weebụ nwa bebi kacha mma. Naanị ntakịrị. Can nwere ike hazie nwa bebi ahụ. Ọdịdị mara mma nke ukwuu. M zụtara a 158 cm nwa bebi na àgwà bụ n'ezie n'elu notch.
Addbọchị Ekere: 2019-03-18 09:12:31 by Dempsey Taylor
150CM Nnukwu ara ukwu ukwu abụba Hip Pamela na-enwe Mmekọahụ Mmekọahụ
Odi ezigbo mma na akuku nile, achorokwam ya nma na ara ya na ukwu ya. Ma ọ dịrị m arọ karịa. Adị m 68 afọ. O siri ike ịkwaga ya. Ekwesịrị m ịhọrọ obere nwa bebi.
Addbọchị Ekere: 2019-03-18 09:09:16 nke Wade Sainsbury dere
Pink Nipples Odelette Becky Dị Ọcha Dị Anya 168CM Mmekọahụ Doll
Daalụ maka iche maka nwa bebi a m tụrụ aro. O juru m ihe m chọrọ. Odelette mara mma. Ara ya na inyinya ibu! M ga-alaghachi.
Addbọchị Ekere: 2019-03-18 09:06:25 nke Andy Joule
Handsome Lance Hicks Muscle Ike 20CM Nnukwu amụ nwoke na nwanyị
Mgbe mbụ m zụtara nwa bebi a, ụjọ tụrụ m. Tụle otú o si dị oké ọnụ, n'ikpeazụ, mgbe izu ole na ole nke ichere nchegbu, ọ rutere! O kwekọrọ na foto ahụ! Enweghị ọtụtụ ihe ị ga-ekwu, ị gaghị echefu ngwaahịa dị ka nke a.
Addbọchị Ekere: 2019-03-18 09:03:12 nke Zora Melville
Olivia Gresham 148cm TPE Okenye Blond ntutu Mmekọahụ nwa bebi Tthick
Ikwu eziokwu. Akpukpo aru ya di nso na akpukpo aru mmadu. Ọ na-enye m nnukwu mmetụ aka. Obi dị m ezigbo ụtọ ibi n'oge a, nwa bebi ahụ na-adị adị!
Addbọchị Ekere: 2019-03-18 08:59:31 nke Hardy Bennett dere
Grey Short Big Breasts 158cm ntutu Nancy Mmekọahụ Mmekọahụ
Nanị m zụtara nwa bebi m nke abụọ site na urdolls, ọ bụ izu gara aga. Ejiri m nwa bebi m rụọ ọrụ nke ọma na ọ na-ewute igbe ahụ mana ọ nweghị nsogbu. Nwa bebi ahụ mara ezigbo mma, enweghị m ike ikwenye na ọ bụ nnukwu ngwaahịa. Daalụ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-18 08:56:07 nke Toby Hawthorne
Full Breasts Mannequin Evelyn Ann 168CM Sexy Long Legs TPE Nwa bebi
Achọrọ m ịzụta ya mgbe m hụrụ ya. Mana enwere m obi ike ịhụ ụdị ọnụahịa ịzụta ihe dị otu a na Internetntanetị, mana nkwukọrịta na nkwado n'oge usoro a dị ezigbo mma ruo mgbe (na mgbe ọ gachara) n'ọnụ ụzọ m. Ogo ise nke kpakpando, nkwukọrịta na nkwado ndị ahịa.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-14 06:40:50 nke Roy Lytton dere
Akwara nwanyị Baseball Player Okenye Mmekọahụ Mmekọahụ 170CM Hilda Wilcox
Taa, ahụrụ m ya n'anya. Ọ mara ezigbo mma. zuru oke. Ekpebiri m iso nwunye m zụta nwa bebi. Anyị nyere ya obere ose na nwunye m nwere mmasị na ya nke ukwuu. Ọ bụ n'ezie karịa ihe anyị tụrụ anya ya. Emere nke ọma.
Addbọchị Ekere: 2019-03-14 06:37:07 nke Burton Romeo
Kelly Hodge Ebughibu Sexy Long Hair Nnukwu Bremụ 158cm Adult Mmekọahụ Mmekọahụ
M meghere nwa bebi m taa. Ekonye m ya isi na aru ya onu. Enweghị m ike ikwere ya, ọ mara ezigbo mma. Ọ mara mma karịa foto ahụ. Daalụ. Ezi mma na ọnụ ala.
Addbọchị Ekere: 2019-03-14 06:32:13 nke Aubrey Judson dere
Mona Wheeler 168cm Wheat Agba Sexy Busty Ass Nnukwu Nri TPE nwa bebi
M nyere iwu ụda akpụkpọ ahụ nwa bebi ahụ na foto a. N'izugbe, nwa bebi a karịrị ihe m tụrụ anya ya. Ọ mara ezigbo mma, enwere m afọ ojuju maka agba akpụkpọ ahụ na nhọrọ m nyere n'iwu.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-14 06:01:48 nke Bill Bruno
Thin Face Blue Eye Cecilia Arthur 170CM TPE Nwa bebi Obere ara
O nwere ezigbo nkwakọ ngwaahịa, ihe niile gbasara nwa bebi dị na igbe, ọ kwesịrị ịnọ ebe ahụ. Nwa bebi a mara mma nke ukwuu, enwere m olile anya na ọ nwere ike ịdị ogologo oge.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-13 08:42:22 nke Dylan Taylor
Setlla Noel Freckled Face Slim Isi 165CM Obere Igbe TPE Doll
Enwetara m ya. Nkwakọ ngwaahịa ya zuru oke. Nzube na nkọwa nke akụkụ nke nwa bebi ahụ dị ezigbo mma. Ihe nlereanya a dịkwa ezigbo mma ma nwee ogologo ụkwụ! Ihe TPE dị nro ma na-esi ísì ụtọ karịa TPE.
Addbọchị Added: 2019-03-13 08:39:49 by Harlan Keats
Harvey Josh nnukwu Hip Black Skin 165CM Busty N Cup Mmekọahụ Doll
Ọ bụ nwa bebi mara mma nke ukwuu. Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị. Nke a bụ nnukwu nchikota. Ma, anaghị m eso ya enwe mmekọahụ n’ihi na ọ na-eche na ọ dị arọ karịa.
Addbọchị Ekere: 2019-03-13 08:34:54 nke Elton Jimmy
Agbanye Hip Gilbert Wat F Iko 161CM TPE Nwa bebi Onye Okenye
Ọ dị m nwute ikwu okwu n’oge, ọ bịarutere n’ụlọ m otu ọnwa gara aga. Ọ mara ezigbo mma ruo ugbu a! Ejiri m oge dị ukwuu na ọtụtụ weebụsaịtị nwa bebi tupu m zụta ya. Obi dị m ezigbo ụtọ na m si n’ebe a zụta nwa bebi mbụ m. Ọrụ ndị ahịa dị ezigbo mma, a zara ajụjụ m niile ngwa ngwa, yana arịrịọ m ka m zipu foto nwa bebi. Enyere m kpakpando 4 n'ihi na enweghị m ike imetụ ma hụ ngwaahịa ahụ tupu m zụta ya.
Addbọchị Ekere: 2019-03-13 08:31:50 site n'aka Zebulon Peg
Ego Anya Agba Dị Mgbapụta 118CM TPE lsmụ bebi Obere Ara Muriel Ifuru
O rutere n’ụlọ m, dị ka e gosiri na foto a. Eziokwu dị ka egosiri. Dị ahụ dị adị. Nke a bụ ezigbo nwa bebi.
Addbọchị Ekere: 2019-03-13 08:28:03 nke Gavin Simpson dere
Nwa nwanyi Japanese mara mma Tachibana Shinya 140CM Nnukwu anumanu TPE Dolls
Azụtara m nwa bebi a ebe a. Ahụmịhe m adịghị njọ, nkwukọrịta nwayọ nwayọ maka ụkpụrụ m, mana ndị ọzọ nwere ike ghara iche oke gbasara ya. N'ụzọ dị mma, ụmụ bebi ahụ mara ezigbo mma. Àgwà dịkwa mma.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-13 08:23:15 nke Benjamin Ellis
Jocelyn Cissie dị ọcha ma maa mma 140cm Silicone Sex Doll
Nwa bebi ahụ dị ezigbo mma ma mara mma, o nwere ihu tozuru oke. Ọ naghị arọ dị ka m chere. Enwere m ike ịkwaga ya n'ụzọ dị mfe. N’ihi ya, afọ juru m afọ.
Addbọchị Added: 2019-03-13 08:18:45 by Bart Lily
Jessie Dunbar Mara mma na Energetic 165CM Small Waist Silicone Doll
Nke a bụ mmalite dị mma. Enwetara m nwa bebi ojoro site na weebụsaịtị ọzọ. Agbalịrị m urdolls n'ihi na ọ dị ka weebụsaịtị a pụrụ ịtụkwasị obi. Ezi ntanetị weebụ, nyocha dị mma na nkọwapụta nkọwapụta nwa bebi niile na-eme m obi ike. Nwa bebi ahụ m natara ụnyaahụ gosipụtara na mkpebi m ziri ezi. Aga m azụta ya ọzọ na urdolls.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-13 08:14:31 site n'aka Tyler Paul
Amelia Henley Na-eme Shy 165cm Mmekọahụ Doll Cherry Small Mouth
Ọ bụ nnukwu ahụ. Azụ ya dị mma nke ukwuu. Na-agbanwe agbanwe obi na ịnyịnya ibu. Ihu dị ezigbo ụtọ ma bụrụ eziokwu. O nyere m mmetụta nke ịhụnanya mbụ.
Addbọchị Added: 2019-03-13 08:10:43 by Owen Simon
Tina Marner Mara mma na Sexy kpuru ìsì 145CM Adị Mmekọahụ Mmekọahụ
Na mkpokọta, nwa bebi a dị mma nke ọma, mana anaghị ebunye m nwa bebi m. Agwara m ha na o weghachitela ihe ndị ahụ furu efu.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-13 08:06:53 nke Griffith Keppel
Arlene Dunbar 125CM Micro Fat Face Green Anya Red egbugbere ọnụ TPE nwa bebi
Ihe niile banyere ya dị ezigbo mma. Nwa bebi a nwere ezi uche, ọ dịkwa ezigbo mma, o nyeere m aka mezue nrọ m na-achọ nwa nwanyị. Ọ bụzi nwa m.
Addbọchị Added: 2019-03-12 08:23:30 by Kent Martha
Bọọlụ Baby Nwa Gafere Caroline Judson 158CM TPE lsmụ Bebi
Ọ dị ezigbo mma. Emebiri m na nso nso a na enyi m nwanyị, ma ugbu a, ngwaahịa a na-enye m nkasi obi na obi ụtọ dị mma. Daalụ maka ịza ajụjụ m niile site na ọrụ ọkachamara. Aga m azụta ya n’aka gị ọzọ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-12 08:19:13 site Webster Kelsen
Ihu ihu na-eweli obere igbe 158CM Classical Mma TPE nwa bebi Qing Xue
Achọrọ m inwe enyi nwanyị nwere ihu na ahụ ndị China. Ọ dị m ezigbo mma. Ekele dịrị ndị ahịa urdolls maka ịkwado nwa bebi a. Ọ bụla inch nke ahụ ya bụ nnọọ siri. Ọ masịrị m nke ukwuu.
Addbọchị Added: 2019-03-12 08:14:39 by Orville Bruce
Obere obere ara ara Belinda na-achọ 165CM F Cup TPE Doll
Ọ bụ ezigbo onye ọlụlụ maka afọ iri isii na asatọ nwunye ya nwụrụ. Naanị otu ọghọm bụ na mbubata ụgbọ na-egbu oge, mana ọrụ ndị ahịa urdolls nyeere m aka idozi nsogbu niile. Ekwadoro m ka ị zụta n'aka ụlọ ọrụ a siri ike n'ihi na ha na-akwado ngwaahịa ha.
Addbọchị Added: 2019-03-12 08:09:55 by Ward Lynd
Nnukwu ịnyịnya ibu mara mma na-agba ọkụ 169CM Nnukwu anụ ọhịa Mmekọahụ Mmekọahụ
Ọgụgụ ya dị ezigbo mma. Nnukwu ma na-agbanwe ara. Mmetụta nke ihi ụra na ya bụ nke a na-apụghị ịkọwa akọwa. Na nkenke, enwere m afọ ojuju maka nzaghachi ọ gwara m. O di nwute, obu obu oke ibu karim. Ọ na-esiri m ike ịgagharị ma chọta ya. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke nwere ahụ ike, ekwere m na ọ zuru oke maka gị.
Addbọchị Ekere: 2019-03-12 08:06:09 nke Atwood Caroline
Oké Egbugbere ọnụ J Cup Prima Bess Nnukwu Obi 165CM TPE Nwa bebi
Anya na mmetụta nke nwa bebi a bụ nke ezi uche dị na ya. Akpụkpọ ahụ bụ obere agba ntụ na agba. Ngagharị nke nwa bebi ahụ siri ike nke ukwuu; na ya nwere ike na-akpali ka mma na bughi ọkpụkpụ ihe / nkwonkwo iji belata siri ike. Aka / mkpịsị aka agaghị ehulata; ma ọ bụ mkpịsị aka mkpị na-enweghị mmebi; m'ọ bụ mkpụkpu labụ l'ime mkpụkpu. M ka ga-akwado nwa bebi a; naanị ghọta njedebe. Ọ mara ezigbo mma "na - ewebata" gị ka gị na ya nwee mmekọrịta.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-12 08:00:00 site Randolph Zephaniah
Darlene Philemon Nnukwu Mmekọahụ Mmekọahụ Mmekọahụ 148CM Adị Mmekọahụ Mmekọahụ
Enwere m afọ ojuju na Darlene Philemon. Ọ ka mma karịa atụ anya, dị ezigbo mma. Ekele dịrị ndị ahịa maka inye m nnukwu enyemaka. Nọgide na-arụ ọrụ ọma!
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-12 07:56:23 nke Hamiltion Lawson
Petite mara mma Nnukwu Anya Anya Obere Obi Ndị okenye Ndụ Dolls 100CM Girl Elsa Morse
Anọ m na-achọ obere nwa bebi. Mgbe m nyochagharịrị ọtụtụ weebụsaịtị, m mechara zụta Elsa ebe a. Ọ hapụghị m. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ dị oke.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-12 07:51:38 by Maxwell Huntington
Nnukwu Obi Obere Ass Onye Mmekọ Onye Mmekọ TPE Doll 100CM Madada Kanako
Nwa bebi nwoke na nwanyị ebe a bụ nwa bebi kacha mma n'ahịa. Ihe niile dị n’ebe emume niile. Echere m na ndị nrụpụta ndị ọzọ niile kwesịrị ịgbaso ụzọ. M nnọọ afọ ojuju na m zụọ.
Addbọchị Added: 2019-03-11 09:40:50 nke Duncan Conan dere
Black Skin Thin Waist Long Legs 155CM Small Chest TPE Nwa bebi Cynthia
Nke a bụ mmekọahụ nwa bebi zuru oke. Ndị na-ere ere na-anabata mgbe ọ bụla m chọrọ enyemaka ọ bụla. Onweghi ihe a ga-eme mkpesa. Ga-azụta nwa bebi nke abụọ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-11 09:37:38 site Wade Keynes
Marcia Margery TPE Doll apata ụkwụ Akwara 163CM Fat Ass Weightlifting Champion
Nwa bebi a nwere ezi uche. Ma n’otu oge ahụ ọ dị arọ nke ukwuu! Ekwesịrị m ịmụtakwu ihe wee họrọ nke dị fechaa. Na mgbakwunye na ibu, nwa bebi m dị ukwuu. N’ozuzu ya, enwere m afọ ojuju na ọnwụ ọnwụ. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke nwere muscle, a na m akwado gị ya.
Addbọchị Ekere: 2019-03-11 09:34:32 site n'aka Rod Raglan
Hannah Sassoon ntụgharị uche nna ukwu 158CM TPE Doll Pure Big Anya
Dị ka ndụ karịa ka m chere, n'ụzọ dị mkpa, naanị ọdịiche dị n'etiti ya na ezigbo nwanyị bụ na ọ naghị ekwu okwu. Ogo na ịrụ ọrụ dị ezigbo mma. ị mere nke ọma. Nanị ihe dị njọ bụ na m ga-echere obere oge. Thegbọ njem ahụ nwere ike ịsọ ọsọsọ ma ọ ga-akacha mma.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-11 09:30:47 nke Merlin Whitman
Stephanie Alick Sexy Elastic Ass Injinia TPE Nwa bebi Nnukwu Obi
Ikwu eziokwu, nwa bebi ahụ dị arọ! Ekwesịrị m ịmụtakwu ihe wee họrọ nke dị fechaa. Na mgbakwunye na ibu, nwa bebi m dị ukwuu. N’ozuzu ya, enwere m afọ ojuju na ọnwụ ọnwụ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-11 09:26:56 nke Channing Robbins
Quintina Charley Anya Anya 140cm Ọkpụkpụ agba agba Akpụkpọ anụ Nnukwu astsmụ Bebi
Nke a bụ akpa nwa bebi m. Obi dị m ezigbo ụtọ na m họọrọ nhazi a. N'ihi na ọ dị ka ọ nọ na mmalite 20s, dịka m. Ahụ ya nwere ụfọdụ akụkụ dị ịtụnanya, akpụkpọ ahụ dịkwa nro mgbe ị gwepịara ya.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-11 09:23:31 site n'aka Jeremy Morris
Lydia Tony Skinny Isi Obere Igbe 148CM Okenye Onye Mmekọ Doll Skin Dark
Enwere m otu ahụmahụ ahụ na Lydia, abụkwa m nwa mgbei. Mgbe m hụrụ ya ebe a. Ama m na ọ bụ ya bụ ezinụlọ m chọwara. N’ihi ya azụrụ m ya n’oge na-adịbeghị anya. Ọdịdị nke nwa bebi ahụ dị n'eziokwu! Ọ bụ nwa bebi mara mma. Enweghị m ike ikwenye na ọ dị ezigbo mma ma mara mma.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-11 09:19:50 nke Elroy Turner dere
Ndị a ma ama Barbara 100CM Mmekọahụ Mmekọahụ TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
Nwa bebi a dị ezigbo mma ma mara ezigbo mma. Ọ dịkwa mma iji, ọ na-adị ezigbo mma. Ezigbo ego, uru ịzụrụ! Nnọọ nso, ezigbo ntụsara ahụ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-11 09:14:46 site n'aka Bertram Hansen
Xaviera Jane Crazy Criminal Small Breast Companion 170CM lsmụ Bebi
Dị nwa bebi ahụ dị ezigbo mma ma mmetụta ya dị mma. Ọ na-ele anya n'ozuzu ya. Afọ juru m afọ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-09 05:13:31 by Hugh Betsy
Okpokoro egbugbere ọnụ Blue Anya okenye enyi Cynthia Grace 158CM Mmekọahụ Mmekọahụ
Nke a bụ nnukwu nwa bebi, nnukwu ara ya na-adọrọ adọrọ. O nwere ezigbo ọrụ ndị ahịa. Ọ mara mma nke ukwuu ma dịkwa mma karịa foto. Enweghị m ike ịkọwa mma ya. Ọrụ ndị ahịa bụ ọkachamara ịza ajụjụ m niile.
Addbọchị Added: 2019-03-09 05:07:55 by Michell Meg
Obere ara ara Nnukwu Anya Anya Nora Hobson 158CM Mmekọahụ Mmekọahụ
Anabatara m ya ụnyaahụ ma dinara ya n'abalị. na-adị mma. Odi ka ijide ezigbo nwanyi. Enwetakwara m ọtụtụ onyinye n’aka ndị na-ere ere. Iji maa atụ, wigs, broshuọ, blanket, akwa sexy, wdg Daalụ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-09 04:18:40 nke Reg Graham
Okpokoro egbugbere ọnụ Sigrid Hicks Full Breasts Slim Waist 170CM TPE Doll
Ndewo: Nwa bebi ahụ m natara "Sigrid Hicks" mara ezigbo mma, ọ ghọọla ezigbo onye ezinụlọ m. Ọ dị ezigbo mma. Karịa ihe m tụrụ anya ya - mana ọ na-enweghi m nsogbu, ọ dị arọ karịa ka m tụrụ anya ya. Nginggbanwe ya na ya, n'agbanyeghị ike m, ịkwaga nkwonkwo nwere ike isi ike. - Daalụ nke ọma nnyefe ọrụ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-09 04:09:23 nke Adolph Pollitt
Egbugbere ọnụ Red Sexy 158CM Green Eye TPE nwa bebi Martina Walpole
Ihe m kwesiri ịkọwa bụ na ọrụ gị dị mma. Mgbe m nyere iwu, a ga-akpali gị ịhazi usoro ahụ. A ga-eziga m foto nke usoro iwu zuru ezu maka nyocha na nkwenye tupu mbupu. Ajuju niile ajuju banyere ihe m na-aza bu nke oma. Dị njikere na m ịtụ ihe m chọrọ. Nke a bụ ahụmịhe ịzụ ahịa na-atọ ụtọ ma dịkwa jụụ!
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 03:57:44 nke Tab Christie
Meredith Wallace 165CM H Cup TPE Doll Nnukwu ara
Nke a dị mma, o nwere oke zuru ezu. Ekwetara m na uwe ihe mgbawa ya dọtara m n'ihi na m bụ njikwa edo. Ọzọ, aga m azụtara ya yunifọm ndị ọzọ.
Addbọchị Added: 2019-03-08 03:53:30 by Cara Pansy
Pink Nnukwu ọnụ ara 135CM TPE nwa bebi mkpa Isi Darren Fred
Saịtị a dị mfe iji, ụmụ bebi ha mara mma nke ukwuu na ịgaghị emechu ihu. Azutara m nwa bebi ebe a. Ọ bụ nwa bebi mbụ m. Ugbu a bụ ịzụ ahịa m nke abụọ ebe a. Ndị ahịa ha dị ezigbo mma. Ha chọtara nwa bebi kwesịrị ekwesị maka m.
Addbọchị Added: 2019-03-08 03:46:00 nke Geoffrey Sonmerfield
Mara mma okenye Companion Fan Jiang Lizi 110CM mmekọahụ lsmụ bebi
Mma mma enye. Dị nnọọ adị n'ezie, udidi ahụ na-adị larịị na roba. Nnọọ ọnọdụ. Otú ọ dị, dị ka ahụmahụ m si kwuo, ahụ nwa bebi ahụ dị mfe ịcha, ya mere zere iyi uwe ojii. Na mgbakwunye, mbu ahia nke ngwa ahịa na nkwakọ ngwaahịa zuru oke. Afọ juru m afọ.
Addbọchị Added: 2019-03-08 03:40:13 by Kim Malachi
Rodney Charlotte Nnukwu Anya 132CM Flat Chest TPE Doll
Dị ka onye na-ese ihe, echere m na ahụ ya dị mma. Achọrọ m ịzụta uwe ndị na-arụ ọrụ na ihe m na-eme. Ana m atụle ịzụ nwa bebi ọzọ dị mma ebe a.
Addbọchị Added: 2019-03-08 03:34:49 by Hobart Young
Vera Raman Plump Nnukwu Obere Obere ukwu 168cm TPE lsmụ Bebi
Nwa bebi a na-agbanwe agbanwe! Nwere ike tinye ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla, nke dị oke mma. Akpụkpọ ahụ ya bụ mmadụ nke na ọ na-eyi egwu! N'oge a, nwa bebi m ka nọ na igbe ya, n'ihi na amaghị m ole ọgwụgwọ ga-emetụta akpụkpọ ahụ ya. Agụrụ m ya na ntanetị, ndị isi ndị ọzọ kwuru na ọ dị mfe ịrapara, enwere ụdị omume niile na enweghị ọrụ na uwe ahụ. Ọ ga-amagbu onwe ya maka foto, mana echeghị m na m ga-azụta ihe ọzọ n'ihi na ọ dị ka nwa bebi ị nwere ike igwu egwu ma ọ bụ jikwaa kwa ụbọchị.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-08 03:30:10 site n'aka James Wollaston
Oké egbugbere ọnụ Darts Girl Marcia Ralph 168CM Nnukwu ara Elf TPE nwa bebi
Ee, ọ dị nnọọ ka elf. Enwere m mmasị na ntị ya ma nye m ahụmịhe nwere ezi uche. Lọjistik dịkwa oke. Anatara m ya obere oge m nyesịrị iwu ahụ. Nke a bụ ịzụ ahịa obi ụtọ.
Addbọchị agbakwunye: 2019-03-08 03:23:33 nke Jerome Thomson dere
Cherry Harry 140CM TPE Okpukpe Mmekọahụ Mmekọahụ Na-atọ Blacktọ
Nke a bụ ezigbo ihe nlere na m na-achọ nke a kemgbe ọtụtụ afọ. M agba, mmadụ ọgụgụ nke a ezi postcho bụ ike ahụ. Ọ dị oke ọnụ mana ọ bara uru.
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 03:18:05 nke Hiram Curme
Blue Nnukwu Anya Miranda 100CM Na-adịghị Mma Mma TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
Ọ bịarutere n’ụlọ m n’ehihie ụnyaahụ. Agbalịrị m ya n'abalị ma ọ dị mma! ! Wunye nnukwu ara. Ọ na-adị oke mma. Shapedị nke nwa bebi a na-enwe mmekọahụ bụ ihe ezi uche dị na ya. Ọ na-adị ọkụ ma na-amị amị n'ime ikpu ya, nke a na-eme m ka m ghara ịkwụsị. Enwere m olileanya na m nwere ike iji nka m nwee mmekọahụ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 03:13:04 nke Guy Bauer
Ewepụghị Igbe Chinese Girl XiaoQian 140CM Silicone lsmụ Bebi
Nwa bebi a dị mma. Anatara m ya ụbọchị ole na ole gara aga. Ejirila m ya ọtụtụ oge ruo ugbu a. O kweghị ka m daa. Ahụ ya na-agbanwe agbanwe. Abụ m sọ anụrị.
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 03:07:35 nke Daniel Bacon
Nnukwu Anya 140cm Mmekọahụ Mmekọahụ mara mma ụmụ akwụkwọ China XiaoMi
Nke a bụ ezigbo nwa bebi nke nwere ike iwulite nọmba omenala maka okenye, obere agwa akọwapụtara, ma ọ bụ nnọchi pụrụ iche. Ọnụ ọnụ, dị oke mma.
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 02:54:00 by Beacher Pollitt
Brown Anya 168CM Nnukwu ara, Ronald Rebecca mmekọahụ lsmụ bebi
Nkọwa Ronald dị ezigbo mma ma na-agbanwe agbanwe. Y’oburu na ibu muscular superhero aru, ya mere nka di nma. Ekwesịrị m ịsị na anya ya na-eme ya obi ụtọ.
Addbọchị Added: 2019-03-08 02:47:41 site n'aka Abner Leacock
Anya Anya 166CM Ndị okenye TPE lsmụ bebi Eudora Surrey
Ọ dị mma nke ukwuu ma nye m ezigbo mmetụta. Ma ọ dị oke ọnụ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 02:41:41 site na Webb Gissing
Letitia Huxley Black Skin 163cm TPE lsmụ Bebi Big Butt Companion
Nwa bebi a dị mma. Azutara m akpụkpọ ojii, ma o yiri ka ọ dị obere awọ. Ma nke ahụ dị mma. O yiri otu ihe a. Mmara ya na labia na-amasakarim m. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya.
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 02:35:46 by Mortimer Emmie
Norton Dickey Nnukwu Cock maka Women 160CM TPE Dolmụ Bebi
Egwu. Ọ dị ezigbo mma. Ahụ ya zuru oke. E nwekwara nnukwu n'ike mmụọ nsọ ya. O nwere ike imeju m mgbe ọ bụla. Ọnụahịa ahụ dị oke ọnụ. Ma ọ bara uru.
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 02:28:28 site Ruby Joule
Ihe siri ike Edwina Lawson Obere Obere Egbugbere Ọnụ Mebiri 150CM TPE Dolls
Nke a nwere ike bụrụ ihe kachasị mma TPE nwa bebi n'etiti ndị na-ere ahịa n'ịntanetị. Ọrụ ọsọ ọsọ na ụmụ bebi dị mma. Enyochare m ya nke ọma mgbe m nwetara ya. Ọrụ nwa bebi ahụ siri ezigbo ike. Ihe eji amu nwoke na nwanyi di ezigbo aru. Karịsịa ikpu. Ọ na-adị oke.
Addbọchị Added: 2019-03-08 02:14:44 site n'aka Neil Benson
Nnukwu Anya B Cup Emma Finn 148CM TPE Okpukpe Mmekọahụ
Ọ bụ bebi mmekọrịta nwoke na nwanyị m na-achọ. Ahụla m ya n'ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ. Eji m nlezianya jiri saịtị ndị a (n'ihi na achọghị m itinye ego na mkpofu). Emechara m kpebie zụta ya n’aka gị. O mechara bụrụ na o kweghị ka m daa. O zuru oke. Ọ na-eme m obi ụtọ. Aga m azụtara gị nwa bebi ọzọ.
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 02:08:00 site Ben Marner
Mara mma Nicole McCauley mara mma na-acha odo odo 148CM TPE dolls
Ndị na-emepụta ihe na-enye Nicole nkọwa ziri ezi karịa ụmụ nwanyị. Na ụdị nwanyị niile, ụdị a yiri ka ọ kachasị nso na ụmụ nwanyị. Naanị ihe bụ na achọghị m ịga njem ogologo oge. Ma o kwesiri ichere m.
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 02:01:08 nke Oswald Bowman
Black anya soft ara Blanche 140CM F iko mmekọahụ bebi
Anọ m na-achọ ogologo oge ịchọta onye nwere ezi uche nke nwere ike dochie ihe nlereanya ahụ. Abụ m onye na-ese ihe na mgbe ụfọdụ na-achọ ntụgharị. A na-ere isi na ọnụọgụ iche, nke mere ka ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya, ịkwesịrị ijide n'aka na ị nwetaghị nọmba nke ara buru ibu, mana enwere m mmasị na ha. Echere m na enwere ike iji isi ha mee ihe n'otu oge. Enwere m afọ ojuju maka ịzụ ahịa a.
Addbọchị Added: 2019-03-08 01:51:03 nke Ryan Joe
Nnukwu Anya Anya TPE Nwa bebi Akumi Hakumi
Ekwesịrị m ịsị na nke a bụ ọmarịcha mmekọahụ nwa bebi. Ọ dị m mma nke ukwuu. Ọ dị ezigbo mma ma dị mma maka foto. M ga-azụtara ya uwe na akpụkpọ ụkwụ. Bikini na ya dikwa nma, mana achoro m ihu ya n'uwe ozo.
Addbọchị Tụkwasị: 2019-03-08 01:41:04 site Barry Walter
Tanabe Reiko Nyocha 100CM Ewepụghị Igbe TPE nwa bebi
Ọ dị mma, achịkọtala m ụmụ bebi mmekọahụ nke birila ma bie ihe karịrị afọ 15 ugbu a, mana mgbe m zụtara nwa bebi a, m ga-ekwu na ọ dị ka ibi na ihu, na-ele mma anya nke ukwuu. Mgbe m na-azụrụ Tanabe, ozu ya bụ naanị ụzọ m chọrọ ịga. Nwa bebi a na-adị nro ma dịkwa mma, ọbụnakwa nwee ike iyi uwe ọ bụla, site n'eziokwu ruo na ịgba ọtọ, ọbụnadị na-ajụ ajọ ọnọdụ, na-eyi uwe kwesịrị ekwesị.
Addbọchị Ekere: 2019-03-08 01:26:50 nke Joyce Jordan
Obere ara Asao Miko 100CM mmekọahụ nwa bebi
Abụ m sọ anụrị. Mgbe Asao biara na ulo m, o di ka mmuo ozi. N'ihi na ọ mara mma nke ukwuu. Ana m ekele gị nke ukwuu, dị ka i kwuru. M nwere ike iso ya rie nri abalị.
Addbọchị Added: 2019-03-08 01:11:52 site Ian Huggins